YEYINTNGE(CANADA): Friday, September 04
ဒေါ်ခင်ခင်ထက် ( ခ ) Lilian Smith @ ဒေါ်လှလှမြင့် Managing DirectorTanjong Pagar Cantonment Towers.Blk 13 # 30-29Ph- 97788251Fax-- 67370163Email-- atlanticsolution@hotmail.comယခုအမျိုးသမီးသည် မြန်မာများကို အလုပ်ရှာပေးမည် ဟုဆိုကာပိုက်ဆံတောင်းပြီးသူဌေးနှင့် ပေါင်းကာ မြန်မာများအားပြန်လည်အလုပ်ဖြုတ်ပြီး ငွေကိုလိမ်လည်စားနေပါသည်။ မြန်မာများဘက်မှကာကွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ဤအမျိုးသမီး ဖြင့် အလုပ်ရှာခိုင်းသောမြန်မာမိန်းခလေး နှင့် ယောင်္ကျားလေးများအလွန်ပင်ဒုက္ခရောက်ရပါသည်။ ဤအမျိုးသမီးသည်ငွေရပြီဆိုလျှင်ငွေပေးထားသောသူကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ကာနောက်ထပ်လူသစ်များထံမှငွေလိမ်လည်စားရန်နည်းမျိုးစုံဖြင့်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်။ထို့ အတွက်ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းများ သိသင့် သိထိုက်သောစင်ကာပူက အမျိုးသမီးအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်ရပါသည်။ဤစာကိုဖတ်ပြီးသောသူငယ်ချင်းများ တစ်ခြားမိမိတို့ ရဲ့ သူငယ်ချင်းများထံသို့ စာများကို ဖြန့် ဝေပေးချင်းနှင့် ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။မြန်မာအချင်းချင်းဂုတ်သွေးစုတ်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို စာဖြန့် ဝေသောအနေဖြင့် ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။နောက်ဆက်တွဲယခုအမျိုးသမီးသည် အမှန်တကယ်ကျွန်တော် ၊ ကျွန်မတို့ ထံမှစင်ကာပူငွေကိုလိမ်လည်သွားပါသည်။မူလစာရေးပြီးသတိပေးချိန်နောက်ကျသွား၍ ကျွန်တော်ကျွန်မငွေလိမ်ခံလိုက်ရပါသည်။ ဤအမျိုးသမီးသည် အထက်ပါစာအတိုင်းကျွန်တော်ကျွန်မတို့ ထံမှငွေကိုလိမ်ယူကာ ၊ အဆက်အသွယ်ဖျက်ပြီး ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုစင်ကာပူမှာနေသည့်STAYမကုန်မချင်းကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ကာထားရှိပါသည်။သူမထံအကြိုးအကြောင်းဖုန်းဆက်သော်လည်းဖုန်းမကိုင်ပဲနဲ့ သူမ၏ မိတ်ဆွေထံမှ ဖုန်းဆက်လာပြီးဖြစ်ပျက်နေသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခြင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ အားခြိမ်းခြောက်ခဲ့ ပါသည်။ သူတို့ က စင်ကာပူမှာနေတာ ၁၅ နှစ်ရှိပြီငါတို့ လုပ်ရင်နင်တို့ ခွေးပြေးဝက်ပြေး နဲ့ ပြန်သွားရလိမ့် မယ်ဟုရိုင်းစိုင်းစွာ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ ပါသည်။ သူတို့ တစ်သိုက်က စင်ကာပူမှာနေတာ ၁၅ နှစ်လုံးလုံးမြန်မာဘယ်နှစ်ယောက်ကိုလိမ်စားနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ကျွန်မ တို့ မသိရတာအမှန်ပါ။ သူတို့ နှင့် အတူပေါင်း ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံသားသူဌေးတစ်ဦးလည်းပါပါသေးတယ်။ အဲ့ ဒီသူဌေးက မြန်မာမိန်ကလေးများကိုမတရား တစ်နေ့ ကို အလုပ်ချိန် ၁၂ နာရီခိုင်းပြီး တစ်လလုံးပိတ်ရက်မရှိပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်နေရပြီး အင်တာဗျူးတုံးကပြောထားတာလစာက S$ ၁၀၀၀ လို့ ပြောထားပြီး တကယ်တန်းလစာထုတ်တော့S$ ၃၁၅ပဲရပြီးအရမ်းကိုဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။ အလုပ်ရှင်ကနည်းမျိုးစုံသုံးကာ ပိုက်ဆံကိုဖြတ်တောက်ယူပါတယ်။အလုပ်ကထွက်ချင်ရင်လည်းသူတိုမတရားလက်ဗွေနှိပ်ထားတဲ့့အတွက်ပိုက်ဆံလျှော်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး လျှော်ရမဲ့ ပိုက်ဆံက S$၁၀၀၀၀ဖြစ်တော့ တော်တော်ကိုအခက်အခဲတွေ့ နေကြရပါတယ်။နောက်ပြီး အဲ့ ဒီသူဌေးနဲ့ အတူမြန်မာပွဲစားများက S' pass နှင့် အလုပ်ရမည်ဟုဆိုပြီးပိုက်ဆံတောင်းကာ၆ရက်တစ်ပါတ်နှင်အလုပ်ထုတ်ကာနောက်တစ်ယောက်အားထပ်မံတောင်းယူလိမ်လည်ပြန်ပါတယ်။ သူဌေးရဲ့ ကုပ္မဏီလိပ်စာကတော့ ..............HONG HUANG TRADING & THREE STARS TRADING CO55 KAKI BUKIT INDUSTRIAL TERRACESINGAPORE 416135Phone -- 67483833Fax --67482322အမှန်တကယ်ခံစားရတဲ့ ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ ကိုကူညီသောနေဖြင့် ဤစာကိုထပ်မံဖြန့် ဝေပေးကြပါခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံသာအချင်းချင်းကလိမ်ကကျစ်လုပ်ကာနိုင်ငံခြားသားနဲ့ ပေါင်းပြီးဂုတ်သွေးစုတ်နေသော်မြန်မာအမျိုးယုတ်တွေ နောက်ထပ်လိမ်လည်စားသောက်လို့မရအောင်ကူညီဖြန့် ဝေပေးကြပါခင်ဗျာ။ Summary only...
စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၉ အာဏာရှိသူနဲ့အာဏာမဲ့သူသြဇာရှိသူနဲ့ သြဇာမဲ့သူလစာစားသူနဲ့ လစာမဲ့သူမှန်ကန်သူနဲ့ မှားယွင်းသူအခွင့်ထူးခံသူနဲ့ အနစ်နာခံသူဤလူကြားမှာ ပြသနာရှိစမြဲ---စကားကြီးကျယ်သူနဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သတ်သူလိမ်ညာသူနဲ့ ရိုးသားသူဘက်လိုက်သူနဲ့ ဖြောင့်မတ်သူအားကြီးသူနဲ့ အားနွဲ့သူမိုက်ရိုင်းသူနဲ့ ယဉ်ကျေးသူဤလူကြားမှာ ပြသနာရှိစမြဲ၊ကြမ်းတမ်းသူနဲ့ ငြိမ်းချမ်းသူလက်ရုံးရည်ကိုင်သူနဲ့ နှလုံးရည်ကိုင်သူလက်နဲ့ရေးသူနဲ့ ခြေနဲ့ဖြတ်သူတောင်းဆိုသူနဲ့ ပယ်ချသူအသိအမှတ်ပြုသူ လျစ်လျူရှုသူဤလူကြားမှာ ပြသနာရှိစမြဲ၊အထက်ဖားအောက်ဖိ-နအဖမှာလည်းရှိအတိုက်အခံတော်လှန်ရေးထဲမှာလဲထပ်ရှိအတိမ်အနက်မသိအဖြေညှိပြီးရှာ ပြသနာရှင်းတာလွယ်လွယ်လေးများနိဂုံချုပ်ရိုးထုံးစံရှိပါသလား၊ဥက္ကာSOURCE Summary only...
ကိုးကန့် ပဋိပက္ခ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အားနည်းချက်ကို ဖော်ပြ
Wednesday, 02 September 2009 19:00 ရဲနည်မြန်မာ စစ်အစိုးရတပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ ကိုးကန့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များအကြား မကြာသေးမီက တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့သည်။ဤအချက်ကပင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး အပျက်အစီး ကြီးမားစွာကြုံနေရစဉ်မှာပင် စစ်အစိုးရက အတင်း အကျပ် အတည်ပြုခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် အားနည်းချက်များရှိနေကြောင်း ထင်ရှားစွာ ပြသနေသည်။စစ်အစိုးရက အထူးဒေသ (၁) ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် ကိုးကန့်ဒေသအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးစုများ ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစု တပ်မတော် (MNDAA) ဟုခေါ်သော ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲများပြီးဆုံးခဲ့ပြီ၊ အခြေအနေ ပြန်လည် တည်ငြိမ်လာပြီဟု လွန်ခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ကြေညာခဲ့သော်လည်း ဤတိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်အစိုးရတပ် နှင့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ဒေသရှိ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအကြား မယုံသင်္ကာမှုများ ဆက်လက်ရှိ နေကြသကဲ့ သို့ သံသယများလည်း ပို၍ကြီးထွားလာစေသည်။နေပြည်တော်ရှိ စစ်အစိုးရက ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလတွင် တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအားလုံး ၎င်းလက်အောက်ခံ နယ်ခြား စောင့်တပ်ဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရမည်ဟု ညွှန်ကြားခဲ့ချိန်မှစ၍ ဆက်ဆံရေး ယိုယွင်းပျက်ပြားလာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။စစ်အစိုးရက တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ်အဖွဲ့များ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဆောင်ရွက်လိုပြီး၊ သူတို့ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကြောင့်လည်း ဤသို့ဆောင်ရွက် လိုပုံရသည်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း ၇ ၊ "တပ်မတော်" အခန်း၊ ပုဒ်မ ၃၃၈ တွင် တနိုင်ငံလုံးရှိ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံး သည် တပ်မတော်၏ အမိန့်ပေးမှုအောက်တွင် ရှိရမည်၊ တပ်မတော်သည်သာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် ပင်မ လက်နက်ကိုင် အင်အားစု ဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။စစ်အစိုးရက ကမ်းလှမ်းထားသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေး အဆိုပြုချက်ကို အကြောင်းပြန်ရန် အတွက် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့်ရက် ဇွန်လ (၃၀) ရက် မတိုင်မီ စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေး အကြီးအကဲလည်းဖြစ်၊ နယ်ခြား စောင့်တပ် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကော်မတီ ၏ အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်သူ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်က ၀၊ ကိုးကန့်၊ မုန်းလား ဒေသများကို အကြိမ်ကြိမ်သွားရောက် တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။မြန်မာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များကလည်း ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကချင် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ခေါင်း ဆောင် များနှင့် အလားတူတွေ့ဆုံ တိုက်တွန်းခဲ့သည်။လက်ခံသူဟူ၍ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ (DKBA) နှင့် ကချင် ပြည် ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော်(NDA-K) တို့သာရှိပြီး ကျန်တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ်အဖွဲ့များက နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင် ပြောင်းရေး အဆိုပြုချက်ကို လက်မခံ ပယ်ချ ခဲ့ကြ သည်။ သို့ဆိုလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ ပင်မကျလှသည့် ပြဌာန်း ချက်ကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဖော်ပြချက်များအရ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီထားသည့် လက် နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့ ရှိသည်ဟု သိရသည်။အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရှိထားသော်လည်း ယခုအခါ မြန်မာ စစ်အစိုးရနှင့် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွား လာနိုင်သည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များက စစ်ရေးပြင်ဆင်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ စစ်သားစုဆောင်းမှု များ၊ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပေးမှုများ ရှိသကဲ့သို့ လက်နက်ငယ်နှင့် ကျည်ဆန် ထုတ်လုပ်သူများလည်း ရှိလာသည်။ အထူး သဖြင့် ၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (UWSA) က ၎င်းတပ်ဖွဲ့များ ကိုယ်ပိုင်သုံးရန်နှင့် ဒေသအတွင်းရှိ အခြားသူပုန်တပ်ဖွဲ့များကို ရောင်းချရန် လက်နက်ငယ်စက်ရုံ၊ ကျည်စက်ရုံများ တည်ထောင်ထားပြီဟု ဆိုသည်။ ဂျိန်း စစ်ဖက်ရေးရာ သတင်းစာစောင် (Jane’s security report) ဖော်ပြချက်အရလည်း ၀ တပ်ဖွဲ့များက ဒေသအတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင်သူပုန်တပ်ဖွဲ့များအနက် ပထမဦးဆုံး လက်နက်ငယ်စက်ရုံတခု အောင်မြင်စွာ တည်ထောင်နိုင် ခဲ့ကြပြီဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၀တပ်ဖွဲ့များက တရုတ်နိုင်ငံရှိ လက်နက်ထုတ်လုပ်သူများထံမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ သူပုန်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ကချင် တပ်ဖွဲ့များအတွက် လက်နက်ရောင်းဝယ်ပေးနေသကဲ့သို့ ကြားပွဲစားအဖြစ်လည်း အလုပ်ဖြစ်နေကြသည်ဟု သိရ သည်။လေ့လာ သုံးသပ်သူများက နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ သည်းညည်းခံနိုင်မှု နည်းပါးလာပြီ၊ အခြားရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိ၊ တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို နောက်ဆုံးစစ်ရေးထိုးစစ်များ ဆင်နွှဲ တော့မည်ဟုလည်း ယူဆနေကြသည်။အဆိုပါ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းရေး အဆိုပြုချက်ကို တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ လိုက်နာလာစေရေးအတွက် နည်းပရိယာယ်အနေနှင့် စစ်အစိုးရက ကိုးကန့်အဖွဲ့ကို စတင်ဖိအားပေးလာခဲ့သည်။ တရားမ၀င်လက်နက်ထုတ်လုပ်နေ သည်ဟု စွပ်စွဲလာခဲ့သည်။ ကိုးကန့် (MNDAA) အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖုန်ကြားရှင်၏ အိမ်တွင် လက်နက်စက်ရုံရှိနေသည်ဟု အကြောင်းပြ၍ ရှာဖွေမှုများ လုပ်လာခဲ့သည်။စစ်အစိုးရတပ် နှင့် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ အကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြသည့် ဒေသများမှာ လောင်းကစား၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်မှု စသည့် ရာဇ၀တ်မှုတို့ဖြင့် ကျော်စောသည့် ဒေသများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း စစ်အင်အား အသုံးပြုပြီး တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များကို “ဥပဒေဘောင်အတွင်း” သွပ်သွင်းရန်၊ ထိုအဖွဲ့များ၏ ခြိမ်းခြောက်နိုင်မှုကို ဖယ်ရှား ရန်၊ လာမည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၏ “တရားဝင်မှု”တချို့ ရရှိရန် စသည်တို့အတွက် စစ်အစိုးရတွင် ဆင်ခြေပေးစရာ ဖြစ်နေ သည်။ယခုအခါ စစ်အစိုးရက တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် တပ်ပြင်ဆင်ချထားမှုများကိုလည်း အလျင်အမြန် အားဖြည့် ဆောင်ရွက်နေသည်။ ယခင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နှင့် စတင်ထားခဲ့သည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ရွှေခေတ် နိဂုံးချုပ်ပြီး စစ်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာဦးမည်လောဟူသည့် စိုးရိမ်မှုများလည်း ကြီးထွားလာနေသည်။ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ယခုလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲသည် တိုင်းရင်း သားလူမျိုးစုတို့၏ ဒေသများအတွက် မည်သို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်လိမ့်မည်ကို ထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြနေပေတော့သည်။တိုင်းရင်းသားများအနေနှင့် ယခင် ကြုံတွေ့နေကြရသည့် ပဋိပက္ခများ၊ ဒုက္ခသည်များ ထွက်ပြေးကြရမှုများနှင့် လူ့အခွင့် အရေး အကြီးအကျယ် ချိုးဖောက်မှုများကိုသာ ကြုံကြရလိမ့်ဦးမည်ဆိုသည်မှာ ထင်ရှားနေပေတော့သည်။ ရဲနည်ရေးသားသည့် Kokang Conflict Highlights Constitutional Flaw ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။ Summary only...
မြန်မာ၏ နယ်စပ်ထိန်းချုပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုက တရုတ်ကို အခက်တွေ့စေ
လယ်ရီ ဂျေဂင် သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 04 ရက် 2009 ခုနှစ် 13 နာရီ 18 မိနစ်ဘန်ကောက် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်အသွားအလာများ ဆက်တိုက် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနှင့် တရုတ်နယ်စပ်တွင် မလွယ်ကူလှသော တည်ငြိမ်မှု ပြန်လည်ရရှိလာသည်။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ဘုန်းဆွေ ဦးဆောင်သော မြန်မာအဖွဲ့သည် တရုတ်ပြည့်သူ့လုံခြုံရေး ဝန်ကြီး မန်ဂျီယန်နှင့် တနင်္လာနေ့က တရုတ်ပြည်တွင် အဆင့်မြင့် အစည်းအဝေးတခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။“မြန်မာဘက်က နယ်စပ်တလျှောက်မှာ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်အောင် မြန်နိုင်သမျှ အမြန်လုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်“ ဟု အင်္ဂါနေ့က ပေကျင်းတွင် ပုံမှန်ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခု၌ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဂျီယန်ယုက သတင်းထောက်များကို ပြောကြားသည်။နှစ်နိုင်ငံသံတမန်များသည် တရုတ်နယ်စပ်တလျှောက်တွင် ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသား သူပုန်များကို ချေမှုန်းရန်အတွက် မြန်မာစစ်တပ်မှ ရုတ်တရက် ထိုးစစ်ဆင်မှုအပြီး သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်း အလွန်ပင် အလုပ်ရှုပ်သွားခဲ့ကြသည်။ဒုက္ခသည်များအား နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးထားသော ယူနန်နယ်မှ တရုတ်အာဏာပိုင်များ အဆိုအရ လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်းက တိုက်ပွဲများ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ဒုက္ခသည် ၃၀,၀၀၀ ကျော် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက် လာခဲ့သည်။မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA) ဟုခေါ်သော ကိုးကန့်တပ်အား တိုက်ခိုက်မှုသည် ပေကျင်းကို တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့သလို စစ်အစိုးရနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေသော ၎င်း၏ ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ခါရမ်းပစ်လိုက်လေသည်။တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားကတည်းက တရုတ်အစိုးရသည် အခြေအနေကို မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်မဖြစ်ခင် တည်ငြိမ်မှုရှိအောင် ကြိုးစားသည့်အနေနှင့် ချက်ချင်းပင် ပေကျင်း၏ သံရေးတမန်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်လာခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် အစည်းအဝေးများကို မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော် နေပြည်တော်နှင့် ပေကျင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပူပန်သတိရှိမှု၊ အံသြမှုတို့နှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိသော အကြမ်းဖက်မှုများ ထိန်းချုပ်တားဆီးနိုင်ရန် ပေကျင်းက ထိုဒေသတွင်းသို့ ရာပေါင်းများစွာသော အပိုတပ်များနှင့် လက်နက်တပ်ဆင်ထားသော ရဲများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။အခြေအနေအရ အမည်မဖော်ဘဲ ပြောဆိုသော တရုတ်အထက်တန်းအစိုးရအရာရှိတဦး၏ အဆိုအရ တရုတ် ဗဟိုအာဏာပိုင်များသည် နယ်စပ်တလျှောက် မြန်မာစစ်တပ်၏ အပြုအမူကြောင့် အလွန်အမင်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရကာ ကြိုတင်အသိမပေးခြင်းအပေါ် ဒေါသဖြစ်ရသည်ဟု သိရသည်။ပေကျင်း၏ စိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်ရမှုကို ပြောကြားရန်အတွက် အထက်တန်း သံတမန်တဦးသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က နေပြည်တော်သို့ လေယာဉ်ဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများ အဆိုအရ တရုတ်နယ်စပ်တလျှောက် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မတည်ငြိမ်မှုများအတွက် ယခုအခါ မြန်မာက တောင်းပန်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။နယ်စပ်သည် ပေါက်ကွဲနိုင်ခြေရှိသော နေရာတခုမဟုတ်တော့ကြောင်း ကူမင်းမှ အမည်မဖော်လိုသော တရုတ်ဒေသခံ အရာရှိတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောကြားခဲ့သည်။“အခုလက်ရှိတော့ ဒုက္ခသည်တွေ မြန်မာပြည်ထဲကို ပြန်နေကြပြီ။ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်က အခြေအနေဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်“ ဟု မစ်စ်ဂျီယန်က ပြောသည်။ “တရုတ်နဲ့ မြန်မာဟာ ရင်းနှီးတဲ့ အိမ်နီးချင်းကောင်းတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာကို မြင်ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်“ ဟု သူမက ထပ်ပြောသည်။ယခုအခါ ဒေသတွင်းရှိ အခြားနိုင်ငံများနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရအား စစ်မှန်သည့် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန် တွန်းအားပေးရေးအတွက် အပြည်အပြည်ဆိုင်ရာမှ ချဉ်းကပ်မှုများအပေါ် အရေးကြီးသော ရိုက်ခတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် နိုင်ငံနှစ်ခုအကြား တည်ရှိနေသော ထင်ရှားသည့် အက်ကွဲကြောင်းသည် ပိုမို၍ သက်သေပြနိုင်လာပါသည်။နယ်စပ်ဒေသအတွင်းရှိ အထူးသဖြင့် ကိုးကန့်နှင့် ဝ ကဲ့သို့သော တိုင်းရင်းသားအုပ်စုအများစုသည် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ရယူထားသလို အစဉ်အလာအားဖြင့်လည်း တရုတ်အာဏာပိုင်များနှင့် နီးကပ်သော ဆက်သွယ်မှုများ ရှိနေကြသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကြီးထွားလာသော ဆန့်ကျင်ကွဲပြားလာမှုသည် အဆိုပါ ဒေသများသို့ သိသာစွာ သက်ရောက်မှုများ ရှိနေနိုင်သည်။ထိုဒေသသည် စီးပွားရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအရသော်လည်းကောင်း မြန်မာအစိုးရထက် တရုတ်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်မှုရှိသည်မှာ အသေအချာ ဖြစ်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများသည် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်းက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကို အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်လာကာ အလုပ်အကိုင်များနှင့် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ထိုတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် အများအပြားသည် ကျန်းမာရေးကုသမှု ခံယူရန် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ တရုတ်ဆေးရုံများသို့ သွားရောက်ကြကာ၊ သူတို့၏ သားသမီးများကိုလည်း တရုတ်ကျောင်းများသို့ ပို့ထားကြသည်။ တရုတ်ဘာသာစကားနှင့် တရုတ်ငွေကြေး ယင်မင်ဘီ ကိုပင် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်နှင့် ဝ' ဒေသတခုလုံးတွင် သုံးစွဲကြသည်။မြန်မာပြည်တွင်းရှိ သူတို့၏ တိုင်းရင်းသားညီအကိုများဖြစ်သော ဝ၊ ကိုးကန့်နှင့် ဗဟိုအစိုးရအကြား ရွေးချယ်ရန် ပေကျင်းအား ဖိအားပေးသည့် မည်သည့်အရာမဆို ပေကျင်းအား ကြီးမားသောပြသာနာ ဖြစ်စေသည်။ အဆုံးတွင် မြန်မာနှင့် တရုတ်ဝင်ရိုး၏ တကယ့်သဘာဝကို ထင်ရှားပြတ်သားစွာ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်သည်။ကိုးကန့်များသည် လူမျိုးအရ တရုတ်အနွယ်များဖြစ်ကာ တရုတ်စကား ပြောဆိုကြသော်လည်း မြန်မာပြည်တွင်း၌ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။ သူတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်လက်နက်ကိုင် ပြည်သူ့စစ်များရှိကာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို သဘောမတူခင်အထိ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တောင်းဆိုရင်း မြန်မာစစ်တပ်အား တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်။လာမည့်နှစ်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် စစ်အစိုးရသည် အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များအား (အဓိကအားဖြင့်) ကချင်၊ ကိုးကန့်နှင့် ဝ တို့ကို လက်နက်ချရန် ဖိအားပေးလျက်ရှိသဖြင့် နယ်စပ်ဒေသများတွင် လပေါင်းများစွာကြာအောင် တင်းမာမှုများ ရှိနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ စစ်အစိုးရက သူတို့အား နယ်စပ်လုံခြုံရေး တပ်များအနေနှင့် လက်ခံပေါင်းစည်းစေချင်ခဲ့သော်လည်း တရုတ်နယ်စပ်ရှိ အဓိက တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများက ထိုကိစ္စကို တင်းခံနေခဲ့သည်။“နောက်ပိုင်းရက်များတွင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမှုများနှင့် စစ်ရေးရင်ဆိုင်မှုများ ပိုမိုရှိလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရကာ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရွာသားများသည် ထိုစစ်ပွဲများနှင့် နောက်ဆက်တွဲ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအား ရှောင်ရှားနိုင်ရန် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးလာနေကြသည်“ ဟု ကိုးကန့်အဖွဲ့မှ ထုတ်ကာ ယခုသီတင်းပတ် အစောပိုင်းက မဇ္ဈိမသို့ ပို့ပေးခဲ့သော ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။ကိုးကန့်ဒုက္ခသည်များ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လာသည့် နေရာနှင့် မဝေးလှသော တရုတ်မြို့တမြို့ဖြစ်သည့် ရိုင်လီအခြေစိုက် မြန်မာအတိုက်အခံများ အဆိုအရ အနှစ် ၂ဝ သက်တမ်းရှိသော စစ်အစိုးရနှင့် ကိုးကန့်တို့အကြား အပစ်ရပ် သဘောတူညီချက်မှာ အမှန်တကယ် အဆုံးသတ်သွားသည်ဟု ထင်ရကြောင်း ဆိုသည်။တရုတ်နယ်စပ်အနီး တိုက်ပွဲများမှာ ခေတ္တခဏ ရပ်သွားသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ကိုးကန့်မြို့တော်လည်းဖြစ်၊ နယ်စပ်မြို့လည်းဖြစ်သော လောက်ကိုင် တောင်ဘက်ပိုင်း၏ အခြေအနေမှာမူ တင်းမာနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုဒေသရှိ UN အဖွဲ့များ အဆိုအရ ကိုးကန့်ပြောက်ကျားများအား ထိုးစစ်ဆင်နေသော အဆက်မပြတ် စစ်ဆင်ရေးများကြောင့် လားရှိုးလမ်းကိုလည်း ပိတ်ထားရကြောင်း သိရသည်။ယခုအခါ စစ်အစိုးရတပ်များသည် ပြန်တိုက်ရန် သေချာသလောက်ရှိသော ဝ'တပ်ဖွဲ့ကို ဖယ်ပစ်ရန် ကြိုးစားလိမ့်မည်ဟူသော စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေလေသည်။ ဝ'တပ်ဖွဲ့များသည် ကိုးကန့်ပြောက်ကျားတပ်များလို မဟုတ်ဘဲ စေလွှတ်နိုင်သော (ရှေ့ထွက်အင်အား) လက်နက်ကိုင်စစ်သား ၁၅,၀၀၀ ကျော် ရှိသည်။မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို နီးကပ်စွာ စောင့်ကြည့်နေသော တရုတ်အစိုးရအရာရှိတဦး အဆိုအရ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ပြန်ဖြစ်လာနိုင်သည့် ကြီးမားသော အန္တရာယ်ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။ “ပြဿနာကတော့ ဝ'တွေဟာ တရုတ်အစိုးရနဲ့ အရမ်းနီးစပ်ကြပြီး တရုတ်က သူတို့ကို အခုလို အရေးကြီးနေတဲ့ အချိန်မှာ ပစ်ထားဖို့ အရမ်းခက်နေတာပါပဲ“ ဟု သူက ထပ်ပြောပြသည်။ပေကျင်းသည် ယခုအခါ ကြီးမားသော ဆုံးဖြတ်ရခက်သည့် အခြေအနေတခုတွင် ရောက်ရှိနေသည်။ စစ်အစိုးရ၏ ခြေလှမ်းသည် စစ်အစိုးရအတွင်း တရုတ်အစိုးရအား မကြိုက်နှစ်သက်မှုများ တိုးလာနေသည်ဟုသော မကြာသေးခင်က တွေးဆချက်ကို ပိုမို၍သာ အားကောင်းလာစေခဲ့သည်။ပြီးခဲ့သည့် လအနည်းငယ်က စစ်အစိုးရသည် ပေကျင်းနှင့် သဘောထားကွဲမှု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် တော်လှန်ရေးအုပ်စုများ၊ အထူးသဖြင့် တရုတ်နှင့် အထူးဆက်ဆံရေး ရှိနေသော အဖွဲ့များအား လက်နက်အပ်ရန် စစ်အစိုးရ၏ ကြိုးစားမှုကို စိတ်ပါလက်ပါနှင့် ပြန်လည်နောက်ဆုတ်ရန် မလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအတွက် အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းထားသော၊ အရေးအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်သော အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ်ဝက်ဘ်အား စိတ်အားထက်သန်စွာ လက်ခံခဲ့ခြင်းသည် နေပြည်တော်တွင် ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေအား ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြလိုက်သော အချက်တချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မှ သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်း အဆိုအရ မြန်မာနှင့် ပေကျင်းအကြား အခြား အက်ကြောင်းကို ဖော်ပြသော အခြားအချက်တခုမှာ အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းစာတခုဖြစ်သော မြန်မာတိုင်းမ် သတင်းစာ၏ ယခုတပတ်ထုတ် သတင်းစာထဲတွင် စိစစ်ရေးကျပြီးဖြစ်သည့် တိဘက်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် ဒလိုင်လားမား ထိုင်ဝမ်သို့ သွားရောက်ခြင်းအပေါ် ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးအတိုလေးကို ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။၎င်းသည် ပေကျင်းအား အထိမခံဖြစ်စေသော တိဘက်ခေါင်းဆောင်နှင့်ပတ်သက်၍ အနှစ် ၂ဝ ကျော်အတွင်း သူ့နာမည်ကို ပြည်တွင်း မြန်မာသတင်းများတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် တရုတ်တို့သည် လက်ရှိတွင် ဘာလုပ်ရမည်ကို မတွေးတတ်အောင် ဖြစ်နေလေသည်။ သူတို့၏ အကြီးမားဆုံး စိုးရိမ်မှုမှာ မြန်မာသည် သူတို့ကို ကျော်ကာ အနောက်သို့ ရုတ်တရက် လှည့်သွားမည်ကိုပင် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ထံသို့ ဖြစ်သည်။“ကျနော်တို့ ညတွင်းချင်းကို အားလုံး လက်လွှတ်လိုက်ရနိုင်တယ်“ ဟု တရုတ်သံတမန်တဦးက ပြစ်တင်ပြောကြားသည်။ ပေကျင်းသည် အိုဘားမား၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ၌ အမေရိကန်၏ ပြန်လည်အသစ်ပြင်ထားသော စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဒေသတွင်း၌ သူ၏ တည်ရှိမှုကို ပြန်လည်အားကောင်းလာစေရန် သူ၏ ကြိုးစားမှုကို စိုးရိမ်ကြီးစွာ စောင့်ကြည့်နေသည်။တရုတ်အစိုးရသည် မြန်မာကို ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန်၍ မရနိုင်သလို လွဲချော်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက် အစိုးရကို ဖိအားများပြားစွာ ပေးခြင်းလည်း မပြုလုပ်နိုင်သည်ကို နားလည်သည်။“မြန်မာခေါင်းဆောင်များဟာ အတော်ပဲ အထိမခံသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တရုတ်ဟာ စစ်အစိုးရအပေါ် ရှိထားတဲ့ ဘယ်လွှမ်းမိုးမှုကိုမဆို အဆုံးအရှုံးမခံနိုင်တဲ့ စိုးရိမ်မှုကြောင့် သူ့ရဲ့ ပါးစပ်ကို မဟတာသာ ဖြစ်ပါတယ်“ ဟု တရုတ်အစိုးရ အရာရှိတဦးက မကြာသေးခင်က မဇ္ဈိမကို ပြောပြသည်။ယခုထိဆိုလျှင် တရုတ်သည် အနည်းဆုံး ပျော့ပျောင်းသော ချဉ်းကပ်မှုကိုသုံးရန် ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ အရေးကြီးသော ကျန်ရှိနေသေးသည့် မေးခွန်းမှာ ဝ' ကိစ္စအား မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်ကို ပေကျင်းနှင့် နေပြည်တော်အကြား သဘောတူညီမှု ရရှိနိုင်ပါမည်လားဆိုသည်ပင် ဖြစ်သည်။ လာမည့်လများတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား၌ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မည့် အကြောင်းများ ပိုမို၍ပင် ရှိကောင်း ရှိလာနိုင်သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှုများမှာ များပြားလှသည့်အတွက် နှစ်ဖက်စလုံးမှ နောက်ထပ် မည်သည့်ပြဿနာကိုမဆို ငြိမ်းချမ်းသော ဖြေရှင်းမှုဖြင့်သာ ဖြေရှင်းရန် အလိုရှိကြလိမ့်မည်။( မဇ္ဈိမ၏ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းဝက်ဆိုက်တွင် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော Larry Jagan ၏ Burma’s push to control border sends China intoaspin ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။) Summary only...
ဝေ နှင့် စစ်အစိုးရ ပေါင်းမိလျှင် UWSA မလွယ်
ဘရိုင်ယန် မက်ကာတန် (Brian McCartan) သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 04 ရက် 2009 ခုနှစ် 13 နာရီ 27 မိနစ်စစ်အစိုးရ၏ `သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှု´ အကြောင်း အတော်လေးပြောကြသည်။ သို့သော် မျက်စိလျှမ်းနေကြသည်မှာ ဤအခြေအနေများကို စစ်အစိုးရက ဖန်တီးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်နေသော အကွဲအပြဲများကို အသုံးချခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းအဖွဲ့များအပေါ် နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်လာမည့် လှုပ်ရှားမှုများအနက် ကြီးမားသော အကျိုးဆက်များ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်မှာ မြောက်ပိုင်း ဝ'နယ်နှင့် ဝေရှောက်ခန်း ခေါင်းဆောင်သည့် တောင်ပိုင်း ဝ'အဖွဲ့များအကြား ပြဿနာဖြစ်သည်။ဝ'ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (UWSA) ထိန်းချုပ်ထားသော နယ်မြေသည် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက် မြောက်ပိုင်းနယ်မြေနှင့် ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ တောင်ပိုင်းနယ် မြေဟူ၍ နှစ်ပိုင်းကွဲနေသည်။ မြောက်ပိုင်းနယ်မြေမှာ တချိန်က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (BCP) လှုပ်ရှားခဲ့သောနယ်မြေဖြစ်ပြီး ဝ တပ်များက ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ပုန်ကန်ခွဲထွက်ကာ ထိုနှစ်တွင်ပင် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရယူခဲ့သည်။တောင်ပိုင်းဒေသသည် မူလက ကွန်မြူနစ်မဟုတ်သော ဝ' အုပ်စုဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း မြောက်ပိုင်း ဝ'အဖွဲ့နှင့် ပုန်ကန်မှုအပြီးတွင် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်း ဝ' ကို ယခင် ဝ' စော်ဘွားတဦးဖြစ်သည့် မဟာဆန်းနှင့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှ တရုတ်တိုင်းရင်းသားတဦးဖြစ်သူ ဝေရွှယ်ကန်းတို့က ခေါင်းဆောင်သည်။ ယင်းဒေသကို အမှတ် ၁၇၁ စစ်ဒေသဟုခေါ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ဝေနှင့် သူ့ညီများဖြစ်သော ဝေရွှယ်ယင်းနှင့် ဝေရွှယ်လုံတို့ လက်အောက်သို့ လုံးလုံးလျားလျား ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ဝေတို့ ညီအကိုများကို တောင်ပိုင်း ဝ' အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်သာမက UWSA အဖွဲ့ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေသော သူများအဖြစ် မြန်မာပြည်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူများက ယူဆကြသည်။ ဤအဖွဲ့၏ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သော ဝ'ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP) ဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးအဖြစ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ ဝေ သည် UWSA အဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးဌာန အကြီးအကဲအဖြစ် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ဝေ၏ ဘဏ္ဍာရေးရေသောက်မြစ်သည် ထိုင်းနယ်စပ်တလျှောက် ထားရှိသော ဘိန်းဖြူလုပ်ငန်းများကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့် မက်တာအက်ဖတီမင်း စိတ်ကြွဆေးပြားများ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှု အဆက်အသွယ်များလည်း ရှိသည်။ ဝေနှင့် သူ့အပေါင်းအပါများ ရှာဖွေရရှိသော ကြီးမားလှသည့် အမြတ်အစွန်းများကြောင့် UWSA သည် ရှမ်းပြည်နယ်တခွင် နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ကာ သြဇာကြီးထွား လာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စစ်သားအင်အား တိုးချဲ့စုဆောင်းလာနိုင်ခဲ့ပြီး ခေတ်မီလက်နက် ကိရိယာများ ကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးထားနိုင်ခဲ့သည်။ဝေ၏ အနေအထား ပိုခိုင်မာလာခြင်းမှာ တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ဝ'လူမျိုးများကို သောင်းနှင့်ချီ၍ တောင်ပိုင်း ဝ'နယ်သို့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အတင်းအကျပ် ပြောင်းရွှေ့စေနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဝ'တို့က ထိုဒေသအတွင်း လွှမ်းမိုးလာနိုင်ခဲ့ပြီး ဌာနေရှမ်းတိုင်းရင်းသားများကို မောင်းထုတ်၍ ဝ'ကျေးရွာသစ်များ ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဝ' တို့က နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်နေခဲ့သည့် ယခင် ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာ၏ အမာခံနယ်မြေဟောင်းများကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ခွန်ဆာ လက်နက်ချအပြီး ဝေတို့အဖွဲ့ ဝင်ရောက်နေရာယူနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုင်းနယ်စပ်တလျှောက် ထိုနေရာများကို အရယူနိုင်ခဲ့သည်နှင့်အမျှ ဝေတို့အဖွဲ့အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးအပါအဝင် မှောင်ခိုလုပ်ငန်း အများအပြားကို လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရရှိခဲ့သည်။နိုင်ငံရေးအမြင်တွင်လည်း ဝေနှင့် ကျန် UWSA အဖွဲ့တို့ အမြင်မတူကြ။ တိုင်းရင်းသား ဝ'လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် အတော်များများတွင် စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများ ရှိကြသလို၊ အမျိုးသားရေး အကျိုးစီးပွားလည်း ရှိကြသည်။ ဝေကမူ သူ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများ ဆက်လက်ချဲ့ထွင် အရယူနိုင်ရေးကိုသာ ပို၍စိတ်ဝင်စားသည်။မြန်မာစစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခြင်းသည် ဝေ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် စီးပွားရေးအတွက် မကောင်းသည်မှာ သေချာသည်။ သူ၏ တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုမှာ မြန်မာပြည်မထဲတွင် ရှိပြီး သူဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်သည်။ စစ်မက်ဖြစ်ပွားလာလျှင် မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုနှင့် မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် ထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက သူတို့နယ်စပ်မှနေ၍ မြန်မာစစ်တပ်၏ လှုပ်ရှားမှုကို အထောက်အကူပြုပေးလိမ့်မည်။စစ်အစိုးရက ဤအချက်ကို ကောင်းကောင်းသိသည်။ ဝေကို သီးသန့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူပြီး အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြုသည့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့သို့ ပြောင်းလဲရန် အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစား ခဲ့သည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အသေအချာ မသိရသော်လည်း နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်များအရ ဝေက သူ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုနှင့် သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုကို အနှောင့်အယှက်မရှိ လုပ်ခွင့်ရမည်ဟု ယူဆရသည်။ဝေသာသူ့ကံကြမ္မာကို စစ်အစိုးရနှင့် ပုံအပ်ထားလိုက်လျှင် UWSA အတွက် ဘဏ္ဍာရေး အခက်အခဲ အကြီးအကျယ် တွေ့ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဝေ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းကြီးမှ ရှာရသမျှ ငွေအမြောက်အမြားတို့လည်း ထိုင်းနိုင်ငံက ရယူသွားတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဤဆုံးရှုံးရသမျှကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက အစားထိုးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်။ တရုတ်နိုင်ငံက ပေးအပ်နေသော ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီနှင့် အခြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပေးအပ်သော အကူအညီများသည် မူးယစ်ဆေးဝါး မလုပ်ရဟူသော စည်းကမ်းချက်ဖြင့် ပေးအပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအရ ထောက်ခံမှုကို ရရှိရန်မှာလည်း ဤစည်းကမ်းချက်သည် အကြုံးဝင်သည်။ ဝ'အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူရန်မှာ ယခင်ရက်သတ္တပတ်က ကိုးကန့်ကို တိုက်ခဲ့သလောက် လွယ်ကူလျှင် မြန်မည်မဟုတ်သော်လည်း ဝေ၏ ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ အထောက်အပံ့သာ မရလျှင် ဝ'အတွက်လည်း မြန်မာစစ်တပ်ကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန် အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ယခုအထိတော့ တောင်ပိုင်း ဝ'အဖွဲ့က စစ်အစိုးရ၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ခုခံငြင်းဆန်နေဆဲဖြစ်သည်။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု မှန်သမျှကို ပန်ဆန်းနှင့်သာ ပြုလုပ်ပါဟု ပြောဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ဝ' တပ်ဖွဲ့များကမူ ဖြစ်ပွားလာတော့မည့် မည်သည့် ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုကိုမဆို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်အနေအထားတွင် ပြင်ဆင်ထားသည်ဟု သိရှိရသည်။ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့များ ယခင် အပတ်က လျင်မြန်စွာ ကျဆုံးအရေးနိမ့်သွားခြင်းနှင့် ဖုန်ကြားရှင်၏ နေရာတွင် အစိုးရက ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးထားသော ပြိုင်ဘက်နှင့် အစားထိုးလိုက်ခြင်းတို့ကိုကြည့်ပြီး ဝေအဖွဲ့ကလည်း သူတို့အတွက် ရွေးလမ်းကို ပြန်စဉ်းစားလာနိုင်သည်။ ရှေ့တွင်လည်း ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ခွန်ဆာပြခဲ့သော အစဉ်အလာက ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဘိန်းဘုရင်အိုကြီးသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း သူ သေဆုံးချိန်အထိ ရန်ကုန်တွင်ပင် အေးအေးချမ်းချမ်း သက်သောင့်သက်သာ နေသွားခဲ့သည်။(မဇ္ဈိမ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းတွင် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သော Brian McCartan ၏UWSA will be inaspot if Wei sides with junta ကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။) Summary only...
ဦးဥတ္တမခေတ် သံဃာ့သမဂ္ဂီမှ ရွှေဝါရောင်ခေတ် သံဃာ့သမဂ္ဂီသို့
ဇင်လင်း၎ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉ရွှေဝါရောင်သံဃာ့အရေးတော်ပုံသည် ယခု ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာတွင် (၂) နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့က သံဃာတော်တို့အား နိုင်ငံရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိစေရဟု အမိန့်အာဏာဖြင့် တားမြစ်ကန့်သတ်ရုံမျှမက သာသနာ့နယ်မြေအတွင်း လက်နက်ကိုင်ကျူးကျော်ကာ ရဟန်းသံဃာတော်များအား သတ်ဖြတ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ စသည့် သာသနာဖျက်လုပ်ငန်းများကို အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံသုံး၍ လူမဆန်စွာလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ရက်ရက်စက်စက် သွေးထွက်သံယို သတ်ဖြတ်ပြလိုက်ရုံဖြင့် စစ်အာဏာကို အန်တုမှုများ ငြိမ်ကျသွားမည်ဟု စစ်အုပ်စုက ထင်ပုံရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူတို့ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရသည့် အရေးကိစ္စရပ်တိုင်း၌ သံဃာတော်တို့ မားမားမတ်မတ် ရပ်ခဲ့ကြသည့် သမိုင်းအစဉ်အလာကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ မေ့လျော့နေဟန်တူသည်။ ရွှေဝါရောင်သံဃာ့အရေးတော်ပုံ (၂) နှစ်ပြည့်သည့် ယခုနှစ်သည် “ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ” ပျံလွန်တော်မူခြင်း နှစ်(၇၀) ပြည့်ချိန်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေပေသည်။ဆန်ရေစပါးနှင့် သယံဇာတမျိုးစုံ ပေါကြွယ်လှသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းသူပြည်သားတို့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲကျပ်တည်းကာ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြရခြင်းသည် “အစိုးရ ညံ့ဖျင်းလွန်း၍ ဖြစ်သည်” ဟု ၁၉၂၁ ခုနှစ် မတ်လ (၂၃) ရက်နေ့ ဒေးဒရဲမြို့နယ် ဆုကလပ်ရွာ၌ တရားဟောခဲ့သဖြင့် ဗြိတိသျှစစ်ပုလိပ်တို့၏ ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည့် သာသနာ့နယ်ပယ်မှ ထူးခြားသော ရဟန်းတော်ကို မြန်မာတို့မမေ့လောက်သေးဟု ထင်သည်။ ထိုရဟန်းတော်သည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံး ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသော ရဟန်းအာဇာနည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် “ကရက်ဒေါက် ဂက်ဒေါက်” (Craddock, Get Out!) ဟူသော ကြွေးကြော်သံကို အကြောင်းပြု၍ ထိုအာဇာနည်အရှင်ကား “ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ” ဖြစ်လာသည်ကို မှတ်မိကြမည်ထင်ပါသည်။ “ကရက်ဒေါက်” (Sir Reginlad Henry Craddock) သည် ထိုစဉ်က ဗြိတိသျှကိုလိုနီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယဘုရင်ခံဖြစ်သည်။ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ ဟောပြောချက်တခု၌ “ဒီတိုင်းပြည် သူတပါးလက်အောက်ခံ ကျွန်နိုင်ငံဖြစ်နေရင် ဒီတိုင်းပြည်က လူမျိုးဟာလည်း ကျွန်လူမျိုး၊ ဒီလူမျိုးကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာဟာလည်း ကျွန်ဘာသာ ကျွန်သာသနာဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ဘာသာ ကျွန်သာသနာအဖြစ်က လွတ်အောင် သံဃာတော်များ ကျောင်းတွင် ကျိန်းအိပ်မနေကြဘဲ သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့များ ဖွဲ့ပြီး ဒီတိုင်းပြည်ဒီလူမျိုး လွတ်လပ်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ကြတယ်” စသည်ဖြင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဟောပြောခဲ့ပုံမှာ ကြက်သီးထလောက်သည်ဟု မှတ်တမ်းများရှိသည်။ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး လွတ်လပ်ရေးအတွက် ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးခံကာ ဆရာတော်သည် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား နှလုံးရည်တိုက်ပွဲဆင်ခဲ့သည်။ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအမျိုးမျိုးကြားမှ မိမိနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ နိုင်ငံရေးအသိအမြင် ကျယ်ပြန့်တိုးတက်လာစေရန် ထောင်တန်းအကျခံကာ ဟောပြောခဲ့သည့် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် မြန်မာတို့အား အစောဆုံး နိုင်ငံရေးမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သူတို့အနက် ရှေ့ဆုံးတန်းမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ‘ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ’ သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး စတင်သည့် ၁၉၃၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ သက်တော် (၆၀) ပြည့်ချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သဖြင့် ယခု ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာတွင် နှစ်ပေါင်း (၇၀) ပြည့်ခဲ့ပေပြီ။ သို့သော် ဆရာတော်၏ သြ၀ါဒများကား ရှင်သန်နေဆဲရှိသည်။ ဆရာတော် အစပျိုးခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုကား ရဟန်းသံဃာတော်များအကြား၌ ယနေ့တိုင် ရှင်သန်နေဆဲ ဖြစ်ပေသည်။ဆရာတော်၏ ငယ်နာမည်မှာ “ပေါ်ထွန်းအောင်” ဖြစ်၍ အဘ ဦးမြနှင့် အမိ ဒေါ်အောင်ကျော်သူတို့မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၌ (၁၈၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၄) တွင် ဖွားမြင်သည်။ အသက် (၁၅) နှစ်တွင် ကာလကတ္တားမှ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ဆယ်တန်းအောင် သည်။ ထို့နောက် ပခုက္ကူမြို့ ရေစကြိုစာသင်တိုက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေကျမ်းဂန်များ သင်ယူသည်။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရဟန်းဝတ်ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ကြွရောက်၍ ကာလကတ္တားရှိ အိန္ဒိယအမျိုးသားကောလိပ်၌ ပါဠိ၊ သက္ကဋ၊ ဘင်္ဂါလီ၊ မာဂရီ၊ ရှေးဟောင်း ဟိန္ဒူစာပေများ သင်ယူခဲ့သည်။ ထိုကျောင်း၌ပင် ပါဠိပါမောက္ခအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသည်။၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှတဆင့် ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျာမနီတို့သို့ ခရီးလှည့်၍ နိုင်ငံတကာအရေးအရာများကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ဥရောပ၌ရှိနေစဉ် ၁၉၀၅ ခုနှစ် ရုရှ-ဂျပန်စစ်ဖြစ်ရာ ဂျပန်က အနိုင်ရသည့်သတင်းကို ကြားသိရ၍ အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းကို လေ့လာလိုစိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် ဆရာတော်သည် ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ တိုကျိုဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် ပါဠိနှင့်သက္ကဋဘာသာဆိုင်ရာ ပါမောက္ခအဖြစ် (၄) နှစ်နီးပါး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပြန်ခရီးတွင် ကိုရီးယား၊ မန်ချူးရီးယား၊ တရုတ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများသို့ ၀င်ရောက်လေ့လာခဲ့သည်။၁၉၁၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်သောအခါ သူရိယသတင်းစာတွင် နိုင်ငံတကာ တိုးတက်မှုအခြေအနေ အထွေထွေကို နိုင်ငံသားများ ပညာဗဟုသုတရစေရန် ရေးသားတင်ပြခဲ့သည်။ “၀ိုင်အမ်ဘီအေ” ကို စတင်ထူထောင်ခဲ့ကြသော ဦးဘဘေ၊ ဦးမောင်ကြီး၊ ဦးဘရင်တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သူရိယသတင်းစာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည့် ဦးဘကလေး၊ ဦးလှဖေ အစရှိသော ထိုခေတ် လူငယ်လူလတ်များနှင့်လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်ကြကြောင်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများလုပ်ခဲ့သည်။ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ နိုင်ငံရေးအမြင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးသို့ ဦးတည်သည်။ လွတ်လပ်ရေး မရနိုင်သေးမီစပ်ကြား ‘ဟုမ္မရူး’ ခေါ် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ့်အမျိုးသားတို့ ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြဖို့ ရေးသားဟောပြောသည်။ ပညာတတ်လူငယ်လူလတ်များ ဟုမ္မရူးသဘောတရား စိတ်ဓာတ်များကို နားဝင်အောင် ဆွေးနွေးပြောဆိုသည်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရှိစဉ်က အိန္ဒိယ-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ရရှိရန်ကိစ္စများကို ကွန်ဂရက်ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည်။ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း မြန်မာဒေသခွဲ ကွန်ဂရက်ပါတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဒုတိယအကြိမ် သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဂျပန်တွင် ဆရာတော်သည် ပါဠိနှင့် သက္ကဋဘာသာ ပါမောက္ခအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် မြန်မာနိုင်ငံရေးရာကိစ္စများကို ဂျပန်ရောက် တရုတ်ကျောင်းသားများနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့လည်း သွားရောက်ခဲ့၍ တရုတ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံသိကျွမ်းခဲ့သည်။ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်နှင့် အာရှဒေသလွတ်လပ်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးကာနီးတွင် ဆရာတော် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ကြွလာသည်။ ထိုအချိန်မှစတင်၍ မြန်မာလူထု နားမျက်စိပွင့်စေရန် နိုင်ငံတကာမှရရှိခဲ့သော အသိပညာဗဟုသုတများနှင့် ယှဉ်တွဲ၍ နိုင်ငံရေးတရားများ ဟောပြောခဲ့သည်။ ဆရာတော်၏ ဟောပြောချက်များမှာ စကားလုံးပြောင်ပြောင် ထိထိမိမိရှိလှသဖြင့် တရားပွဲတိုင်း ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားသည်ဟု မှတ်တမ်းများရှိသည်။ ဆရာတော်၏ ဟောပြောချက်တရပ်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။“မြန်မာတိုင်းသူပြည်သားတို့ဟာ ကျိုးနွံတယ်ဆိုတဲ့ အောက်တန်းကျစိတ်များကို ဖယ်ရှားပစ်ကြရမယ်။ မြန်မာတိုင်းသူပြည်သား တို့ဟာ စွမ်းရည်သတ္တိရှိကြောင်း၊ ပညာရှိကြောင်းနဲ့ မဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်ကို ပြရမယ်။ ဒီလိုပြနိုင်ရင် ကျုပ်တို့ကို ဘယ်သူကမှ စော်ကားရဲ ဖိနှိပ်ရဲမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘယ်လိုအင်အားကြီးပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အစိုးရဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားအပေါင်း စည်းလုံးညီညာစွာနဲ့ တွန်းလှန်နိုင်ကြရင် တာရှည်ခံနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် အောင်စေချင်ရင် နောက်မတွန့်ကြနဲ့။ ကြောက်အားမပိုကြနဲ့၊ ဒုက္ခကို ပဓာနမထားကြနဲ့၊ ဟုမ္မရူးတို့ လွတ်လပ်ရေးတို့ဆိုတာ ကျုပ်တို့ရထိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ကြီးများဖြစ်တယ်။ ဗျူရိုကရေစီဝါဒသမားတွေက ဘယ်လောက်ပဲ နှောင့်ယှက်နှောင့်ယှက် တကယ်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ သဘောမှန်ဟာ တိုင်းသူပြည်သားတို့ လက်ထဲမှာသာရှိတယ်။˝ထို့ကြောင့်လည်း ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအား ရှေးဟောင်းအတွေးအခေါ် အယူအဆတို့ကို ပယ်လှန်သူ၊ ၀ံသာနုစိတ်ဓာတ် တက်ကြွအောင် လှုံ့ဆော်သူအဖြစ် ထိုခေတ်လူထုက လက်ခံထားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ၀ံသာနုအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့် ‘ဂျီစီဘီအေအသင်းကြီး’ ၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ အောင်မြင်စေရန်အတွက်လည်း ဆရာတော်က များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ဆရာတော်၏ ဟောပြောမှုများကြောင့် အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုလည်း ပိုမိုအရှိန်ရလာသည်။ လူထုအများ နိုင်ငံရေး နိုးကြားလာလျက် ၀ံသာနုအသင်းများလည်း တိုးတက်များပြားလာသည်။ သူရိယသတင်းစာကလည်း ဆရာတော်၏ ဟောပြောမိန့်ကြားချက်များကို ထောက်ခံရေးသားခဲ့သည်။ ဆရာတော်၏ အတွေးအမြင်သစ် ဆောင်းပါးများကိုလည်း သူရိယသတင်းစာက တခမ်းတနား ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူရိယသတင်းစာတိုက်ကို ဆရာတော်၏ ဌာနချုပ်ဟုပင် ထိုခေတ်က သတ်မှတ်ကြသည်။ဗုဒ္ဓသာသနာ စည်ပင်တိုးတက်စေရန် ဦးစွာပထမ ကျွန်ဘ၀က လွတ်အောင်လုပ်ရမည်ဟု ဆရာတော်က ဟောပြောသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအကျိုးအတွက် ‘သံဃာ့သမဂ္ဂီများ’ ထူထောင်ဖွဲ့စည်း၍ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဟု ဦးဥတ္တမက မိန့်ကြားသဖြင့် နိုင်ငံအနှံ့တွင် သံဃာ့သမဂ္ဂီများ ပေါ်ထွန်းလာကာ နိုင်ငံရေးတရားဟောသည့် သံဃာတော်များ တိုးပွားလာခဲ့သည်။ဤသို့ ဆရာတော်၏ ၀ါယမစိုက်ထုတ်မှုကြောင့် ၁၉၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁) ရက် (၂) ရက်တွင် သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့ပေါင်း (၃၀) ကျော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာတော် သံဃာတော်များ ဂျီစီဘီအေအသင်း ခေါင်းဆောင်များ အပါအ၀င် ရဟန်းရှင်လူ ပရိသတ် (၅၀၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒေးဒရဲမြို့နယ် ဆုကလပ်ရွာ တရားပွဲအပြီး ဆရာတော် ဦးဥတ္တမအား နိုင်ငံရေးလုပ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးလိုက်သောအခါ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကြရသည်။ ဆရာတော်ကို အကြောင်းပြု၍ ‘ဂျီစီဘီအေ’ အသင်းကြီးကို လူထုက ပိုမိုထောက်ခံအားပေးခဲ့သည်။ဆရာတော်သည် ပထမအကြိမ်ထောင်ကျရာမှ ပြန်လွတ်လာပြီးနောက် တပြည်လုံးလှည့်လည်၍ နိုင်ငံရေးတရားများ ဟောကြားခဲ့ပြန်သည်။ “အင်္ဂလိပ်ပစ္စည်းကို သပိတ်မှောက်ကြ” “အင်္ဂလိပ်ဆိုင်တွေကို သပိတ်မှောက်ကြ” “တိုင်းရင်းဖြစ် ပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူအားပေးကြ” “တိုင်းရင်းသားဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်ယူအားပေးကြ” “ဒို့လူမျိုးတွေ ညီညွတ်မှ လွတ်လပ်ချမ်းသာမယ်” “ဟုမ္မရူး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရအောင် တောင်းဆိုကြိုးပမ်းကြ” “ကရက်ဒေါက် ဂက်ဒေါက်”(Craddock,Get Out!) စသော ကြွေးကြော်သံများကြောင့် ၁၉၂၄ ခုနှစ် ရန်ကုန် ကျုံးကြီးလမ်း နန်းတော် ရုပ်ရှင်ရုံတရားပွဲအပြီး ဒုတိယအကြိမ် အဖမ်းခံရပြန်သည်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်အောင် ဟောပြောကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဆိုကာ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ် အပြစ်ပေးခံရသည်။မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို ပြန်လှန်လေ့လာသည့်အခါတိုင်း ၀ိုင်အမ်ဘီအေခေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယုဝအသင်း၊ နောင် ဂျီစီဘီအေခေါ် မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ချန်လှပ်ထား၍ မရနိုင်ပေ။ ထိုမြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး တိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာအောင် အထောက်အကူပြုပေးခဲ့ရာတွင် သံဃာတော်များနှင့် သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့များ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုများမှာ အဓိကနေရာမှပါဝင်ပေသည်။ထိုကြောင့် သံဃာတော်များ တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဆောင်ရာ၌ ရှေ့တန်းမှ တက်တက်ကြွကြွပါလာအောင် အဦးဆုံး ဟောပြောခဲ့သော ဆရာတော်ကား ဦးဥတ္တမပင်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ စာပေကျမ်းဂန်များကိုသာ သင်အံလေ့လာလျက် တရားဘာဝနာပွားများနေကြကုန်သော သံဃာတော်တို့အနေဖြင့် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဟောပြောချက်များကို လက်ဦးတွင် နားမ၀င်နိုင်ခဲ့ကြပေ။ နောင်နှစ်အတန်ငယ်ကြာသောအခါ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ နိုင်ငံရေးတရားများမှာ စကားဝေါဟာရအရ မာကြောသော်လည်း လက်တွေ့အနှစ်သာရအရ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် အမှန်ပင်အကျိုးပြုကြာင်း သိမြင်လာကြ၍ ၀န်းရံထောက်ခံလာကြသည်။ထိုစဉ်က ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနှင့် သူရိယသတင်းစာတို့သည် ၀ိုင်အမ်ဘီအေအသင်းကို ပြည်သူတရပ်လုံး ထောက်ခံအားပေးလာအောင် စိုက်လိုက်မတ်တတ် လှုံ့ဆော်ရေးသားခဲ့သဖြင့် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များ တက်ကြွလာခဲ့သည်။ ဦးဥတ္တမ၏ ရိုးသားမှု၊ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့မှု၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူထုအကျိုးကိုသာ ရှေးရှုမှုတို့ကြောင့် ဆရာတော်ကို စံထားကာ သံဃာအများ မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်လာကြသည်။ အစည်းအဝေးများ၊ ကွန်ဖရင့်များတွင် သံဃာတော်များ ပါဝင်ဆွေးနွေး ဟောပြောလာကြသည်။ သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကာ နိုင်ငံ့အရေးအရာများ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာကြသည်။ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒုတိယဘုရင်ခံ ကရက်ဒေါက်၏ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဆန့်ကျင်ကာ ၀ိုင်အမ်ဘီအေကို ထောက်ခံလျက် ဟုမ္မရူးကို တောင်းဆိုဟောပြောခဲ့သည်။ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွင် အမတ် (၁၀၃) နေရာ လျာထားသော်လည်း (၇၉) ဦးသာ ရွေးကောက်ခံဖြစ်သည်။ ကျန်သူတို့မှာ ဘုရင်ခံခန့် ဗျူရိုကရက်များဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဗျူရိုကရက်တို့ တွဲဖက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေပြုကောင်စီတွင် အဆိုတခုတင်ရာ၌ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တို့ မဲအများစုရ၍ နိုင်သော်လည်း ဘုရင်ခံသဘောမတူလျှင် (ဗီတို) ဖြင့် ပယ်ချခံရတတ်သည်။ထို့ကြောင့် ၁၉၂၂ ဇူလိုင် (၁၅)(၁၆) ဂျူဗလီဟောအစည်းအဝေးတွင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမက “ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် ဗျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူကိုမတိုင်ပင်ဘဲ ဗျူရိုကရက်တို့က စီမံအုပ်ချုပ်သောစနစ်ဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် (၇၉) ဦးသည် အာဏာပါဝါမရှိသော ရုပ်ပြလှည့်စားမှုသာဖြစ်သည်။ ပြည်သူက သဘောတူ၍ ဆောင်ရွက်လေဟန် ပရိယာယ်ဆောင်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒိုင်အာခီရွေးပွဲ မ၀င်သင့်။ ဒိုင်အာခီကောင်စီ၌ မပါသင့်။ ဒိုင်အာခီကောင်စီဝင်၍ ပူးသတ်ရေးလုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်။ ဗျူရိုကရက်တို့၏ သြဇာကို မလွန်ဆန်နိုင်” စသည်ဖြင့် ဆရာတော်က ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဆရာတော်၏ မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်တခုမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။“ဟုမ္မရူးအတွက် ကြိုးစားကြရာမှာ ကြောက်လန့်စိတ်တွေ မထားကြနဲ့၊ ကြောက်မွှေးပါရင် ဇာဂနာနဲ့ နုတ်ပစ်ကြရမယ်။ ခိုးရမှာ၊ ဒိုင်အာခီကောင်စီဝင်ရမှာသာ ကြောက်၊ ကျေးလက်က ဒကာတွေ သူကြီးကို မကြောက်ကြနဲ့၊ သူကြီးတင်မက မြို့အုပ်ဝန်ထောက်လည်း ကြောက်ဖို့မလိုဘူး။ သူတို့ထက်ကြီးတဲ့ ဘုရင်ခံဆိုတာလည်း ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ့်လူမျိုး အုပ်ချုပ်ရအောင် ဘုရင်ခံနဲ့ ဗျူရိုကရက်တွေကို နှင်ထုတ်ကြရမယ်။ ကရက်ဒေါက် ထွက်သွားလို့ ဥတ္တမက ဂျူဗလီမှ ထပ်ပြီး အမိန့်ပေးနေတယ်။”ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနှင့် ဂျီစီဘီအေခေါင်းဆောင်များက ဟုမ္မရူး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးရန်၊ သဿမေဓ လူခွန် ဖျက်သိမ်းပေးရန်၊ လယ်ယာမြေ အခွန်အကောက်များ လျှော့ချပေးရန်၊ အဓိကထား၍ ဟောပြောတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ၁၉၃၀ ဆရာစံသူပုန် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းကိစ္စကို ပြန်လှန်သုံးသပ်ရာ၌ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ ဟောပြောချက်များကို အကြောင်းရင်းတချက်အဖြစ် ထည့်သွင်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။၁၉၅၆ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်းမှထုတ်ဝေသော “နှစ်ငါးဆယ် ကမ္ဘာ့ရေးရာ စာအုပ်”တွင် “ဆရာတော်၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့သည် ‘အိပ်သောယောက်ျား နိုးသောလားသို့’ လွတ်လပ်ရေးလမ်းစကို မြင်ကြရ၏။ ဆရာတော်ကား ယခု မြန်မာနိုင်ငံတော်သူ မြန်မာနိုင်ငံတော်သားတို့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် အပိုင်ရှု ခံစား စံစားနေရသော လွတ်လပ်ရေးဗိမာန်ကြီးကို အစဦးစွာ ပန္နက်ချခဲ့သော အာဇာနည်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေတည်း” ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ သမိုင်းနှင့်အာဇာနည်ဂုဏ်ပုဒ်တို့ကို စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်က မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်နေကြသော်လည်း ပယ်ဖျက်၍မရဘဲ ရှိနေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ယနေ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြသော ရဟန်းပျိုမျိုးဆက်သစ်၊ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တို့သည် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးနှင့် အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကို စံနမူယူ၍ မကြာမီ ဆင်နွှဲတော့မည့် တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်သပိတ်တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြပေပြီ။ ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် သံဃာတော်များ၏ တတိယအကြိမ် သံဃာ့သပိတ်တိုက်ပွဲတရပ် ဆင်နွှဲမည်ဖြစ်၍ သံဃာတော်များနှင့်အတူ တပြည်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပါဝင်ကြရန် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီးက သြဂုတ်လ (၂၈) ရက်စွဲဖြင့် နှိုးဆော်ထားပေသည်။ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့ မွန်းတည့်ချိန် နောက်ဆုံးထား၍ သံဃာထုအား တောင်းပန်ရန် နှိုးဆော်ထားသည်။ မလိုက်နာပါက လာမည့်သီတင်းကျွတ်လပြည့် (၁၅) ရက်၊ (၃-၁၀-၂၀၀၉)၊ သံဃာပ၀ါရဏာပွဲနေ့တွင် သံဃာထုကြီးက တတိယအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်သပိတ် ဆင်နွှဲမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီးက ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု နိုင်ငံခြားရေးရာတာဝန်ခံ အရှင်ဣဿရိယ၏ ရှင်းပြချက်အရ တတိယအကြိမ် သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ရာတွင် ထူးခြားချက်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့များက မြတ်စွာဘုရား၏ ၀ိနည်းဥပဒေကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သော သံဃာတော်များ၊ စစ်တပ်နှင့်ပေါင်းသော သံဃာတော်များအား သာသနာတော်မှ ကျဉ်ပယ်ကာ ပကာသနီယ ကံဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ “ဦးဥတ္တမခေတ်” ၁၉၂၀ ခန့်တွင် အစပျိုးခဲ့သော သံဃာ့သမဂ္ဂီ စိတ်ဓာတ်ဝိညာဉ်ကား နှစ်ပေါင်း (၉၀) မျှ သက်တမ်းရင့်ရှည်ခဲ့ပြီးနောက် “ရွှေဝါရောင်ခေတ်” သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့များထံသို့ ဆက်လက်ကူးလူး ထွန်းလင်းလျက်ရှိပေသည်။ ဓမ္မနှင့် အဓမ္မ အားပြိုင်ပွဲ၌ ဓမ္မသည် အဓမ္မအပေါ် အောင်ပွဲဆင်မြဲ ဆင်ပေလိမ့်မည်။-“ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ” ပျံလွန်တော်မူခြင်း နှစ်(၇၀) အထိမ်းအမှတ် ကျမ်းကိုးစာရင်း(၁) ၀ံသာနုအရေးတော်ပုံသမိုင်း (၁၉၀၆ - ၁၉၃၆)၊ သခင်ဘမောင်၊ တသက်တာစာပေ၊ ၁၉၇၅ ဇန်န၀ါရီ။(၂) ဂျူဗလီဟောမြင်ကွင်း၊ တိုက်စိုး၊ ချင်းတွင်းစာပေ၊ ၁၉၇၈ သြဂုတ်လ။(၃) မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း၊ သခင်လွင်၊ ပုဂံစာအုပ်တိုက်၊ ၁၉၆၈ မေလ။(၄) ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းအဘိဓာန်၊ မြဟန်၊ မိုးမင်းစာပေ၊ ၁၉၈၁။(၅) သာသနာ့ဝန်ထမ်းဆိုတာ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ပဲ၊ ၂၅ သြဂုတ် ၂၀၀၉၊ ခေတ်ပြိုင်။ Summary only...
ဖိုင်ရယူရန် ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်များ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်နှင့်တွေ့မည်ခိုင်လင်း / ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကို အဓိကတာဝန်ယူထားသည့် စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်နှင့် ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ယခုလ (၆) ရက်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ တွေ့ဆုံရန်ရှိသည်။ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မနက်ဖန် လိုင်ဇာမြို့တွင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံစည်းဝေးပြီးနောက်ပိုင်း မြစ်ကြီးနားသို့ သွားရောက်ရန်ရှိကြောင်း ကေအိုင်အိုအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။၎င်းက “မြစ်ကြီးနားကို မသွားခင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အရင်တွေ့မယ်။ အကြံဉာဏ်တွေ၊ ခွန်အားတွေ ယူတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ ပြီးမှ မြစ်ကြီးနားကို သွားမှာ၊ အရင်သွားနေကျသူတွေပဲဖြစ်မှာပါ။ သူတို့ အဲလိုဆွေးနွေးဖို့ ကော်မတီဖွဲ့စည်းထားတာ ရှိတယ်လေ။ ဒေါက်တာလှဂျာတို့၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်တို့တွေနဲ့” ဟု ပြောသည်။ကေအိုင်အိုက နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ (BGF) အစား ကချင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KRGF) အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုပြီး အနာဂတ် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်နိုင်ရေး တောင်းဆိုထားသကဲ့သို့ ကေအိုင်အို အဖွဲ့အစည်းတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ (KIA) နှင့် အဆင့်အတန်းတူညီသည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရဲ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အကောက်ခွန် စသည့်ဌာနများလည်း ရှိနေ၍ အဆိုပါဌာနများကိုလည်း အသွင်ပြောင်းဖွဲ့စည်းရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် တင်ပြထားသည်။ကေအိုင်အိုအဖွဲ့နှင့် နအဖအကြား ယခုတကြိမ် တွေ့ဆုံမှုမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆွေးနွေးရန်ပိုများသည်ဟု တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အပစ်ခတ်ရပ်အဖွဲ့များနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။၎င်းက “ကိုးကန့်အရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၉) ရက်နေ့မှာ မပခက ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး သက်ပုံ လိုင်ဇာကိုလာပြီး ရှင်းပြပြီးပြီ။ နယ်ခြားစောင့်ကိစ္စက အခုချိန်ထိ မပြတ်သေးဘူး။ ကေအိုင်အိုဘက်က တင်ပြထားတာကို နအဖဘက်က လက်မခံဘူး။ နယ်ခြားစောင့်တပ်က လွဲလို့ အခြားရွေးခွင့် မပေးဘူး။ အလျှော့အတင်းလုပ်လို့မရတဲ့ အခြေအနေအောက်မှာ။ နောက်တခုက နအဖတပ်တွေက အပစ်ခတ်ရပ်အဖွဲ့တွေကို စစ်ရေးအရ ခြိမ်းခြောက်နေသလို၊ အပစ်ခတ်ရပ်အဖွဲ့တွေလည်း စစ်ရေးသတိနဲ့ တပ်လှန့်ထားချိန်မှာ အခုတွေ့မယ်ဆိုတော့ အန္တရာယ်တော့ များတယ်။ အရေးလည်းကြီးတယ်” ဟု ပြောသည်။ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်ရာ လိုင်ဇာမြို့အနီး ဗန်းမော်-မြစ်ကြီးနား မော်တော်ကားလမ်းတလျှောက်တွင် နအဖစစ်ကြောင်းများ သွားလာလှုပ်ရှားနေ၍ ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်ရာဒေသနှင့် အနီးနားရှိ လူထုမှာ စစ်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများရှိနေချိန်တွင် နအဖနှင့် ကေအိုင်အို၏ တွေ့ဆုံပွဲ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ရပ်ကွက်များစွာ ရေမရပြည်သူများ ဒုက္ခရောက်အောင်ကျော်မိုး / ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြို့နယ်အတော်များများတွင် ရေစုပ်ယူ၍မရ ဖြစ်နေကြပြီး အစိုးရက တစုံတရာ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မရှိသည့်အတွက် ပြည်သူအများ ရေပြတ်လပ်မှုဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။“ရေစုပ်လို့မရတာ (၃) ရက်ရှိနေပြီ။ ရေမရတော့ ရေသန့်ဘူးတွေ ၀ယ်သုံးနေရတယ်။ ဘယ်အချိန်ရေလာမလဲဆိုပြီး ညဘက်ထထ ရေတင်ကြည့်နေရလို့ အိပ်ရေးပျက်တာလည်း (၃) ရက်ရှိနေပြီ။ ကိုယ့်လိုပဲ တတိုက်လုံး ညမအိပ်ဘဲ ရေထထ စုပ်တင်ကြည့်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပဲ” ဟု ပုဇွန်တောင်တွင် နေထိုင်သူတဦးက ပြောသည်။တာမွေနှင့် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တို့တွင်လည်း အလားတူ ရေအခက်အခဲဖြစ်နေပြီး မြေညီထပ်နေသူများသာ တညလုံးမအိပ်ဘဲ ရေထစုပ်မှ ရေအနည်းငယ်ရရှိကြသည်ဟု သိရသည်။စည်ပင်သာယာအနေဖြင့် ရေပေးဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများအား သတင်းထုတ်ပြန် အကြောင်းကြားသင့်ကြောင်း၊ ရေမပေးသည်ကို တစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိသောကြောင့် ပြည်သူများသည် ရေ ရနိုးရနိုးဖြင့် ညဘက်မအိပ်ဘဲ ရေတင်နေကြရသဖြင့် အိပ်ရေးပျက်ကာ ရေစုပ်မော်တာများ ပျက်စီးကုန်ကြောင်း ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူက ပြောသည်။စည်ပင်သာယာမှ ၀န်ထမ်းတဦးကမူ ယခုနှစ်မိုးရာသီ မိုးနည်းကြောင်း၊ လာမည့်နွေရာသီတွင် ရေအခက်အခဲကြုံနိုင်သဖြင့် ယခုကတည်းက ရေကိုသုံးလောက်ရုံ လျှော့ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသော်လည်း သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ရန်ကုန်မြို့တွင်း ရေပေးဝေနေသည့် ရေတွန်းစက်များသည် မီးအားအပြည့်အ၀ မရရှိသောကြောင့် မီးအားပြည့်သည့် ညနက်ပိုင်းရောက်မှသာ ရေတွန်းပေးနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနက ပြည်တွင်းဂျာနယ်များမှတဆင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးသည်။ရန်ကုန်မြို့ခံများမှာ မီးမှန်မှန်မလာသည့်ဒုက္ခအပြင် မိုးတွင်း၌ ရေအခက်အခဲဖြစ်နေသည့်အပေါ် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေကြ သည်ဟု သိရှိရသည်။ မင်းသားကြီး ထွန်းဝေ၏ဓာတ်ပုံနှင့်နာမည် ဖော်ပြခွင့်ရNEJ / ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉ နအဖစာပေစိစစ်ရေးဌာနက နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ထွန်းဝေ၏ဓာတ်ပုံနှင့်နာမည်ကို စက်တင်ဘာလထုတ် ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ဖော်ပြပါရှိသည်။စက်တင်ဘာလထုတ် ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ (၇ဝ) တွင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အကယ်ဒမီ ဒေါ်မြတ်မွန်နဲ့ တွေ့ဆုံခန်း၌ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ထွန်းဝေ၏ဓာတ်ပုံနှင့် အမည်ကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ဦးထွန်းဝေသည် သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းက ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်၊ စာရေးခွင့်များ ပိတ်ပင်ခံရပြီး စာစောင်များတွင် နာမည်ပင် ဖော်ပြခွင့်မရခဲ့သည်မှာ ကွယ်လွန်ချိန်အထိဖြစ်သည်။ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းဂျာနယ်အယ်ဒီတာတဦးက “ဦးထွန်းဝေ ကွယ်လွန်လို့ နှစ်တချို့ကြာမှ ခုလို သတင်းဆောင်းပါးမှာ နာမည်နဲ့ဓာတ်ပုံ ဖော်ပြခွင့်ပြုတာလောက်အတွက်ကတော့ ဝမ်းသာစရာလို့ မထင်ပါဘူး။ ဦးထွန်းဝေရဲ့ဘဝ၊ ဦးထွန်းဝေရဲ့ နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေ အကြောင်းရေးရင်တော့ ခွင့်မပြုမှာ သေချာတယ်” ဟု ပြောသည်။အလားတူ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ထင်ရှားသည့် ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး၏ မြန်မာစာပေခရီး ပင်မရေစီး ဆိုသည့် ဆောင်းပါးတိုတပုဒ်ကို သောကြာနေ့ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် စာမျက်နှာ (၄) ၌ ဖော်ပြထားသည်။အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာ အခြားတဦးကလည်း စာပေစိစစ်ရေးသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များ လွန်ကဲနေသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အနည်းငယ်လျှော့ပေးလာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။၎င်းက “မြန်မာနိုင်ငံထဲက စာရေးဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာတွေကို ထောင်ကျနေတယ်ဆိုရင်လည်း စာရေးခွင့်ပိတ်၊ ကဗျာရေးခွင့်ပိတ်။ နိုင်ငံခြားရောက်နေရင်လည်း စာရေးခွင့်ပိတ်၊ ကဗျာရေးခွင့်ပိတ်။ နိုင်ငံခြားလည်းမရောက်၊ ထောင်လည်းမကျ ဥပဒေဘောင်ထဲမှာ တရားဝင်နေထိုင်တဲ့ သူတွေကိုတောင် စာရေးခွင့်၊ ကဗျာရေးခွင့်ပိတ်ထားတာမျိုး အများကြီး လုပ်ခဲ့တယ်။ ပိုဆိုးတာက တချို့ဆို သေသာသွားရော ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ နာမည်တွေကိုတောင် ဖော်ပြခွင့်မရကြဘူး။ အဲဒီလောက်ကို ဆိုးခဲ့တာ ဆိုးနေတာ” ဟု ပြောသည်။စာပေရေးသားခွင့် လွတ်လပ်သည် မလွတ်လပ်သည်ကို မကြာသေးမီက ဖြစ်ခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတဦး အိမ်ထောင်ပြု ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်ကိစ္စကိုကြည့်ပါက သိနိုင်ကြောင်း၊ အချို့ဂျာနယ်များ လုံးဝဖော်ပြခွင့်မရဘဲ အချို့ဂျာနယ်များ ဖော်ပြခွင့်ရကာ အချို့ဂျာနယ်များမှာ စိစစ်ရေးကခွင့်မပြုဘဲ ဖော်ပြခဲ့သဖြင့် ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးရကြောင်း အဆိုပါ သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာက ပြောသည်။“အားလုံးဟာ စာပေစိစစ်ရေးက လုပ်တာပဲ။ ဒီနေ့ချိန်ထိ ဖြုတ်ချင်တာဖြုတ်၊ ပယ်ချင်တာပယ်၊ ပြန်မေးရင် အငြိုးအတေးထားပြီး နောက်ပိုင်း ရန်ရှာတာမျိုး လုပ်တယ်။ နောက် ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း အချင်းချင်း သိသိသာသာကြီးကို မျက်နှာသာပေးတာ၊ အခွင့်အရေး ပိုပေးတာမျိုးလုပ်ပြီး သွေးခွဲတယ်။ မူနဲ့ စစ်ဆေးတာ၊ ပိတ်ပင်တာကို ဘာကြောင့် ပိတ်ပင်တယ်ဆိုပြီး တရားဝင်ဖြေရှင်းပြတာမျိုး ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။နအဖစစ်အစိုးရ စာပေစိစစ်ရေးသည် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စာများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ နာမည်များ ဖော်ပြခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ပိတ်ပင်မှုများရှိပြီး တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောလေ့မရှိကြောင်း၊ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုကျော်သူကို ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို ရိုက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားသကဲ့သို့ စာရေးဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၏စာမူများကိုလည်း ဖော်ပြခွင့်မပေးကြောင်း စာပေလောက အသိုင်းအဝိုင်းမှ စုံစမ်းသိရသည်။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား နေရပ်ပြန်ပို့ပါကအသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရရဲရင့် / ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် ကရင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ အား မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်မည်ဆိုပါက ယခုလက်ရှိအနေအထားတွင် လုံခြုံမှုမရှိကြောင်း မြန်မာဘက်မှ ဒေသခံများက ပြောသည်။ဇွန်လဆန်းကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တပ်မဟာ (၇) ထိုးစစ်ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ထွက်ပြေးကာ ထာ့ဆောင်ရမ်းမြို့နယ်တွင် ခိုလှုံနေကြသည့် ကရင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် (၄,၀၀၀) ခန့်အား မြန်မာဘက်သို့ပြန်လွှတ်ရန် တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ) ၉၉၉ က ထိုင်းစစ်တပ်နှင့် လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။၉၉၉ တပ်မဟာတပ်ရင်း (၇) မှ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်လိုက်သိမ့်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များက လွန်ခဲ့သည့်တပတ်ကျော်တွင် ဒေသခံထိုင်း စစ်တပ်နှင့် လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း ဒုက္ခသည်များက ပြန်ရန်ငြင်းဆိုခဲ့သဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲ သောင်မတင်ရေမကျဖြစ်ခဲ့သည်။ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကေအန်ယူတပ်မဟာ (၇) ဘားအံခရိုင်အတွင်း တပ်စွဲထားသည့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက ဒုက္ခသည်များအား ပြန်ပို့လျှင် အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်ကြောင်း ပြောကြားသည်။မြေမြှုပ်မိုင်းနင်းမိ၍ ခြေတဖက်ဖြတ်လိုက်ရသည့် အဆိုပါ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူက “ဘားအံခရိုင်အတွင်းမှာ ကျနော်တို့ မိုင်းနင်းမိတာ နေ့တိုင်းနီးပါးပဲ။ အခုဆိုရင် မိုင်းထိလို့ ခြေလက်ဖြတ်ထားတဲ့လူ၊ မဲဆောက်ဆေးရုံမှာ ဒီနေ့လာတဲ့ လူပါဆိုရင် (၁၁) ယောက်ရှိတယ်။ ဒီကေဘီအေကလူတွေ မဲဆောက်ဆေးရုံမှာ တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ (၃) လကျော်ပြီး မကုန်နိုင် သေးဘူး” ဟု ပြောသည်။ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ဝင်များပင် မိုင်းရှင်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ သွားလာလှုပ်ရှားသည့်တိုင် မကြာခဏ မြေမြှုပ်မိုင်းနင်းမိသဖြင့် သေကျေဒဏ်ရာရသူများရှိသောကြောင့် အန္တရာယ်ကင်းမည့်် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများမရှိဘဲ ထိုင်းဘက်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို ပြန်ပို့မည်ဆိုပါက သေတွင်းပို့သကဲ့သို့ဖြစ်မည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ကေအန်ယူတပ်မဟာ (၇) ဒေသအတွင်း ကေအန်ယူဘက်မှ စခန်းဆုတ်ခွာစဉ် မြေမြှုပ်မိုင်းအလုံး (၃,၀၀၀) ခန့် ထောင်ထားခဲ့သဖြင့် မိုင်းပြဿနာနှင့် နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ လာမည့်ပွင့်လင်းရာသီတွင် မြေတူးစက်များဖြင့် မိုင်းရှင်းပြီးလျှင် မြို့သစ်တည်ဆောက်ပြီး ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်း ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီကေဘီအေအရာရှိတဦးက ပြောသည်။ဒေသခံထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဒုက္ခသည်များကို နေရပ်ပြန်စေလိုသော်လည်း ၎င်းတို့ဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းအကျပ် ပြန်ပို့မည်မဟုတ်ဟု ပြောဆိုသော်လည်း ထိုင်းဘက်မှ အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့မည်ကို ဒုက္ခသည်များက စိုးရိမ်နေကြကြောင်းဒုက္ခသည်အရေးကူညီနေသူတဦးက ပြောသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး ဒေါ်စုအမှု အယူခံလက်ခံမင်းနိုင်သူ / ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတွင် ယမန်နေ့က တင်သွင်းထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု အယူခံကို တရားရုံးက လက်ခံကြားနာရန် ယနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီပြောခွင့်ရ ဦးအုံးကြိုင်က ပြောသည်။“နှစ်ဘက်ရှေ့နေတွေ အပြန်အလှန်လျှောက်လဲချက်ပေးဖို့ စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့ကို ရုံးချိန်းပေးလိုက်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အန်အယ်လ်ဒီပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ စတင်၍ နအဖစစ်အစိုးရက နှစ်ပေါင်း (၁၄) နှစ်နီးပါး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ထိုသို့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံနေရစဉ် ယခုနှစ်မေလအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား မစ္စတာယက်တော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အတွင်း ၀င်ရောက်လာခဲ့ရာ နအဖစစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် အင်းစိန်အထူးတရားရုံး၌ တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက် သြဂုတ် (၁၁) ရက်တွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ယင်းကဲ့သို့ အင်းစိန်အထူးတရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းသည် ဥပဒေများနှင့် မလျော်ညီသဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေများက ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးသို့ အယူခံတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာလူငယ်လေး မောင်သောင်ဒီဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားခွင့်ရNEJ / ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံတကာ စက္ကူအရုပ်ချိုး လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဖွား မြန်မာလူငယ်တဦးကို ထိုင်းအစိုးရက ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုလိုက်သည်။အသက် (၁၂) နှစ်အရွယ် မြန်မာလူငယ်လေး မောင်သောင်ဒီ (Mong Thongdee) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၌မွေးဖွားသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက တရားဝင်ခရီးသွားခွင့် လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် လက်မခံဘဲ ငြင်းပယ်လိုက်သည့်အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာအဖိဆစ်က ၀င်ရောက်ကူညီကာ ယမန့်နေ့က မောင်သောင်ဒီနှင့် တွေ့ဆုံအပြီးတွင် ယခုကဲ့သို့ ထိုင်းအစိုးရက သဘောတူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။မောင်သောင်ဒီ၏မိဘများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများဖြစ်ပြီး မောင်သောင်ဒီအား ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက မောင်သောင်ဒီအား နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင်ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာအဖိဆစ်က ပြောကြားကြောင်း ယနေ့ထုတ်ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြသည်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ယခုမောင်သောင်ဒီ၏ ကိစ္စသည် နိုင်ငံမဲ့ကလေးများနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရ မည်ဆိုသည်ကို ထိုင်းအစိုးရဧဂျင်စီများအတွက် အကောင်းဆုံးဥပမာတခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ဂျပန်သံရုံးမှ ဗီဇာရရှိပါက မောင်သောင်ဒီသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ယခုလ (၁၉) မှ (၂၀) ရက်အထိပြုလုပ်မည့် စက္ကူအရုပ်ချိုး လေယာဉ်လွှတ်ပြိုင်ပွဲသို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ယခုလ (၁၆) ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်။“ခရီးသွားခွင့်ရလို့ ကျနော်ဝမ်းသာပါတယ်။ ထိုင်းတွေရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိဖို့ ကျနော့်နောက်မှာ အားပေးကြစေချင်ပါတယ်” ဟု မောင်သောင်ဒီက ပြောကြားခဲ့သည်။ယခုကဲ့သို့ မောင်သောင်ဒီအား ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းသည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များနှင့်သဘောတူထားသည့် သဘောတူညီချက်များ လုံခြုံရေးနှင့် လူအခွင့်အရေးများအပေါ် အခြေခံကာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဌာအကြီးကဲဖြစ်သူက ပြောသည်။မောင်သောင်ဒီသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း မိဘများမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေသည့်အတွက် ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် မောင်သောင်ဒီအား ထိုင်းနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုနိုင်ကြောင်း၊ မောင်သောင်ဒီအနေဖြင့် ဂျပန်တွင်ပြုလုပ်မည့်ပြိုင်ပွဲသို့ ၀င်ရောက်လိုပါက မြန်မာနိုင်ငံသားအနေဖြင့်သာ မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ကြီးချာဝရတ် ချန်ဝီရပ်ကွန်က ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ယခုကဲ့သို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ချင်းမိုင်မြို့ Ban Huay Sai မူလတန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေသော မောင်သောင်ဒီသည် စက္ကူဖြင့် လေယာဉ်အရုပ်ချိုး ခေါက်ရာတွင် ထူးချွန်သူတဦးဖြစ်သည်။ယမန်နှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွင် National Mental and Material Tenology Centre က ကျင်းပသည့် စက္ကူလေယာဉ်ပြိုင်ပွဲတွင် မောင်သောင်ဒီ ပထမဆုရရှိခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံတကာ စက္ကူအရုပ်ချိုးလေယာဉ် ပြိုင်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မောင်သောင်ဒီသည် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားမှ မွေးဖွားသူအဖြစ်သာ ထိုင်းနိုင်ငံက အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းခံရပြီး လာမည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ၌ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်မည့်သူများ စာရင်းတွင် ပါဝင်သူဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု အယူခံကို ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးက လက်ခံ မုံပီး သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 04 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 27 မိနစ်နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်ကို အယူခံဝင်ရန်အတွက် သူမ၏ ရှေ့နေများက ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးထံ ယနေ့ လျှောက်လဲချက်ပေးရာ တရားရုံးက လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့များထဲမှ တဦးဖြစ်သူ ဦးကြည်ဝင်းက သူနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ရှေ့နေများက လျှောက်လဲချက်ပေးပြီးနောက် တိုင်းတရားသူကြီး ဦးမြင့်အောင်က လက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။“တရားသူကြီးက စက်တင်ဘာလ ၁၈ နေ့မှာ နှစ်ဖက်ရှေ့နေတွေ လျှောက်လဲချက်ပေးဖို့ ချိန်းဆိုလိုက်တယ်” ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးက အင်းယားကန်ကို ရေးကူးကာ နေအိမ်အတွင်း ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ကို လက်ခံခဲ့သဖြင့် အကျယ်ချုပ်စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်သည်ဟုဆိုကာ အင်းစိန်ထောင်တွင်း မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက ပြီးခဲ့သည့်လ ၁၁ ရက်နေ‹တွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အား အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။သို့သော်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက တရားရုံး၏ ပြစ်ဒဏ်ကို ထက်ဝက်လျှော့ချကာ နေအိမ်၌ပင် ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ကျခံစေရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။“၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ စီရင်ချက်ချလို့ မရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီဥပဒေဟာ အသက်မရှိတော့ဘူးလို့ ကျနော်တို့က လျှောက်လဲတယ်။ ကျနော်တို့ အမြင်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားသေလွှတ်ရမယ်” ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ဆက်ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထိုကဲ့သို့ ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်သဖြင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ကြပြီး၊ သူမကို ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သည့် ၁၉ နှစ်အတွင်း ၁၄ နှစ်ခန့် အကျယ်ချုပ်ကျခံခဲ့ရသည်။ဦးရွှေအုန်းနှင့် တတိယအင်အားစု မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမည် Print E-mailနန်းဒေဝီ သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 04 ရက် 2009 ခုနှစ် 16 နာရီ 14 မိနစ်နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ဝါရင့်ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးရွှေအုန်းက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၌ တတိယအင်အားစုအဖြစ် လှုပ်ရှားနေသူတစုနှင့် မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဟု ဆိုသည်။၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် သူ၏ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် စစ်အစိုးရဘက်သို့လည်းမလိုက်၊ ပင်မအတိုက်အခံ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘက်လည်း မလိုက်ဆိုသော တတိယအင်အားစုဟု နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် လူသိများသော နိုင်ငံရေးသမား ၅ ဦးတို့ မဟာမိတ်အဖွဲ့ ထူထောင်နိုင်ရန် မူဝါဒသဘောထားများ ရေးဆွဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။“ဖွဲ့မယ်။ ဥပဒေထွက်လာရင် ဖွဲ့မယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေက တကွဲတပြားလုပ်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ ပေါင်းနိုင်မှ တော်ကာကျမှာ။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွင့်ထားပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်” ဟု ပင်လုံညီလာခံတွင် တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသူ ဦးရွှေအုန်းက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။မဟာမိတ်ဖွဲ့မည့်သူများမှာ တသီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင် ကိုနေမျိုးဝေနှင့် ဦးဌေးတို့အပြင် ကိုသိန်းတင်အောင်၊ ဦးသန်းမင်းစိုး၊ ကိုသောင်းဝင်း ဆိုသူတို့ ဖြစ်သည်။ကိုနေမျိုးဝေက “၉၉ ရာခိုင်နှုန်း သေချာသွားပါပြီ။ ပါတီတခုအနေနဲ့ ရပ်တည်ဖို့က မလွယ်ပါဘူး။ လူရှားတာရယ်၊ ရပ်တည်ပြောဆိုရဲတဲ့သူ နည်းတယ်။ ဒါကြောင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့ စီစဉ်ကြတာပါ” ဟု ပြောသည်။ဦးရွှေအုန်းက “သူတို့နဲ့က ဝါဒက သိပ်မကွဲပါဘူး။ အပေါက်ကျယ်ကျယ် ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူမဆို အခြေခံမူဝါဒ တူကြမယ်ဆိုရင် ပေါင်းကြမယ်။ စတင်တည်ထောင်လို့ ကျနော်တို့က ထိပ်ကနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ အင်အားကြီးရင် ကြီးသလိုတက်လာ။ တက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်နောက် ကျနော်တို့လိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ပါ'' ဟု ပြောသည်။ မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သော်လည်း သူ၏ ပါတီအမည်ကို ဆက်လက်ထားရှိသွားမည်။တတိယအင်အားစု ဆိုသူများသည် စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံကာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးသို့ ပြောင်းလဲရာ၌ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ ပြောင်းလဲမှုသာ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသည်။၅ ဦးပါ အုပ်စု၌ ပါဝင်သည့် ကိုသိန်းတင်အောင်က “ကျနော်တို့က အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်းမှာ နေရာရဖို့ဆိုတာ မမျှော်မှန်းဘူး။ ရနိုင်မှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့မျှော်မှန်းနိုင်တာက ဥပဒေပြုရေးအာဏာပဲရှိတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အနေနဲ့ပဲ လွှတ်တော်ထဲကို သွားဖို့ ရည်ရွယ်ရမှာ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။သူက ဆက်ပြီး “တချို့ပါတီတွေက အခုချိန်မှာ ငါတို့တော့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မျှော်မှန်းနေတာတွေက စိတ်ကူးယဉ်နေတာ။ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။” ဟု ပြောဆိုသည်။၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက်သည် စစ်တပ်သြဇာခံ မဟုတ်ဘဲ၊ အတိုက်အခံလည်း မပြုလုပ်လိုသည့်အပြင် အန်အယ်ဒီကို ပုတ်ခတ်ခြင်း၊ နောက်လိုက်ခြင်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။အန်အယ်ဒီသည် ၁၉၉၀ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအပြတ်သတ်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရက လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် ငြင်းဆိုထားသည်။၈၆ နှစ်အရွယ် ဦးရွှေအုံးသည် “မပြိုကွဲနိုင်သော ပြည်ထောင်စုကြီးကို တည်ဆောက်ကြပါစို့” စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သေးသည်။ စာမျက်နှာ ၃၁၁ မျက်နှာရှိပြီး၊ အခန်း ၁၇ ခန်းရှိကာ မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်သော လူမျိုးများ ဆင်းသက်လာပုံ၊ ပုဂံနိုင်ငံတော် ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံ ဥပဒေများအပေါ် အမြင်များ ပါဝင်သည်။ထိုစာအုပ်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများအကြား ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး၊ တရားဝင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် စာပေစိစစ်ရေးထံ တင်ပြခဲ့သော်လည်း ယနေ့ထိတိုင် ခွင့်ပြုချက် မရရှိခဲ့ပေ။၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် “တတိယ ပြည်ထောင်စု ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ” အမည်ရှိ စာအုပ်ကိုလည်း ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင် သူသည် စစ်အစိုးရ၏ အမျိုးသားညီလာခံသို့ ''၈ ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုမူ'' စာတမ်းကို တင်ပြခဲ့သဖြင့် ထောင်ဒဏ် တနှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။အမျိုးသမီးများ၏ မလုံမခြုံ ခန္ဓာပုံများ ခိုးရိုက်သူ ထောင်ကျ Print E-mailမဇ္ဈိမသတင်းဌာန သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 04 ရက် 2009 ခုနှစ် 13 နာရီ 04 မိနစ်ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ အမျိုးသမီး ၂၀ ခန့်၏ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ခိုးရိုက်ကူးခဲ့သူဟု စွပ်စွဲကာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် သီတင်းပတ် ၁၂ ပတ် အပြစ်ပေးလိုက်သည်ဟု စင်္ကာပူ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ The Straits Time ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ရေးသားထားသည်။၂၇ နှစ်အရွယ် ကိုချစ်စမ်းမောင်ဆိုသူသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း အမျိုးသမီး ၃ ဦး၏ ပုဂ္ဂလဘဝကို နှောင့်ယှက်လွန်ကျူးမှု (၃) မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်ဟု သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့က SUN ပလာဇာတွင် ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်နေစဉ် ၃၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး၏ ခင်ပွန်းသည်က လက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းမိခဲ့သည်ဟု ပါရှိသည်။စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်များအရ အလားတူ ရိုက်ကူးမှုများလည်း ယခင်က ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟု သတင်းစာတွင် ဆက်လက် ရေးသားထားသည်။မြန်မာ့အထည်ချုပ် တူရကီနှင့် ဒေါ်လာ ၆ သန်းခွဲဖိုး သဘောတူ မေကျော် သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 04 ရက် 2009 ခုနှစ် 13 နာရီ 34 မိနစ်ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများနှင့် တူရကီ အထည်အလိပ်အုပ်စု တီးမားတို့ ဒေါ်လာ ၆ သန်းခွဲတန် စီမံကိန်းတခုအတွက် ရန်ကုန်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကာ သဘောတူညီမှု ရခဲ့သည်။မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက မြန်မာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တူရကီ တီးမားအုပ်စုတို့ အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်တွင် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။"တူရကီ ကုမ္ပဏီက ရှင်းလင်းပွဲကို သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်မှာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက တွေ့လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးတယ်။ ကျန်တာကို အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ညှိကြတာပါ" ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောကြားသည်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင် သတင်းရပ်ကွက်အရ သဘောတူညီချက် ရရှိပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ တူရကီ အထည်အလိပ်အုပ်စု တီးမား Tema က လာမည့်နှစ်တွင် စတင်မည့် ၆ လ စီမံကိန်းကို CMP စနစ် (ဖြတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုး စနစ်) ဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။“ဒီရာသီပြီးတော့ နောက်ရာသီ ချမချ ဆိုတာက ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ အခုဟာက နောက်တနှစ်လုံးစာ စာချုပ်ချုပ်တာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေ။ အော်ဒါ ချကြည့်တဲ့ သဘောပါပဲ” ဟု ရွှေပြည်သာ အခြေစိုက် အထည်ချုပ် စက်ရုံပိုင်ရှင်က ဆိုသည်။“စာချုပ်ကတော့ ချုပ်လိုက်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ရုံတွေက ဘယ်လိုခွဲလဲ ဆိုတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ အစိုးရနဲ့ နွယ်တဲ့ စက်ရုံတွေကို မပေးလို့ မရဘူး” ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။ကမ္ဘာ့ငွေကြေး အကျပ်အတည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပ အမှာနည်းသည့်အတွက် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း အချို့ လုပ်ငန်းရပ်နားခဲ့ရပြီး ယခုနှစ်တွင်လည်း လုပ်အားခ သက်သာသည့် ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု မရှိဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။“အခုအထည်ချုပ်က ရပ်တည်လို့ ရရုံပဲ။ အရင် အော်ဒါ အတော်များများက ဗီယက်နမ်နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုပဲ သွားကုန်ပြီလေ” ဟု အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်က ဆိုသည်။သို့သော် ယခု အော်ဒါ ပမာဏက အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကြီး တခုလုံးအတွက် အပြောင်းအလဲ မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ယခုနှစ်အတွင်း ဂျာမဏီနှင့် ပြင်သစ်မှ အော်ဒါများ လုံးဝ မရတော့သော အခြေအနေတွင် အထည်ချုပ် ဝန်ထမ်းများကို အလုပ်ပေးထားနိုင်မည်ဟု အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။“အထည်ချုပ် လောကအတွက်တော့ ဒီအော်ဒါရလို့ အသက်ရှူချောင်သွားလောက်တဲ့ ပမာဏလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အော်ဒါလေးတွေရှိတော့ ဝန်ထမ်းကိုလည်း ထိန်းထားလို့ ကောင်းတယ်” ဟု ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန်မှ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်က ဆိုသည်။တူရကီ ကုမ္ပဏီက အထည်ကုန်ကြမ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာဘက်မှ ပုံစံညှပ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးပေးခြင်းအတွက် အထည်တထည်ကို ပျမ်းမျှ အမေရိကန် ၅ ဒေါ်လာခန့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ကျေးလက်နေ အမျိုးသမီးငယ်များ အဓိက လုပ်ကိုင်နေသည့် အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အခြေခံ လစာအဖြစ် တလလျှင် ၁၅၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် နေ့စဉ် လုပ်အားခကို ပေါင်းပြီး တွက်ချက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ရာ အထည်ချုပ် ဝန်ထမ်းတဦးသည် တလလျှင် ဝင်ငွေမှာ တလ ၃၀၀၀၀ ကျပ်မှ ၄၅၀၀၀ ကျပ် အတွင်းသာ ရှိသည်။မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတွင် အမေရိကန်စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုအပြင် ပြည်တွင်း အခြေခံ အဆောက်အအုံဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများလည်း ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်စိုးက ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း အခြေအနေ တင်ပြချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။CMP စနစ်ဖြင့် အဓိက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ဝင်ငွေ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၂၉ သန်းအထိ ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၃၁၄ ဒဿမ ၄ သန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ကာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ သုံးသပ်ချက်အရ ယခု အထည်ချုပ် စက်ရုံများမှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ရုံ ရပ်တည်နိုင်သော အခြေအနေတွင်သာရှိကြောင်း ဆိုသည်။ကချင်က အရေးပေါ် လူထုအစည်းအဝေး ကျင်းပမည် ဖနိဒါ သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 04 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 07 မိနစ်ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နယ်ခြားစောင့်တပ်ပြောင်းရေး ဖိအားပေးခံနေရသော အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် ကချင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ - KIO က အရေးပေါ် လူထုအစည်းအဝေးတရပ်ကို နယ်စပ်မြို့ လိုင်ဇာတွင် မနက်ဖြန် ပြုလုပ်မည်။ကချင်ပြည်သူလူထု၏ ရှေ့လျှောက်ရမည့် လမ်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ရန် မနက်ဖြန်တွင် KIO ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာတွင် KIO ခေါင်းဆောင်များနှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သာဘာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ကချင်ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။“ကချင်ပြည်သူလူထုရဲ့ ရှေ့ရေးအတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ချပြဖို့ ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ နေရာအနှံ့က ခေါ်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့က တချို့ရောက်နေပါပြီ” ဟု KIO အရာရှိတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ကိုယ်စားလှယ် ၃၀၀ ခန့် တက်ရောက်ဖွယ်ရှိနေပြီး၊ ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော် (NDAK) လည်း ပါဝင်သည်ဟု အစည်းအဝေး ကျင်းပရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အတွင်းရှိ မိုးညှင်း၊ မိုးကောင်း၊ ဟိုပင်၊ ဖားကန့်၊ ကားမိုင်း၊ ဗန်မော်၊ ရွှေဂူ စသည့်မြို့နယ်များ အပါအဝင် နေရာအနှံ့ရှိ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ကချင်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် (KDA) ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ကချင်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ယခုလ ၆ ရက်နေ့၌ စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးမှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်နှင့် မတွေ့ဆုံခင် လူထုအစည်းအဝေးပွဲ ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်နှင့် စစ်တိုင်းဌာနချုပ် တိုင်းမှူးများနှင့် အပစ်ရပ် ၆ ဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်များကို သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေများအလိုက် သီးခြားစီခွဲ၍ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။အခြားသော အပစ်အခတ်ရပ် ကိုးကန့်အဖွဲ့ကို စစ်အစိုးရတပ်များက ထိုးစစ်ဆင် အနိုင်ယူခဲ့ပြီးနောက် ကချင်ဘက်တွင်လည်း တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာနိုင်သည်ဆိုသော စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေသည်။နအဖ က စစ်တပ်များကို ဒေသတွင်း ပိုမိုစေလွှတ်ထားခြင်းကြောင့် လိုင်ဇာဒေသခံအချို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ပစ္စည်းများ ပြောင်းရွှေ့ကြသည်။“ပစ္စည်းတွေကတော့ ပို့နေကြတယ်။ တကယ်လို့ နအဖက တိုက်လာမယ်ဆိုရင် ကြိုပြင်ဆင်တာပဲပေါ့။ တရုတ်ပြည်ဘက် အိမ်တောင်ငှားပြီး ပစ္စည်းတွေ ပို့နေကြတယ်။ ကိုးကန့်ဘက်ကလို တိုက်လာမှာ စိုးလို့ ဒေသခံတွေက ပစ္စည်းတွေ အကုန်သယ်နေကြပြီ” ဟု လိုင်ဇာဒေသခံတဦးက မဇ္ဈိမကို တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် ပြောသည်။စစ်အစိုးရက တောင်းဆိုထားသည့် KIO ၏ စစ်တပ်ကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းကာ တပ်မတော်၏ အုပ်ချုပ်ခံပြုလုပ်ရန်ကို ငြင်းဆန်ထားပြီး ကချင်ဒေသလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ (KRGF) အဖြစ်သာ ပြောင်းလဲလိုကြောင်း တုံ့ပြန်ထားသည်။ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေခဲ့သော KIO သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့သည်။ မြန်မာ တရုတ် နယ်စပ် ဒုက္ခသည်များ ပိုမိုထွက်ပြေးနေFriday, 04 September 2009 19:03 ရန်ပိုင်စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ကိုးကန့်ဒေသ တည်ငြိမ်လာ သောကြောင့် ဒေသခံများ ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာသည်ဟု ဖော်ပြနေသော်လည်း ၀ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ ထိန်းချုပ်ရာ ပန်ဆန်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံဘက် ရှောင်တိမ်း ထွက်ပြေးသူပိုမို များပြားလာ ကြောင်း သိရသည်။[တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ်သို့ ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့က ဝ ဒေသမှထွက်ပြေးလာသည့် ဒုက္ခသည်များကိုတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)]တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ်သို့ ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့က ဝ ဒေသမှထွက်ပြေးလာသည့် ဒုက္ခသည်များကိုတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)ပြီးခဲ့သည့် ရက်များအတွင်း ကိုးကန့်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများသည် ၀ ဒေသအတွင်းသို့ပါ ကူးလာနိုင်သည် ဟု ထင်မြင်ချက်များ ရှိနေသောကြောင့် ပန်ဆန်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေကြသော တရုတ်လူမျိုးများအလုံးအရင်းဖြင့် နယ် စပ်ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးနေပြီး တခြားသော စီးပွားရေးလာရောက် လုပ်ကိုင်သူများမှာလည်း လားရှိုးသို့ ထွက်ပြေးမှုများ ရှိ သည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။“ပန်ဆန်းမှာ ထွက်ပြေးတဲ့ တရုတ် ကုန်သည်တွေ တော်တော်များလာတယ်၊ တရုတ်နယ်ခြား နမ့်ခါချောင်း တံတားမှာ ဖြတ် ဖို့ စောင့်တဲ့ကားတွေက အစီး ၆၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်၊ ဒီတံတားဂိတ်က ည ၆နာရီပိတ်တယ်”ဟု ဒေသခံတဦးက ဧရာဝ တီ သို့ပြောသည်။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှ ကိုးကန့်ဒေသတွင် တိုက်ခိုက်မှုများကဲ့သို့ မြန်မာစစ်တပ်များက လက်နက်ကြီးများ တင့်ကားများဖြင့် ၀ဒေသကိုလည်း တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်သည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။“၀ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး လူထုကြားမှာ အထိတ်တလန့် မဖြစ်ဖို့ နှိုးဆော်တဲ့ ပိုစတာတွေကပ်တယ်၊ စာရွက်တွေ ဝေတယ်၊မစိုးရိမ်ဖို့ ကိုယ့်နေရာမှာကိုယ် အေးအေးဆေးဆေးနေဖို့ပါ” ဟု ၎င်းဒေသခံက ပြောသည်။ထိုသို့ နှိုးဆော်မှုများကို ၀ဒေသအာဏာပိုင်များက ပြုလုပ်နေသော်လည်း ဒေသခံ လူထုမှာ နားမထောင်ဘဲ အိုးအိမ် များကို စွန်ခွာ ထွက်ပြေးနေကြောင်း၊ အများစုမှာ တရုတ်ပြည်ထဲမှ ၀ဒေသသို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသော တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်အများစုမှာ လားရှိုးသို့ထွက်ပြေးကြောင်း သိရသည်။“ပန်ဆန်းကနေပြီး တာကောအက် တံတားကို ဖြတ်ပြီး တန်ယန်းကိုကူးလာတာ၊ ပြီးရင် လားရှိုးဘက်တက်မယ်၊ ကားခတွေ လည်း ဈေးတက်သွားတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ရက် ၅ရက်ကမှ ကားခက တယောက် ၄သောင်းပဲရှိတယ်၊ အခု၁သိန်းပေးရတယ်” ဟု ၀ဒေသမှ ထွက်ပြေးလာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တဦးက ပြောသည်။ထိုသို့ ဒုက္ခသည်များ ထွက်ပြေးမှုသည် ၀ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမြို့တွင်သာ မက တခြားသော အပစ်ရပ်အဖွဲ့ များဖြစ်သည့် မိုင်းလား အထူးဒေသ (၄) နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသများတွင်လည်း တရုတ်ပြည်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးမှုများ ပိုမိုများပြားလာသည်ဟု သိရသည်။“မိုင်းလား နဲ့ ပန်ဆန်းက အရပ်သားတွေရယ် ၊ KIA ဌာနချုပ်က တချို့ရယ် မနေ့က တရုတ်ပြည်ထဲကို ပစ္စည်းတွေရွှေ့ တယ်၊ ရုတ်ရုတ်သဲသဲပဲ၊ မိုင်းလားကတော့ မြို့တခုလုံးကို ခြောက်ကပ်သွားပြီ” ဟု တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။တရုတ်နိုင်ငံ ရှိ Phoenix TV ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဌာန မှ ထုတ်လွှင့်သည် သတင်းတခုတွင် မိုင်းပေါက်နှင့် မိုင်းဖျံဒေသ သို့ စစ်အစိုးရ တပ်မှ တင့်ကား အစီး ၂၀ဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။“တင့်ကားအစီး ၂၀သာ တကယ်ဝင်ရင်တော့ မိုင်းလားနဲ့ ၀ဒေသ အဆက်ပြတ်ပြီ၊ ဖီးနစ်တီဗီ က အဲ့ဒါကို လွှင့်တော့ လူတွေ ကကြောက်ပြီး ပြေးတာပေါ့၊ အခုကတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုတင်ပြေးတာမဟုတ်ဘူး၊ မိုင်းယန်းကိုလည်း ၀ကတိုက်မယ်ဆိုလို့ လူတွေက ကျိုင်းတုံဘက်ကိုပြေးပြန်တယ်” ဟု အဆိုပါကုန်သည်က ဆက်လက်ပြောသည်။ဤထွက်ပြေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်အစိုးရနှင့် မြန်မာအစိုးရဘက်မှ မှားယွင်းသော သတင်းများကို ထုတ်ပြန်နေ သည်ဟုထင်ကြောင်း တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ် အခြေစိုက် စစ်ရေးနိုင်ငံရေး လေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောက သုံးသပ်သည်။အထူးဒေသ (၁) ကိုးကန့်နယ်မြေတွင် WY စာတန်းပါသည့် မူးယစ်ဆေးပြားများ နှင့် ထုတ်လုပ်သည့်စက်များ၊ ဓာတုဆေး ၀ါးများကို စီအောရွာရှိ ဦးဖုန်ကြာဖူး နေအိမ်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မူးယစ်တပ်ဖွဲ့ နှင့် ကိုးကန့်ယာယီ ဦးစီးကော်မတီများက ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်ဟု ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။အဆိုပါသတင်းစာများတွင် နယ်မြေအေးချမ်းလာပြီဖြစ်၍ ပြည်သူ ၉၃၀၄ ဦး ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများအရ ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးဖုန်ကြားရှင်နှင့် ညီဖြစ်သူ ဦးဖုန်ကြာဖူး ၊သားများ ဖြစ်သော ဖုန်တာ့လီ နှင့် ဖုန်တာ့ရွှင်တို့ကို လွှဲအပ်ပေးရန် စစ်အစိုးရက ၀တပ်ဖွဲ့ထံသို့ တောင်းဆိုထားသည်ဟု သိရသည်။ကိုးကန့်နှင့်ဝ ခေါင်းဆောင်အများစုသည် မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့် မပတ်သက်သူ နည်းပါးကြောင်း၊ ထိုဒေသသည်လည်း ယခင် က ဘိန်းစိုက်ပျိုးရာ နေရာများအဖြစ် နာမည်ဆိုးထွက်ခဲ့သည့် ဒေသများဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် စိတ်ကြွဆေးများ ကိုပြောင်း လဲ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းမူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စများတွင် စစ်အစိုးရ၏ အရာရှိများလည်း ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ ရှိနိုင် ကြောင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ်မှ ဦးစိန်ကြည်က သုံးသပ်သည်။ဝ ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) ၏ ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် ဒုတိယဌာနမှူးအဖြစ် ဦးကျော်မြင့် တာဝန် ယူခဲ့စဉ်က မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ငွေမည်းခ၀ါချသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ ဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်က ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်း အသံလွှင့်ဌာန၏ အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွင် ပြောဆိုခဲ့သည်ဝ နှင့် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့များကို မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူး ယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့များက သံသယရှိနေသောကြောင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင်များက မူးယစ် ဆေးဝါးကင်းစင်သောနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ စစ်တွေတွင် ထောက်လှမ်းရေးများ ဥပုသ်သည်ဟန်ဆောင်၍ သတင်းယူFriday, 04 September 2009 20:10 ဘစောတင်E-mail Printရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ သံဃာတော်များ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အာဏာပိုင်များက ဘုရားကျောင်းကန် အစရှိ သည့် သာသနာ့နယ်မြေ များတွင်ပါ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူများ ဟန်ဆောင်၍ လေ့လာစုံစမ်းမှုများ ပြု လုပ်နေသောကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေကြရသည်ဟု သံဃာတော်များနှင့် မြို့ခံများက ပြောသည်။ဒေသခံ သံဃာတော်တပါးက“ဦးပဉ္ဇင်းတို့ စစ်တွေမှာ အခုတလော စသုံးလုံးတွေ၊ ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေ ဟာ ဥပုသ်နေ့တွေဆိုရင် အရပ် သားတွေနဲ့ ရောနှောပြီး ဥပုသ်စောင့်သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ သံဃာတွေ ဘာ တွေပြောနေကြသလဲ၊ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိမလဲဆိုတာတွေကို တိတ်တဆိတ်လာရောက် စုံစမ်းနေတယ် ဆိုတာကို ဒကာ ဒကာမတွေက သိနေကြတယ်၊ အေးအေးချမ်းချမ်း တရားရိပ်မှာ နေလိုကြတဲ့သူတွေ အတွက် တော်တော့်ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတာ အမှန်ပဲ”ဟု မိန့်ဆိုသည်။ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည်ကာလဖြစ်သည့် ယခုလအတွင်း စစ် အာဏာပိုင်များက သံဃာတော်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာ၍ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်မှုများ ပြုလုပ်နေ ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်း သံဃာတော်က မိန့်သည်။မကြာသေးခင်က မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကြီးမှ တတိယအကြိမ်မြောက် သပိတ်မှောက် ကံ ဆောင်ရန် အစီအစဉ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက် စစ်တွေမြို့ရှိ ပြည်လုံးချမ်းသာ ဘုရားကြီး၊ ဧစေတီ ဘုရား၊ ဦးရဲကျော်သူကျောင်း (ခေါ်) သံကျောင်း အနီးနှင့် လောကနန္ဒာ ဘုရားတ၀ိုက်တို့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် နေ့ညမပြတ် လှည့်လည်လျက်ရှိသည်ဟု အဆိုပါ သံဃာတော်က မိန့်ဆိုသည်။စစ်တွေတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း သံဃာတော် (၂၀၀)ကျော်ပါဝင်သော စီတန်းလှည့်လည် ပရိတ်ရွတ်မေတ္တာပို့ ခြင်းကို ပထမဆုံး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှ ဆရာတဦးက“အခုအချိန်ဟာ ရွှေဝါရောင်နှစ်ပတ်လည် ကာလဖြစ်သလို ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အနှစ် (၇၀)ပြည့်ကာလနဲ့လည်း လာတိုက် နေတယ်လေ၊ နှစ်တိုင်း ဒီမှာက ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ ကိုလည်း အဆင်ပြေသလို လုပ်လေ့ရှိတာမို့ဘုန်းကြီးတွေကိုသာမက ကျောင်းသားတွေကို လည်း မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်နေတာရှိတယ်”ဟု ဆိုသည်၊၎င်းကဆက်လက်၍ တက်ကြွလှုပ်ရှားသော လူငယ်များနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်များဖြစ်သည့် ရွှေပြားရပ်ကွက်၊ ဘောက်သီးစုရပ်ကွက်၊ ရူပတောင်ရပ်ကွက်နှင့် လမ်းမတော်ရပ်ကွက်များတွင် ထောက်လှမ်းရေးများက အရပ် ၀တ်ပုံစံ၊ ဆိုက်ကားသမားပုံစံများဖြင့် ထောက်လှမ်းလျှက်ရှိသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သူ ကိုအေးထွန်းက“အခု စစ်တွေမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေ ကို အဓိက ကွပ်ကဲနေတာက ပြည်နယ် ရဲမှူး အောင်ဒိုင်းက ကွပ်ကဲနေတာဖြစ်တယ်၊ စစ်တွေဟာ သံဃာ လှုပ်ရှားမှု မှာ အရမ်းကို တက်ကြွတာမို့ အခုတခေါက် စစ်တွေကနေ စတင်မဖြစ်ပွားအောင် သေသေချာချာ ကြပ်မတ်ဖို့ အမိန့် ပေးထားတယ်လို့ ကြားတယ်”ဟု ပြောသည်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်တွေတွင် လှုပ်ရှားမှု တစုံတရာ မလွဲမသွေဖြစ်မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေ သောကြောင့် စစ်တွေမြို့တွင် လုံခြုံရေး ပိုမိုတင်းကျပ် လျက်ရှိသည်။ ကချင်တပ်ဖွဲ့က နယ်ခြားစောင့်ရေး ထပ်မံ စဉ်းစားဦးမည်Friday, 04 September 2009 20:05 အေးလဲ့E-mail Printစစ်အစိုးရက ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ကို နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲရန် ဆက်လက် နားချလျက် ရှိသောကြောင့် KIA ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင် များကြားတွင် ထိုအကြောင်းအရာကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးဦးမည်ဟု သိရသည်။KIA ၏ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု အဖွဲ့ဖြစ်သော ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO)၏ ဗဟိုကော်မတီ ဆွေးနွေးပွဲကို လိုင်ဇာမြို့ရှိ KIO ဌာနချုပ်တွင် စနေနေ့၌ ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း KIO ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်သူ ဂျိမ်းစ်လွမ်ဒေါင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ကချင်ဒေသ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ အဖြစ်မှ နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ KIO နှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော်တို့ ၆ ကြိမ်ခန့် တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။KIO ခေါင်းဆောင်များ မနက်ဖြန်တွင် ဆွေးနွေးကြသည့်အခါ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် မည်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သည့် အဆင့်အထိ သဘောတူညီခဲ့ကြောင်းကို ရှင်းလင်း အစီရင်ခံမည်ဟု မြစ်ကြီးနား အခြေစိုက် KIO ရုံးမှ တာဝန် ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။KIO ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံပွဲ ပြီးဆုံးသည့်အခါ စစ်အစိုးရ လိုလားသည့် ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်ဦးမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ထိုတွေ့ဆုံပွဲမှ ရလာသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ယူဆောင်၍ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ထပ်မံ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကြမည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့ ညှိနှိုင်းခြင်းကို ကချင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် မြစ်ကြီးနားတွင် ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။စစ်အစိုးရက ယခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များကို နယ်ခြားစောင့်တပ်များ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ ညှိနှိုင်း ကမ်းလှမ်းနေခြင်းများကို အများပြည်သူ သိရှိရန် တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း မပြုသေးပေ။ လာမည့်နှစ်တွင် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် တိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့များကို နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် ထိုသို့ လိုက်လံ ညှိနှိုင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အများက သုံးသပ်နေကြသည်။သို့သော်လည်း KIA က ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပြီး အစိုးရ တရပ် ပေါ်ပေါက်လာရေးကိုသာ ပထမဦးဆုံး ဆောင်ရွက်ရမည် ဟု စစ်အစိုးရကို ယခင်က အကြောင်းပြန်ထားသည်။ KIA သည် ၁၉၉၄ တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့သည်။အပစ်ရပ်ထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၂၀ ၀န်းကျင်ရှိသည့်အနက် အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့က စစ်အစိုးရ၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို သဘောတူထားပြီးဖြစ်သည်။ပြီးခဲ့သည့် လကုန်ပိုင်းတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ တပ်များက KIA နှင့် စစ်ရေး မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားသည့် ကိုးကန့်ဒေသ အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ လူမျိုးစု ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစု (MNDAA)ကို ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်လိုက်သည်။နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရေးကို လက်မခံသည့် အဖွဲ့များထဲမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား အနည်းဆုံး ဖြစ်သော MNDAA ကို တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အပစ်ရပ်ထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသ အထူးသဖြင့် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသတွင် မတည်မငြိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အယူခံတင်ခွင့်ရFriday, 04 September 2009 16:23 သန်းထိုက်ဦးE-mail Printမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အယူခံကို ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးက ယနေ့ လက်ခံလိုက်ကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အား စစ်အစိုးရက ၁ နှစ်ခွဲ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် စီရင်ချက်ချထားမှုအပေါ် အယူခံတင်ခွင့် ကို တရားရုံးက လျှောက်လဲချက်ပေးပြီးတော့ လက်ခံလိုက်သည်။ ၎င်း အမှုအတွက် နှစ်ဘက်ကြားနာရန် စက်တင် ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့သို့ ရုံးချိန်းပေးလိုက်သည်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။“ကျနော်တို့က နဂို မျှော်လင့်ချက် ရှိတာထက်ကို ပိုပြီးတော့ မျှော်လင့်ချက်ရှိလာတာပေါ့၊ အခု လက်မခံလိုက်ရင် အပယ်ခံရမယ်၊ အခု မပယ်ဘူး အမှုကို လက်ခံထားတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။အဆိုပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုအား တိုင်းတရားရုံးသို့ ယမန်နေ့က စတင်၍ အယူခံတင်ခဲ့ရာ တရားရုံးက လက်ခံရေး၊မခံရေးအတွက် ၄ ရက်နေ့ကို ရက်ချိန်းပေးခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ အယူခံကို လက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အယူခံတင်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေများဖြစ်သော ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးကြည်ဝင်းနှင့် ဒေါ်ခင်ဌေး ကြွယ်တို့ ယမန်နေ့က တရားရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှေ့နေများအနေဖြင့် ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်မြောက်ရန် မျှော်လင့် ထားသည်ဟု ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။“မျှော်လင့်တာကတော့ လုံးဝ ကွင်းလုံကျွတ်လွတ်ဖို့ မျှော်လင့်တယ် ၊ ဥပဒေအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘယ် ပြစ်မှုကိုမှ မကျူးလွန်ဘူး၊ ကျနော်တို့ ဒီအတိုင်းပဲ ခံယူပါတယ်”ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မေလအတွင်း ၎င်း၏နေအိမ်သို့ တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်ခဲ့သော အမေရိကန် နိုင်ငံသားကြောင့် ရုံးတင် တရားစွဲခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ထိုအမှုတွင် အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ သည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ အမိန့်ဖြင့် ကျခံရမည့် ထောင်ဒဏ်ကို ထက်ဝက် လျှော့ချကာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ၁ နှစ်ခွဲ စီရင်ချက် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီး ဖြစ်၍ လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာ အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ရှေးရှု၍ လည်းကောင်း၊ အာဃာတ မရှိစေရေး အတွက် လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းတွင် အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရေး အတွက် လည်းကောင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု အပြီးမှ စတင်၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် အထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ၆ နှစ်ပြည့်ခါနီး အချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ တရားစွဲဆို ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စ၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဘ၀ဖြင့် နေရချိန် စုစုပေါင်း ၁၃ နှစ်ကျော်ပြီ ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းဆေးနှင့် ငရုတ်ဆီများ ထပ်မံပိတ်ပင်Friday, 04 September 2009 16:21 ဟိန်းဇော်E-mail Printမြန်မာပြည်တွင်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသော တိုင်းရင်းဆေးဝါး အမှတ်တံဆိပ် ၁၄ မျိုးနှင့် ငရုတ်ဆီ အမျိုးအစား ၁၀ မျိုးကို သုံးစွဲရန် မသင့်ကြောင်း ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့ တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချလျက်ရှိသော ငရုတ်ဆီများကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမှတ်တံဆိပ် ၁၀မျိုး၌ အစား အသောက်တွင် သုံးစွဲရန်ခွင့်မပြုသော လိမ္မော်ရောင်ဆိုးဆေး Orange II ပါဝင်နေပြီး ရေရှည်စားသုံးမိလျှင် မျိုးရိုး ဗီဇ ထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊ ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် စားသုံးရန် မသင့်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနဗဟို အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောဆိုသည်။ပိတ်ပင်ခံရသော ငရုတ်ဆီ အမှတ်တံဆိပ်များမှာ ပလတ်စတစ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးရောင်းချနေသော ရွှေပုစွန် (ခရမ်းချဉ် သီးနှင့်မန်ကျည်းသီး)၊ (ရွှေ) ပျံလွှား၊ ပုစွန်နှစ်ကောင်၊ စိန်သုံးလုံး၊ စားကြည့်၊ စိန်ရံ၊ ဂရိတ်(အနီနှင့်အညိုရောင်) ၊ ယုဇန စပါယ်ရှယ် စသည်တို့ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။အလားတူ ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချနေသော တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ ဖြစ်သည့် မြလင်းရောင်လတံဆိပ် မျက်စဉ်း ဆေး၊ ဇာပျံလျက်ဆား၊ ဒို့မောင်နှံ ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေး၊ နဂါးနီ တံဆိပ် အစာကြေဆေး၊ ဦးသက်ထွန်း ကလေး သူငယ်နာဆေး၊ EVER LIFE အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး၊ ရွှေပုစွန် ငှက်ဖျားဖြတ်ဆေးနှင့် ဖျားနာပျောက်ဆေးမှုန့်၊ ဂျပန်နားသန့်ဆေး၊ မြင်းနီပျံ အမှတ်တံဆိပ် မက်ကလောင်အဖျားဖြတ်ဆေး၊ ခြင်္သေ့ကမ္ဘာ ငှက်ဖျား မက်ကလောင် ဖြတ်ဆေး၊ ငှက်ဖျား အမြစ်ဖြတ်ဆေး၊ ငှက်ဖျားနှင့် မက်ကလောင် အမြစ် ဖြတ်ဆေး ၊ မြင်းနီပျံ မက်ကလောင် ဆေးတို့ကိုလဲ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိ၍ ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာထားသည်။ယင်း တိုင်းရင်းဆေးများသည် ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်၊ မုဒုံမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် အစရှိသည့် မြန်မာပြည် တဝန်းမှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။မော်လမြိုင်မြို့မှ တိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်သူ တဦးက“နယ်မှာက တိုင်းရင်းဆေးကိုပဲ ဟိုးအရင်ကတည်းက အားကိုးလာတာ ဒီနေ့ထိပဲ တကယ်လို့ ဒီဆေးတွေကို မှတ်ပုံတင်ပြီး ဈေးကွက်မှာ ပြန်ရောင်းရင်တော့ ရမယ်နဲ့ တူပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ပြီးခဲ့သည့် မေလအတွင်းကလည်း မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသော တိုင်းရင်းဆေး ၁၆ မျိုးကို အများ ပြည်သူ သုံးစွဲ ရန် မသင့်ကြောင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာခဲ့သေးသည်။အဆိုပါ ဆေးများတွင် စိန်သော့၊ တူတံစဉ် စသည့် အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးမှုန့်များ၊ ဒူးလေး အစာအိမ် လေနိုင် ဆေး၊ သမားတော် အစာကြေ လေပုပ်ထုတ်ဆေးတို့ ပါဝင်သည်။မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသော ဆေးဝါးများကို ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပါက အရေးယူမည်ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ဧပြီ လဆန်းပိုင်းကလည်း ဒေါ်တွေး အမှတ်တံဆိပ် ဂေါမုတ္တဆေး၊ ဒေါ်ကျင်၏ ကလေးသူငယ်နာ လေပုပ်ထုတ် ဆေး တို့တွင် အဆိပ် အတောက် ဖြစ်စေနိုင်သည့် သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် သုံးစွဲခြင်း မပြုရန် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ကျန်းမာရေး ဌာနက တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူကြိုက်များသည့် စားသောက်ကုန် ၂ မျိုးတွင် အန္တရာယ်ကြီးသော ဆိုးဆေးများ အသုံးပြုထားကြောင်းလည်း ကြေညာထားသည်။ထိုကြေညာချက်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြန့်ချိရောင်းချနေသော လက်ဖက် အမျိုးအစား ၁ဝဝ ကျော် နှင့် ငါးပိ အမျိုးအစား ပေါင်း ၇ဝ ကျော် ပါဝင်ခဲ့သည်။ စက္ကူ လေယာဉ် ချန်ပီယံ မြန်မာကလေးကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေ့ဆုံFriday, 04 September 2009 18:03 ကိုထွေးE-mail Printမောင်သောင်ဒီကို ဂျပန်ရိုးရာ အိုရီဂါမီ စက္ကူလေယာဉ် ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် နိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ယာယီနိုင်ငံကူး လတ်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းသည် ကလေး တယောက်၏ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည့် အပြင် လူ့အခွင့်အရေး လေးစားကြောင်း ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဒေါက်တာ သိန်းလွင်က ပြောသည်။[ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝ နှင့် စက္ကူလေယာဉ် ချန်ပီယံ မောင်သောင်ဒီတို့ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)]ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝ နှင့် စက္ကူလေယာဉ် ချန်ပီယံ မောင်သောင်ဒီတို့ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ ပညာရေး အတွက် အကျိုးဆောင် ပေးနေသူ ဒေါက်တာ သိန်းလွင်က “တကယ်လို့သာ သွားခွင့် မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ကလေး တယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတယ်၊ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဒီလို ဆုံးဖြတ် လိုက်ခြင်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတယ် ဆိုတာ ပြသလိုက်တာဘဲ၊ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ အပေါ်မှာ စာနာရာလည်း ရောက်တယ်၊ ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုကို အားပေးခံရတဲ့ အတွက် ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ထူးချွန်နိုင်တယ်လေ ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ထို့အပြင် ထိုင်းနှင့် မြန်မာ ၂ နိုင်ငံလုံးက အသိအမှတ် မပြုသည့် နိုင်ငံမဲ့နေသော ကလေးများ နယ်စပ် တလျှောက် မြောက်မြားစွာ ရှိကြောင်း၊ ၀န်ကြီးချုပ်၏ ယခု လုပ်ဆောင်ချက်သည် ထိုကလေးများကို အလားတူ စဉ်းစားပေးရန် လမ်းညွှန် လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံက စာနာထောက်ထား အသိအမှတ် ပြုလိုက်သဖြင့် အဆိုပါ ကလေးက ထိုင်းနိုင်ငံကို တနေ့တွင် ပြန်လည် အကျိုးပြုနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။မောင်သောင်ဒီ၏ ဖခင် ဖြစ်သူက“ သားက ဂျပန်ကို သွားခွင့်ရတော့ ကျနော် အရမ်း ၀မ်းသာတယ်၊ သားကလည်း ဂျပန်ကို သွားရတဲ့ အတွက် အရမ်း ၀မ်းသာနေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က မောင်သောင်ဒီ၏ ဖြစ်ရပ်သည် ထိုင်း အစိုးရ ဌာနများကို နိုင်ငံမဲ့ ကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် အတွက် ဥပမာကောင်း တရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ပါလီမန်တွင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝက မောင်သောင်ဒီနှင့် အတူ ဆရာ ဖြစ်သူ Duangrit Ketima ချင်းရိုင် ခရိုင် လွှတ်တော် အမတ် Tuenjai Deetes ကို ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဂျပန်သံရုံးက မောင်သောင်ဒီကို ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ထုတ်ပေးမည်ဆိုပါက မောင်သောင်ဒီ အနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် အတွက် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ အပစ်ရပ် မွန်ဒေသတွင်လည်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေFriday, 04 September 2009 16:25 ဧရာဝတီE-mail Printမွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ရှိနေကြောင်း ၎င်းပါတီနှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀န်းက ပြောသည်။ပါတီ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာနှင့် တခြားသော ခေါင်းဆောင် တချို့က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ရပ်ဆိုင်းရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွားများစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားသော ခေါင်းဆောင်များက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားလိုကြောင်း သိရသည်။မွန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ (MNDF) ဒု ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငွေသိန်းက“စစ်အစိုးရက သဘောထား တင်းမာတဲ့ နိုင်ဟံသာကို ပစ်မှတ်ထားမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ယခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းက နိုင်ဟံသာသည် ပြည်ပရောက် မွန်တိုင်းရင်းသားများထံမှ အလှူငွေများ ကောက်ခံနေ သည်ဟု စွပ်စွဲချက် စာရွက်စာတမ်းများကို ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်း၊ မွန်တိုင်းရင်းသားများ အနေ ဖြင့်လည်း ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်း သဘောထားကွဲလွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စများသည် စစ်အစိုးရ၏ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေး ဗျုဟာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်း ပြောဆိုမှုများရှိကြသည်။ထို့အပြင် စစ်အစိုးရကNMSP ပါတီနှင့် ခေါင်းဆောင် တချို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် အိုးအိမ်ခြံမြေ အစရှိသော မရွှေ့ ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းကို ခွင့်မပြုကြောင်း နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀န်းအရ သိရသည်။ယင်းသို့ရောင်းချမှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစုံတရာ ရှင်းလင်းပြောဆိုခြင်း မရှိသော်လည်း ပါတီခေါင်းဆောင်များ လက်နက်ကိုင်၍ ပြန်လည်တောခိုမည်ကို တားဆီးလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်း ပြောဆို မှုများ ရှိခဲ့သည်။စစ်အစိုးရက NMSP ပါတီကို နယ်ခြားစောင့်တပ် ပုံစံ(သို့) ပြည်သူ့စစ် ပုံစံဖြင့်ဖွဲ့စည်းရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့မှုကို ပယ်ချ ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဆက်ဆံရေးတင်းမာလာကာ ယင်းကဲ့သို့ NMSP ပါတီနှင့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ ရောင်းချရန် တားမြစ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။NMSP နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများသည် ဇွန်လနှင့် သြဂုတ်လများတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ယင်း ဆွေးနွေးပွဲများတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို နယ်ခြားစောင့်တပ်ပုံစံ (သို့မဟုတ်) ပြည်သူ့စစ် ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် စစ်အစိုးရ၏ အမျိုးသားညီလာခံတွင် လေ့လာသူအဖြစ်သာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကိုလည်း လက်မခံပေ။ လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ၀င်ရောက် အရွေးခံမည် မဟုတ်ဟု ကြေညာထားသော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်သည်။NMSP သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီခဲ့ပြီး လက်ရှိအင်အား ၇၀၀ ခန့် ရှိသည်။ ၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၅ အတွင်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ စုစုပေါင်း ၁၇ ဖွဲ့ရှိကြောင်း စစ်အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အယူခံမှု တရားရုံးလက်ခံ04 September 2009 မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကို ပြန်လည်ကြားနာဖို့ သူ့ရဲ့ ဥပဒေကျိုးဆောင်တွေက လျှောက်လဲချက်တင်ထားတာကို ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးက လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လျှောက်လဲချက်ထဲမှာ လက်ခံစဉ်စားထိုက်တဲ့ အချက်တွေ ပါနေတဲ့အတွက် အခုလို တိုင်းတရားရုံးက ပြန်လည်ကြားနာဖို့ လက်ခံလိုက်တာ ဖြစ်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဥပေဒ ချိုးဖောက်တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ အောက်တရားရုံးက နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ၁၈ လ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အမှုအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံး အနေနဲ့ ပြန်လည် ကြားနာပေးဖို့ သူ့ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေက မနေ့က လျှောက်လဲချက် တင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီကနေ့မှာတော့ အဲဒီလျှောက်လဲချက်ကို ကြားနာဖို့ တိုင်းတရားရုံးက လက်ခံ လိုက်ပြီလို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။"ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ တရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်၊ အခု အယူခံနဲ့ပတ်သက်ရင် နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ တမျိုးကတော့ ပထမအဆင့်ပေါ့လေ။ လက်ခံခြင်းမခံခြင်း အမှုတင်လိုက်တယ်။ အမှုတင်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီအမှုကို လက်ခံ စဉ်းစားမယ် မစဉ်းစားဘူး ဆိုတာ တဆင့်ပေါ့။ တကယ်လို့ အဲဒီအဆင့်ကျော်သွားရင် ကျနော်တို့ တင်လိုက် တဲ့ အယူခံရဲ့ အတိမ်အနက်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ အဆုံးအဖြတ် ပြုဖို့ပါ။ အဲဒီလို ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီကနေ့ ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးကနေပြီးတော့ အမှုကို လက်ခံဖို့ လျှောက်လဲချက်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ တရားရုံးက လက်ခံကြောင်းနဲ့ ကျနော်တို့ အယူခံတရားလို၊ ဟိုဘက်က အယူခံတရားခံ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကြားနာဖို့ ရက်ချိန်း တခါတည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အမြင်ကတော့ ဒီဥစ္စာဟာ ဥပဒေအရ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးသပ်ဖို့လိုနေတဲ့အမှု ဖြစ်ကြောင်းကို တရားရုံးက လည်း သဘောပေါက်လို့ လက်ခံတယ်လို့ပဲ ကျနော် ဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်။" ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အယူခံလွှာကို ကြားနာဖို့ လက်ခံလိုက်တာဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအား ပေးမှုတွေကြောင့်လို့ ယတိပြတ်ပြောလို့မရပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်က ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ မှန်နေတဲ့ အတွက် လက်ခံလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပြီး လျှောက်လဲချက်ပေးတဲ့အခါမှာလည်း အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားတဲ့အကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆက်ပြောပါတယ်။"ကျနော်တို့က ယူဆတယ်။ ဥပဒေအရ 'on the margin' ကျနော်တို့ ဟိုဘက်ဒီဘက် စဉ်းစားရမယ့်အချက်မျိုး မပါဘူး။ ကျနော်တို့ဘက်က ဥပဒေအရ လုံးဝသာတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ပြောနိုင်တာ။"တိုင်းတရားရုံးက ဒီလျှောက်လဲချက်ကို ကြားနာဖို့ လက်ခံလိုက်တာဟာ ပထမအဆင့်သာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ လျှောက်ထားသူနဲ့ တရားလို နှစ်ဖက်စလုံးက ရုံးတော်မှာ လျှောက်လဲချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။"ဒါက ပထမအဆင့်လေ။ admitted or not ဆုံးဖြတ်ဖို့ ကျနော်တို့ တဖက်က လျှောက်လဲချက်ပေးတာ။ ပြီးသွားတော့ လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အတွက် နောက်တဆင့်မှာ ကျနော်တို့ အစိုးရဘက်ကရော၊ ကျနော်တို့ ဘက်ကရော၊ တရားလို ဘက်ကရော၊ ကျနော်တို့ဘက်ကရော နှစ်ဘက်လျှောက်လဲချက် ပေးရမယ်။ ပေးပြီးခါမှ ဒီအယူခံလွှာကို အဆုံးအဖြတ် ပေးမှာ။ ကျနော်တို့ လျှောက်လဲချက်က လာမယ့် ၁၈ ရက် မနက် ၁၀ နာရီမှာ ရုံးချိန်းပေးထားတယ်။"အခု အယူခံတင်ထားတဲ့ အဓိကအချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဘယ်ဥပဒေကိုမှ ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် သူ့အပေါ် ချထားတဲ့ စီရင်ချက်ကို ပြင်ပြီး လွှတ်ပေးဖို့အတွက် လျှောက်လဲချက်တင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ လွတ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။"ဟုတ်ကဲ့။ လွတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အယူခံကလည်း အဲဒါနဲ့ တောင်းထားတာ။ ကျနော်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ အပြစ်တွေ့တယ်။ convicted ဆိုတာကို verdict ဆိုတာကို လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဥပဒေအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ဘယ်ဥပဒေကိုမှ ချိုးဖောက်တာမရှိဘူး။ လုံးဝအပြစ်ကင်းစင်တယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ လာမယ့် ၁၈ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီမှာ ကျနော်တို့ အယူခံ တရားလိုရော၊ တဖက်ကရော နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက် ပေးကြရမှာ။ ပေးပြီးကာမှ တိုင်း တရားရုံးက အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ်။"တကယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှာ တင်သွင်းတဲ့ အယူခံလွှာမအောင်မြင်ခဲ့ရင် ဗဟိုတရားရုံးတင်သွင်းပြီး အဲဒီမှာမှ မအောင်မြင်ပြန်ရင်လည်း နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲထံ အယူခံလွှာ တင်သွင်းဖို့အထိ ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။"ကျနော်တို့ ဒီရုံးမှာ မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင် တရားရုံးချုပ်မှာ ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်မှု ဖွင့်ရမှာပေါ့ ဒီဟာကို။ ပြင်ဆင်မှု ဖွင့်လို့လည်း မအောင်မြင်သေးဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ အထူး အယူခံတင်သွင်းမယ်။"ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခုလို ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ၁၈ လ ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် လိုက်တာဟာ စစ်အစိုးရက လာမယ့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀င်မပါနိုင်အောင် နိုင်ငံရေးအရ တမင်အကွက်ဆင် လုပ်ကြံတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အများက ထင်မြင် ယူဆနေကြပါတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်နဲ့ မူးယစ်ဆေးသတင်း နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖော်ပြ04 September 2009 မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း အထူးဒေသ (၁) ဖြစ်တဲ့ ကိုးကန့်နယ်မြေအတွင်းက မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ဖမ်းဆီးမိတဲ့အကြောင်းကို စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ရေးသားလာတာဟာ အဲဒီဒေသက တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတာကြောင့် အခုလို မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူတွေအဖြစ် စစ်အစိုးရဘက်က ဖော်ပြလာတာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး သုံးသပ်သူတွေ ရှိပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း အထူးဒေသ (၁) ကိုးကန့်နယ်မြေထဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ဖမ်းဆီးမိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်တာဟာ ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကြားမှာ ပိုပြီးတင်းမာလာတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့ အဲဒီ ကိုးကန့်ဒေသတွေမှာ မြန်မာစစ်တပ်က ၀င်ရောက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ ကိုးကန့်နယ်မြေတွေ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမျိုး ဖော်ပြတာမရှိသလို အခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အဆင်မပြေ ဖြစ်လာကာမှ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ပြောလိုက်တာဟာ ထူးဆန်းတယ်လို့ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ်ရဲ့ အယ်ဒီတာ ဦးခွန်ဆိုင်းက သုံးသပ်ပါတယ်။"အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ ဦးဖုန်ကြားရှင် တို့ဆို အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာ။ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ပေါ့ ဆိုပြီးတော့ ခေါ်ကြတာပေါ့လေ။ အခုတော့ နိုင်ငံရေးအရ သူတို့ နအဖ နဲ့ ဆန့်ကျင်လာတဲ့ အခါကျတော့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ အလိုအလျောက် မူးယစ်ဆေးဝါး ရာဇာတွေ ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ အရင်တုန်းက ဒီလို ဘာကြောင့် မတွေ့သလဲ၊ အခုမှ ဒီလို ဘာကြောင့်တွေ့သလဲ၊ ဒါ ထူးဆန်းတဲ့ သတင်းပဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။"အခု ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဖုန်ကြားရှင် ကို မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်သလို မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းသွားတဲ့ ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ ဒု-ဥက္ကဌ ပိုင်စောက်ချိန် ကရော မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ကင်းရှင်း မှု ရှိပါရဲ့လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထွက်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီနယ်မြေတွေမှာ ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး ကိစ္စနဲ့ ကင်းရှင်းတဲ့သူ မရှိသလောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးခွန်ဆိုင်းက ပြောပါတယ်။"မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ လုံးဝ ကင်းရှင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင် ဆိုတာ လက်ညှိုးထိုးလို့ မရနိုင်သလောက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့်မိုလို့ အခုချိန်ခါမှ လာပြီးတော့ စွပ်စွဲတာဟာ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တယ်၊ ဒီဥစ္စာဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ ပြောလို့ရပါတယ်။"မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲဖို့ ဖိအားပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာ မအောင်မမြင်ဖြစ်ရာကနေ အခုလို တင်းမာတဲ့ အခြေအနေတွေ စခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးခွန်ဆိုင်းက သုံးသပ်ပါတယ်။"ကိုးကန့်တင်မကပါဘူး။ ဒီဥစ္စာဟာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့ အားလုံးနီးနီးကို ခင်ဗျားတို့ကို တိုက်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအရ မတိုက်ဘူး။ နိုင်ငံရေးအရ ဆိုလို့ရှိရင် - ခင်ဗျားတို့ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေအဖြစ် အသွင် ပြောင်းဖို့လိုတယ်။ ဒါတွေကို ခင်ဗျားတို့က လက်မခံဘူးဆိုတော့ အဲဒီအကြောင်းကို အကြောင်းပြပြီးတော့ ကျနော်တို့ မတိုက်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ကို တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကမ္ဘာက အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်တယ် ဆိုပြီးတော့မှ အဲဒါနဲ့ပဲ တိုက်မှာပဲ။ အဲဒါကို သတိပေးလိုက်တဲ့ သင်္ကေတပဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။"ဒါ့အပြင် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် ကိုးကန့်နယ်မြေတွေမှာ တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမား နောက်ထပ် ဆက်မဖြစ်တော့ပေမဲ့ တိုက်ပွဲငယ်လေးတွေဟာ အခုချိန်အထိ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေဆဲပဲလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။"ကိုးကန့်က စစ်ပွဲအကြီးကြီးတွေကတော့ ပြီးသွားသလောက် ရှိပါပြီ။ အခုကျန်နေတာကတော့ ပျောက်ကျားတိုက်ပွဲတို့ ဘာတို့ ကတော့ ဆက်လက်ကျန်နေဆဲပေါ့။ နံပါတ်နှစ်က နအဖ က စစ်တပ်တွေဟာ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခြင်း မရှိဘဲနဲ့ ၀ ဘက်တို့၊ မိုင်းလား ဘက်တို့၊ ကေအိုင်အေ ဘက်တွေကို အခုထိ ဆက်ပြီးတော့ ပို့နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီဥစ္စာဟာ နောက်ထပ် အခြေအနေ ပိုပြီးတော့ တင်းမာလာမယ့် ပေါက်ကွဲလာမယ့် လက္ခဏာကို ပြပါတယ်ဗျာ။"သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ် အယ်ဒီတာ ဦးခွန်ဆိုင်း ပြောပြခဲ့တာပါ။ ကိုးကန့်ဒုက္ခသည် ကုလတွေ့ခွင့်တောင်း04 September 2009 မကြာခင်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ခြမ်း ကိုးကန့်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ရေး ပဋိပက္ခတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကနေ တရုတ်ပြည်ဘက် ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ကိုးကန့်ဒုက္ခသည်တွေကို တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက တရုတ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ကိုးကန့်ဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက် အရင်ဦးဆုံး သူတို့ဆီမှာ ဘာတွေလိုအပ်တယ် ဆိုတာကို လေ့လာအကဲဖြတ်ခွင့်ရဖို့အတွက် တရုတ်အစိုးရကို ပန်ကြားလိုက်တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်း ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ဘက် ကိုးကန့် တရုတ်လူမျိုးအများစု နေထိုင်တဲ့ဒေသမှာ ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် ကိုးကန့်ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၃ သောင်းလောက်အထိ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်နယ်ထဲကို ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အများစုကတော့ ဌာနေ မြန်မာပြည်ထဲကို ပြန်သွားကြပြီလို့ ဆိုပါတယ်။အခြေအနေ မတည်ငြိမ်တဲ့ ၀ဒေသမှာလည်း ပဋိပက္ခတွေ အချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာမို့ အဲဒီလိုဖြစ်လာရင် ဒုက္ခသည်တွေ ထွက်ပြေးလာနိုင်ဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ကုသလမဂ္ဂက သတိပေးထားပါတယ်။အာဖဂန်စစ် အနိုင်ရရေး အမေရိကန် ဗျူဟာသစ် အချိန်ပေးဖို့လို04 September 2009 Defense Sec. Robert Gates (L) and Joint Chiefs Chairman Adm. Michael Mullen arrive foranews conference at the Pentagon, 03 Sep 2009အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရောဘတ်ဂိတ်စ် (၀ဲ) နှင့် ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုက်ခ်မူလန်။စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၉။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ စစ်ဗျူဟာသစ် အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြသဖို့ အချိန် အကန့်အသတ်နဲ့သာ ရှိတော့တယ်ဆိုတာကို အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရောဘတ် ဂိတ်စ် (Robert Gates) က အသိအမှတ်ပြုပေမယ့် အမေရိကန်တို့ အရေးနိမ့်တော့မယ့် အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီ ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းဆိုသွား ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်က စစ်ပွဲဟာ သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား (Barack Obama) ရဲ့ လက်ချောင်းလေးများအတွင်းက လျှောကျသွားတော့မယ်လို့တော့ သူ မယုံကြည် ဘူး လို့ ၀န်ကြီး ဂိတ်စ်က ကြာသပတေးနေ့က ၀ါရှင်တန်မှာ သတင်းထောက် တွေကို ပြောကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၁,၀၀၀ ထပ်ပို့ဖို့ သမ္မတက အတည်ပြုခဲ့ပြီး တပ် အများအပြား ရော အရပ်သားများပါ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကို မရောက်ကြသေး ဘူး လို့လည်း သူက ထောက်ပြပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသို့ နောက်ထပ် တပ်ဖွဲ့များ စေလွှတ်ဖို့ ဘယ်လို မေတ္တာရပ်ခံချက်မျိုးမဆို လက်ရှိအခြေအနေကို သေချာစွာ စိစစ်ပြီးမှသာ လုပ်ရမှာလို့လည်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ထောက်ပြပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ ဦးရေထက် အာဖဂန်ပြည်သူတွေကို ဘယ်လို အကာအကွယ် ပေးမလဲ ဆိုတာက ပိုပြီး အရေးကြီးပါတယ်လို့ အမေရိကန် ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုက်ခ် မူလန် (Michael Mullen) ကလည်း ပြောဆိုပါတယ်။ဂျပန်ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် မြန်မာကျောင်းသား ထိုင်းခရီးသွားလက်မှတ် ရပြီ04 September 2009 ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် အိုရီဂါမီ (Origami) စက္ကူအရုပ်ချိုးလွှတ် ပြိုင်ပွဲမှာ သွားပြိုင်ဖို့ မြန်မာနွယ်ဖွား နိုင်ငံမဲ့ လူငယ်လေးကို ထိုင်းအစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်သောင်ဒီ ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား မိဘတွေက မွေးဖွားခဲ့တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ် မရနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့က အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ မြန်မာလူငယ်လေးက ချင်းမိုင်ကနေ ဘန်ကောက်ကို ပြန်လာပြီး ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ခဲ့ပေမဲ့ ထိုင်းအစိုးရ ပြည်ထဲရေးဌာနက လက်မခံဘဲ ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီက အစိုးရကို တရားစွဲမယ်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အများက ဒီကိစ္စကို အာရုံစိုက်လာကြရပြီး ထိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးများ စည်းဝေးကာ မောင်သောင်ဒီအား ယာယီ ခရီးသွားလက်မှတ် ထုတ်ပေးဖို့ သဘောတူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ချာချီဝ (Abhisit Vejjajiva)ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြောခွင့်ရလိုက်တဲ့ မြန်မာနွယ်ဖွား လူငယ်လေးဟာ ဂျပန်ပြည်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နဲ့ ၂၀ ရက်တို့မှာ ပြုလုပ်မယ့် အဲဒီ နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲ မှာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရပါလိမ့်မယ်။တရုတ် ရှင်ဂျန်းပြည်နယ် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း ထပ်ဖြစ်04 September 2009 Han Chinese demonstrators push against riot shields of security forces during protest downtown in Urumqi, 03 Sep 2009 ဟန်တရုတ်လူမျိုး ဆန္ဒပြသူများနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အူရုမ်ချီမြို့တွင် ရင်ဆိုင်တွေ့နေကြစဉ်။စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၉။တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းက ရှင်ဂျန်း (Xinjiang) ဒေသ လမ်းတွေပေါ်မှာ ဆန္ဒပြသူတွေ စုဝေးနေကြပါတယ်။ ရာနဲ့ချီတဲ့ လူတွေကို ဆေးထိုးအပ်တွေနဲ့ လိုက်ထိုးတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်အပြီးမှာ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ လုံခြုံမှုမရှိဘဲ နေနေကြရတယ်လို့ ဆန္ဒပြသူတွေက ပြောကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး တိုင်းရင်းသားအုပ်စုဖြစ်တဲ့ ဟန်တရုတ်လူမျိုးတွေ အများဆုံးပါဝင်တဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ အူရုမ်ချီ (Urumqi) မြို့ထဲမှာ ချီတက်နေကြပြီး သူတို့ကို လုံခြုံရေး အကာအကွယ်တွေ ပိုပေးဖို့ ရှင်ဂျန်း အာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဂျန်းဒေသ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၀မ်လီကွမ်ကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆန္ဒပြ လူအုပ်ကြီးကတော့ ဥက္ကဋ္ဌ ၀မ်လီကွမ်ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီး ဒေသအာဏာပိုင်တွေ နုတ်ထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်အတွင်း လူပေါင်း ၄၇၆ ယောက်ဟာ ဆေးထိုးအပ်သုံး အကြမ်းဖက်သူတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ကြရတယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ အထိုးခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာ အဆိပ်သင့်တာနဲ့ မူးယစ်ဆေးအာနိသင် ပြတာတွေတော့ မတွေ့ရဘူးလို့ ဆရာဝန်တွေက ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသင်္ကာသူ ၂၁ ယောက် အဖမ်းဆီး ခံထားရတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။မရှိလည်း ကောင်း ရှိမကောင်း သို့မဟုတ် စာပေကင်ပေတိုင်မိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန်စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၉ယခုတပတ်ထုတ် လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါးအချို့ကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် စာနယ်ဇင်းလောကမှ ဂျာနယ်လစ် အချို့ အမြင်ရှုပ်ထွေးကုန်ကြပါတယ်။ အစဉ်အမြဲ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားများ အခွင့်အရေး အတွက် ပြောဆိုရေးသားခဲ့တဲ့ လူထုစိန်ဝင်းက စာပေစိစစ်ရေး ညွှန်မှူး ဗိုလ်မှူး တင့်ဆွေ (ကလောင် အမည် ရဲရင့်တင့်ဆွေ) ရဲ့ဆောင်းပါးများ စုစည်းပြီးထုတ်တဲ့ စာအုပ်မှာ အမှာစာရေးပေးခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူး တင့်ဆွေကို `စာပေကို တန်ဖိုးထားသလို စာရေးဆရာတွေအပေါ်မှာလည်း စာနာစိတ်ရှိတဲ့သူလို့ မှတ်ချက်ချမိတယ်´ `ဒီအဖွဲ့လက်ထက်မှာ ကိုယ်တိုင်ရေး တဲ့စာတွေ အဖြုတ်ခံရတာ သိသိသာသာကြီးကို လျော့နည်းသွားတာ လည်းအမှန်ဖြစ်တယ်´ လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆရာလူထုစိန်ဝင်း ဘယ်လို ဖြစ်သွားပါလိမ့် ဆိုပြီး စာနယ်ဇင်းလောက ထဲကသတင်းထောက်တွေ မေးကုန်ကြပါတယ်။ စိစစ်ရေးကို ရှုမြင်ပုံတွေ ပြောင်းကုန်ပြီလား၊ တကယ်ပဲ စိစစ်ရေးဟာ ပြောင်းလဲလာသလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေ အချင်းချင်း မေးမြန်းကုန်ကြပါတယ်။ဆရာက စာပေစိစစ်ရေး ရှိတာကို ရှိသင့်တဲ့သဘောမျိုး လက်ခံထားလိုက်ပြီလား၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အရ ကောင်းတယ်ဆိုးတယ် ဆိုတာ အငြင်းပွားနိုင်သော်လည်း စိစစ်ရေး ရှိနေတာကိုက စာအုပ်စာပေ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဝေဖို့၊ သတင်းတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် စာဖတ်သူဆီရောက်ဖို့ ၊ လူတွေဖတ်ချင်တဲ့ သတင်းအချက် အလက်မှန်တွေ တတ်နိုင်သမျှ မရောက်အောင်နဲ့ အစိုးရရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချက်၊ လူထုရဲ့ ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားတဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချက်တွေ ပုဂ္ဂလိက စာစောင်တွေမှာ အခမဲ့ ထည့်သွင်းစေဖို့အတွက် စာပေ စိစစ်ရေးဆိုတာ ယန္တရား တခုဆိုတာ ဆရာမပြောတော့ဘူးလား စသဖြင့် လူငယ် သတင်းထောက်များအကြား မေးမြန်းလာကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာ တင်မကပဲ တေးသီချင်းရေးဖွဲ့သူ၊ ဘာသာရေး စာအုပ်စာတန်းတွေ ထုတ်ရာမှာ၊ နိုင်ငံရေး အထုပ္ပတ္တိစာအုပ်စာပေ၊ သမိုင်းစာပေတွေ ထုတ်ဝေရာမှာပါ စာပေစိစစ်ရေးဟာ အတားအဆီးကြီး တခု၊ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားလို့ မရတဲ့အရာ တခုပါ။ ၁၉၆၂ တော်လှန်ရေးကောင်စီအာဏာ သိမ်းပြီး စစ်တပ်အာဏာရှင် စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်လာပြီးနောက် စာပေစိစစ်ရေးယန္တရားကို တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။စာပေလောက၊ သတင်းမီဒီယာလောကမှာ စာပေစိစစ်ရေးဟာ အစဉ်အမြဲ ဆူးညှောင့်ခလုတ်တခု၊ အတားအဆီးကြီး တခုဖြစ်နေတယ်လို့ ဒီလောကကလူတွေ အားလုံးနားလည်ထားကြပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာ လောကက အယ်ဒီတာတွေ၊ ပိုင်ရှင်တွေက စာပေစိစစ်ရေးဆိုတာကို အိမ်ဦးခန်းမှာ ဆွဲထားတဲ့နတ်အုန်းသီးလို သဘောထားပြီး ပသနေကြရပါတယ်။ မ ပသတဲ့ဂျာနယ်၊ အယ်ဒီတာတွေကတော့ ကံမကောင်းနိုင်ကြရှာပါ။ ငွေကြေး အကျိုးအမြတ်ပေးသူ၊ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာမှန်မှန် ပေးသူ၊ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီကို ထောက်ခံရေးသားပေးတဲ့ ဂျာနယ်တွေဆို စိစစ်ရေးက အခွင့်အရေးပေးပြီး ၊ လူထုဘက်က ရပ်တည်သူ၊ အစိုးရအပေါ် ဝေဘန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ အယ်ဒီတာ၊ သတင်းထောက်တွေရဲ့ ဂျာနယ်၊ ဆောင်းပါးတွေကို ဖြတ်တောက် ခုတ်ထစ်၊ အချိန်ဆွဲထား စတဲ့နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ နှောင့်နှေးအောင် ဈေးကွက်မှာ ရပ်တည်ရ ခက်အောင် လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ ဒီလောက ကအားလုံး သိရှိကြပါတယ်။ရန်ကုန်မီဒီယာ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အလဲဗင်းမီဒီယာက စာပေစိစစ်ရေးကို အိတ်ထဲထည့်ထားတယ်ဆိုတာ အားလုံး လက်ခံထားကြပါတယ်။ သတင်းဂျာနယ် မထုတ်ခင်ကတည်းက ညဘက်သန်းကောင်ကျော် မှာကန်တဲ့ ဘောလုံးပွဲကို First Eleven က မနက်မှာ အချပ်ပိုနဲ့ဖေါ်ပြခွင့်ရှိခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ပိုင်း သတင်းဂျာနယ်ထုတ်ဝေ လာတော့လည်း ဘယ်ဂျာနယ်တိုက်နဲ့မှ မတူတဲ့အခွင့်အရေးတွေ ရတာ၊ ညဘက်ဖြစ်ပွားတဲ့ သတင်းတွေ နောက်တရက်မနက်ထွက်တဲ့ အလဲဗင်းဂျာနယ်မှာ ဖေါ်ပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖေါ်ပြခွင့်ပေးတာကို အခြားဂျာနယ်တိုက်တွေက ဝေဘန်ကြတဲ့အခါမှာ နောက်ပိုင်း အခြားဂျာနယ်တွေလည်း အဲဒီလိုသတင်းမျိုး ညဘက်သွားပြတာ၊ တာဝန်ခံပြီး သတင်းကို ဖေါ်ပြတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးနောက်ပိုင်းမှ ရကြတာပါ။မကြာမီ သတင်းပတ်မှာတော့ ဆရာလူထု စိန်ဝင်းကို လျှပ်တပြက် အယ်ဒီတာချုပ် မြတ်ခိုင်က ချဉ်းကပ်ကာ အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး မီဒီယာနဲ့ အန်ဂျီအိုဆိုပြီး အင်တာဗျူး ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ မြတ်ခိုင်က ဆရာလူထုစိန်ဝင်းကို ခွဲထုတ်ပြီး စိစစ်ရေးနဲ့ ဆရာနဲ့အကြားမှာ ဘာမှ ပြဿနာမရှိတော့ သယောင် ပုံဖေါ်တာလို့ နားလည်သူကနားလည် ကြပေမယ့် အချို့သော မီဒီယာလောကမှ သူတွေကတော့ ဆရာများ ပြောင်းလဲသွားပြီလား ဆိုပြီး ထင်မြင်ကြပါတယ်။သတင်းထောက်တယောက်က `ဆရာ့ အနားကို မြတ်ခိုင်တို့ ဗိုလ်မှူး တင့်ဆွေတို့ ကပ်လာကြတော့ ဆရာ အနီးမှုန်သွားသလား မပြောတတ်ဘူး၊ အဝေးမှာနေတုန်းကတော့ သူတို့ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ဟာ ဘာဆိုတာကို ဆရာနားလည်ပေမယ့် အခုလို အနီးကပ်လာတော့ မှုန်ဝါးသွားလားမသိဘူး´ လို့အားမရတဲ့ လေသံနဲ့ ပြောပါတယ်။ယခုတပတ် လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်မှာ ရုပ်ရှင် မင်းသားကြီး ဦးထွန်းဝေ ရဲ့ ဓါတ်ပုံ ဖေါ်ပြခွင့်ရတာ၊ ဆရာတင်မိုးရဲ့ ဆောင်းပါး ယခုသီတင်းပတ်ပိုင်းမှာ ဖေါ်ပြခွင့်ရတာ၊ ဆရာတင်မိုးနာမည် ပြန်ဖေါ်ပြခွင့်ရတာ၊ ဆရာနန်းညွှန့်ဆွေရဲ့ ကလောင်ခွဲ သုခမိန်ကိုလည်း နန်းညွန့်ဆွေမှန်းသိလျက်နဲ့ စိစစ်ရေးက ဖေါ်ပြခွင့်ပြုတာတွေဟာ စိစစ်ရေး မူပြောင်းလဲလာပြီ ဆိုပြီး ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဦးထွန်းဝေ၊ ဆရာတင်မိုးတို့ကို အမည်ဖေါ်ပြခွင့်ပြုတာဟာ စာပေစိစစ်ရေးအနေနဲ့ သဘောထားကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့စာတွေ၊ သူတို့ရဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေ ပြန်လည်ထုတ်ဝေ၊ ပြသခွင့်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ယခုအချိန်ထိ ကျင့်သုံးလာတဲ့ အစိုးရနဲ့ သဘောကွဲလွဲတဲ့သူ အမည်ပါရင်တောင် ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ မူဟာ ဘယ်လောက်ထိ ကလေးကလား ဆန်တယ်ဆိုတာ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဦးထွန်းဝေဆိုရင်လည်း ၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ သေဆုံးသည်အထိ ဆယ်လေးငါးနှစ် ကျော်သူ့အနုပညာတွေ ဖေါ်ထုတ်ခွင့်မရတော့တာ၊ အမည်တောင် ဖေါ်ပြခွင့်မရှိခဲ့တာဟာ စစ်အစိုးရ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ချုပ်ချယ်လွန်းတဲ့ မူဝါဒတွေဆိုတာ မေ့လို့မရပါဘူး။အခုလက်ရှိမှာကိုပဲ နာမည်လေးတောင် ဖေါ်ပြခွင့်မရှိသူ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ သတင်းစာဆရာ တွေဒါဇင်နဲ့ ချီရှိနေပါသေးတယ်။ ကွယ်လွန်ပြီးသူတွေထဲမှာ မောင်သော်ကလို၊ သက်ရှိထင်ရှား ထဲကဆို မောင်စွမ်းရည်၊ ဒါရိုက်တာ ၀င်းဖေ၊ အဆိုတော် မာမာအေး စတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ရော အမည်ဖေါ်ပြခွင့်၊ ဓါတ်ပုံ ဖေါ်ပြခွင့်ရဖို့ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ အထိစောင့်ဆိုင်းရမှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ဒီနေ့ သတင်းဂျာနယ် လောကမှာ သတင်းရေးနေတဲ့သူတိုင်း ကိုယ်ရေးတဲ့ အချက်အလက်ခိုင်လုံပြီး စာဖတ်သူဖတ်ရှု ရရင် အကျိုးလည်းရှိမယ့် သတင်းတပုဒ် စိစစ်ရေးမှာ ဖြုတ်တာခံလိုက်ရရင် ဘယ်လိုခံစားရသလဲ ဆိုတာ ခံစားရဖူးသူတိုင်း နားလည်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နာဂစ်ဖြစ်ပြီးခါစမှာ တပတ်သာသာလောက်ပဲ သတင်းတွေ ဓါတ်ပုံတွေ အတိုင်းအတာတခုထိ ဖေါ်ပြခွင့်ရခဲ့ပြီး နောက်မှာတော့ နာဂစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဒုက္ခရောက်နေဆဲ နေရာ ဒေသတွေ အကြောင်း၊ ဒုက္ခရောက်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့် သတင်းတွေ၊ ကူညီမယ့်သူတွေအတွက် အထောက်အကူပြုမယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေ အများစုဟာ စာပေစိစစ်ရေးကို ဖြတ်ကျော်မလာနိုင်ပဲ အမှိုက်ခြင်းထဲပဲ ရောက်ကုန်ပါတယ်။နာဂစ် ပတ်သက်ပြီး သတင်းယူခဲ့တဲ့ သတင်းထောက်တချို့ဆိုရင် နှစ်ညအိပ် ၊ သုံးညအိပ် ဒုက္ခခံကာ သွားရောက်ပြီး သတင်းယူခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ စာဖတ်သူ ရှေ့မပို့နိုင်ပဲ စိစစ်ရေးမှာတင် မှင်နီနဲ့ ကြက်ခြေခတ်ခံလိုက်ရလို့ စိတ်ထိခိုက်ကာ မျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးတောင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်း ကြိုးစားခဲ့သမျှ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်စေတာဟာ စိစစ်ရေးဆိုတဲ့ စနစ်ကြီးကြောင့်ပါ။မြန်မာပြည်မှာလို စာပေစိစစ်ရေး ဆိုတာကြီး သူများနိုင်ငံတွေမှာ မရှိကြပါဘူး။ အခြားနိုင်ငံကသူတွေ ကြားတဲ့အခါ စာပေစိစစ်ရေးဆိုတာကြီးကို နားလည်အောင် မနည်းရှင်းလင်းပြရပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာနိုင်ငံလို စာပေစိစစ်ရေး ရှိတဲ့နိုင်ငံ လက်ချိုးရေးရလောက်အောင် နည်းပါးမှာပါ။ပုဂ္ဂလိက နေ့စဉ်သတင်းစာတွေ မထုတ်နိုင်တာဟာလည်း စာပေစိစစ်ရေးကြောင့်ပါပဲ။ သတင်းတွေ အနည်းဆုံး နှစ်ရက်ကနေ အများဆုံး ၅၊ ၆ရက်ထိ ရက်ခေါက်ပြီးမှ စာဖတ်သူထံရောက် ရတာဟာလည်း စာပေစိစစ်ရေးကြောင့်ပါ။စာပေစိစစ်ရေး ရှိတာ ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေကြောင့်မဟုတ်သလို ၊ ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေ ရှိနေလို့လည်း စာပေစိစစ်ရေးဆိုတာဟာ လက်ခံစရာ၊ ချီးမွမ်းစရာ ဌါနတခုမဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ စာပေ စိစစ်ရေး ဆိုတာဟာ အမှန်တော့ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုလိုလားတဲ့ သတင်းသမားတိုင်း၊ စာပေ အနုပညာ လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးလိုသူတိုင်း အတွက်မလိုလား အပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါပဲ။ နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက် မတူတော့သည့်အတွက် ကိုးကန့်အရေးကို စစ်အစိုးရက ဖန်တီးခဲ့ဟု (ဗကပ) ပြောFriday, 04 September 2009 14:59 ဗထူးE-mail Printမကြာမီကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ခိုက်မှုသည် ယခင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲကာလနှင့် နှစ်၂၀ ကြာ (နအဖ)၏ ယနေ့နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက် မတူတော့သည့်အတွက် စစ်အစိုးရက ဖန်တီးခဲ့သည်ဟု ယမန်နေ့က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(ဗကပ) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ယခုထုတ်ပြန်ချက်တွင် (န၀တ) (နအဖ) စစ်အစိုးရလက်ထက် ထားရှိသည့် နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်အပေါ် သုံးသပ်တင်ပြထားပြီး ရှေ့အလားအလာနှင့် ၎င်းတို့ပါတီ၏ သဘောထားများကို ဖော်ပြထားသည်။၁၉၈၉ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့(န၀တ) လက်ထက် နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်မှာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(ဗကပ) ပြိုကွဲရေး၊ တောခိုလာသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနှင့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား အဆက်ဖြတ်ရေးနှင့် တရုတ်အစိုးရနှင့် ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ထို့နောက် ယနေ့ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ(နအဖ) လက်ထက်တွင်မူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီပြိုကွဲရေး၊ ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ၈၈ မျိုးဆက်များ အညံ့ခံ၍ ပြည်တော်ပြန်လာရေးနှင့် အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ထားသည်။ကိုးကန့်အရေးအခင်း ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့် ပတ်သက်၍ “ ၂၀၀၉ နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက် အောင်မြင်ဖို့ (နအဖ)က သွေးတိုးစမ်းနေတာ ကြာပါပြီ၊ ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံထဲကဖြစ်တယ်။ (NLD) က သပိတ်မှောက်ထားတဲ့ ညီလာခံကို (ငြိမ်း)အဖွဲ့တွေ တက်လာအောင် (နအဖ) က လုပ်ခဲ့တာပါ၊ ဒါဟာ ပေါ်လစီအပြောင်းအလဲ စပြီး လုပ်တာပါပဲ။ ၁၉၉၈ ကတည်းက (ငြိမ်း)အဖွဲ့တွေကို ဗမာပြည်ရဲ့ ပင်မ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုရေစီးကြောင်းထဲ မပါအောင် လုပ်ထားရာကနေပြီး ပင်မနိုင်ငံရေးထဲ ပါလာအောင် လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီလို တနပ်စားဥာဏ်နဲ့ လုပ်လိုက်တာရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ် ကိုးကန့်အရေးအခင်း ပေါ်လာတာပဲ” ဟု (ဗကပ)ပြောခွင့်ရက ပြောဆိုသည်။စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး (ငြိမ်း)အဖွဲ့များသည် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့(BGF) ဖွဲ့စည်းမှုကို လက်ခံပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်ဟု ထင်ထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ယင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် (BGF) ဖွဲ့စည်းမှုကို လက်မခံခြင်း၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ငြင်းဆိုလာခဲ့ခြင်းအပြင် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ရပ်တည်ချက်သည် အခြေခံအားဖြင့် (NLD) ပါတီ၏ ရွှေဂုံတိုင်ရပ်တည်ချက်နှင့် တူနေသည်ဟု ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ထိုအခြေအနေများကြောင့် စစ်အစိုးရက ကိုးကန့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးဖုန်ကြားရှင်အား အမှုဆင်ဖမ်းဆီးရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်တွင် လက်နက်ကိုင်ဖြေရှင်းသည်အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ရှေ့အလားအလာနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ရာတွင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးသည် ယခု ကိုးကန့်အရေးမှ စတင်ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ရာ အဆိုပါပဋိပက္ခသည် ပိုမိုကြီးမားလာတော့မည်ဟု ဆိုသည်။“(နအဖ)ကလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ထုတ်ရတော့မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဖွဲ့ရတော့မယ်၊ အဲ့ဒါတွေ မထုတ်ပြန်ခင်မှာ (NLD) ကို ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကနေ ရွေ့သွားအောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ မအောင်မြင်ဘူး။ (ငြိမ်း)အဖွဲ့တွေကို ငြိမ်အောင်လုပ်တာလည်း မအောင်မြင်ရုံမက ဆန့်ကျင်ဖက်အကျိုးတွေပဲ ဖြစ်လာနေပြီ” ဟု (ဗကပ)ပြောခွင့်ရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။၎င်းတို့ပါတီ၏ သဘောထားကို ဆက်လက်ဖော်ပြရာတွင် ယင်းတို့အခေါ် (ရဲဘော်ဟောင်း) ယခင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ခွဲထွက်သွားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ ဗမာပြည် ပင်မနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုထဲသို့ ပါဝင်လာသည်ကို ကြိုဆိုအားပေး၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်သွားမည်ဟု ဖော်ပြကာ မော်စီတုန်းအတွေးအခေါ်ကို ဗမာပြည်တော်လှန်ရေးလက်တွေ့နှင့် ပေါင်းစပ်ဖို့ (ရဲဘော်ဟောင်း)မိတ်ဆွေများကို တိုက်တွန်းသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လ (၂၈) ရက်နေ့ကလည်း ကိုးကန့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးဖုန်ကြားရှင်က အထူးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကို စစ်အစိုးရက စတင်ဖောက်ဖျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၄ နှစ်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တဖက်သတ် အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့သည့် အခြေခံဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ ဆန္ဒသဘောာထား မပါသည့်အတွက် ထောက်ခံမှုမရှိဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ထို့အပြင် အမျိုးသားညီလာခံတွင် တင်ပြခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားများ၏ တောင်းဆိုချက်များကို လိုက်လျောခြင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက် များစွာသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနေဖြင့် လက်နက်စွဲကိုင်တောင်းဆိုရသော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်ရာ လောက်ကိုင်နှင့် ချင်းရွှေဟော်ဒေသများသို့ စစ်အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ အခြားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့၏ နယ်မြေများအတွင်း စစ်ရေးအရ အင်အားတိုးချဲ့ချထားမှု၊ ပြင်ဆင်မှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။အဆိုပါ ကိုးကန့်အရေးမတိုင်မီကာလတွင် စစ်အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရေးကို လက်မခံသည့် ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (UWSA)၊ ကချင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA)၊ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ (MNDAA)၊ မိုင်းလားဒေသ (NDAA-ESS) အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့က ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လအတွင်း စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည် မြို့နယ်ဥက္ကဌ ကိုယ်ကျိုးရှာအမြတ်ထုတ်မှုကို အောက်ခြေဝန်ထမ်းများ မကျေနပ်Thursday, 03 September 2009 11:42 ဉာဏ်မောင်E-mail Printရန်ကုန်တိုင်း၊ ခရမ်းမြို့နယ်(မယက)ဥက္ကဌက ဌာနပိုင်ပစ္စည်းများကို ငှားရမ်းကာ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးပြုနေပြီး ဝန်ထမ်းလစာများကိုလည်း အဆမတန် ဖြတ်တောက်မှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်းများ မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြသည်။မယကဥက္ကဌ ဦးလှသောင်းက ရုံးပိုင် ဖုန်းနှစ်လုံးကို တလလျှင် ကျပ် ၂ သောင်းနှုန်းဖြင့် နှစ်ချုပ် ငှားရမ်းထားပြီး ဝန်ထမ်းများ လစာထုတ်လျှင်လည်း ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးပြ၍ ငွေဖြတ်ယူထားကြောင်း အမည်မဖော်လိုသည့် ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။“ဖုန်း၂ လုံးကို ကျုံတူးကျေးရွာက ဦးတင်အောင်ကို တလုံး ငှားထားတယ်။ နောက်တလုံးက ထရံကန်ကျေးရွာကို ငှားထားတယ်။ ၂ နှစ်စာ ငှားထားတဲ့ ငွေကို သူ အကုန်သုံးထားတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ လစာထုတ်ရင်လည်း ဆွမ်းလောင်းကြေး ၅၀၀၊ ထီဖိုး ၁၀၀ နဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာကြေး ၄,၂၀၀ လစာထဲကနေ ဖြတ်တယ်။ အဲဒါတွေကို သူ့အတွက်ပဲ သုံးနေတာ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ဦးလှသောင်း ခရမ်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသည့် အချိန်မှစ၍ အစိုးရက ထုတ်ပေးသည့် မြေသြဇာများကိုလည်း လယ်သမားများထံ ရောက်ရှိအောင် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းမရှိဘဲ ရုံးဝန်ထမ်းများမှတဆင့် နေကြာမျိုးစေ့များ ရောင်းချခိုင်းပြီး ငွေကျန်ဝန်ထမ်းများကို အတင်းအကြပ် အမှုဖွင့်အရေးယူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါဝန်ထမ်းက ဆက်ပြောသည်။“မျိုးစေ့တွေ ရောင်းခိုင်းထားတာက လယ်သမားတွေ အခက်အခဲဖြစ်တော့ ငွေကျန်ရှိနေတဲ့ ဝန်ထမ်း ၈ ဦးကို ၂၀၀၇ တုန်းက မြို့နယ်တရားသူကြီးကို သူ့ရုံးခန်းထဲခေါ်ပြီးတော့ အမှုဖွင့်အရေးယူခိုင်းတယ်။ စာရေးဝန်ထမ်းတွေက အပြင်မှာ ငွေရှာပြီး စိုက်ရှင်းလိုက်ရတယ်။ သူရောက်လာတဲ့ ၂ နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ ဝန်ထမ်း ၂၂ ဦးကို အကြောင်းရှာပြီး အလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ထို့အပြင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အလှူငွေများ မကြာခဏ ကောက်ခံနေသော်လည်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တစုံတရာ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်း အဆိုပါ ဝန်ထမ်းက ဆက်ပြောသည်။“သူရောက်လာပြီးတော့ မြို့မှာ တိုးတက်မှု ဘာမှမရှိဘူး။ သူ့ဆီမှာတော့ သိန်းနှစ်ရာလောက်တန်တဲ့ (၁ခ/၇၃၆၇) နံပါတ်နဲ့ ကားတစီးရယ်၊ ၇ သိန်းတန် ဆိုင်ကယ်တစီးရယ် ဝယ်ထားနိုင်တယ်၊ ဒီကိုမရောက်ခင်က သာပေါင်းမြို့မှာ အိမ်တလုံး၊ သီဟို၌ခြံ၊ အင်းအိုင်တွေ လုပ်ထားတာရှိတယ်။ ကားတစီးဝယ်ထားတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ထိုကဲ့သို့ မယကဥက္ကဌက ဝန်ထမ်းများအပေါ် ညှာတာထောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ လုပ်ဆောင်နေသဖြင့် မြို့ပေါ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအများစုကလည်း မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြောင်း အမည်မဖော်လိုသည့် ဝန်ထမ်းက ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။KNU မဲကသာဒေသသို့ DKBAနောက် နအဖစစ်ကြောင်းလိုက်ပါဝင်ရောက်Kaowao စက်တင်ဘာ ၄၊၂၀၀၉။စံခလပူရီ(စက်တင်ဘာ-၄)i။ - ။ ဒီကေဘီအေ စောနော်တယာ စစ်ကြောင်း ဘုရားသုံးဆူဒေသအနီးရှိ မဲကသာရွာ သို့ ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် ယမန်နေ့တွင် နအဖစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်း ၄င်းရွာအနီးသို့ ထပ်မံရောက်ရှိလာရာ ရွာသားအချို့ အခြားနေရာများသို့ မသိမသာပြောင်းရွေ့ထွက်ခွာနေကြကြောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်မှုများအရ သိရသည်။အဆိုပါ ဝင်ရောက်လာသည့် နအဖစစ်ကြောင်းမှာ ဘုရားသုံးဆူမြို့၌ အခြေပြုလျှက်ရှိသော ခမရ ၂၈၃ မှ ဗိုလ်ကြီး အောင်သန်းဝင်း ဦးစီးအင်အား ၃၀ ခန့်တပ်ခွဲတစ်ခွဲဟု ယူဆရကြောင်း၊ မဲကသာချောင်းတစ်ဝိုက်၌ လှုပ်ရှားနေကြ ကြောင်း KNU တပ်မဟာ ၆ ပြောခွင့်ရ အရာရှိတစ်ဦးက ဆိုပါသည်။KNU တပ်မဟာ၆ တပ်ဖွဲ့သည် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာမှုကို တစ်စုံတစ်ရာ အနှောက်အယှက် မပြုသေးသော် လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ ယခုကဲ့သို့ဝင်ရောက်လာမှုအပေါ် အဆိုပါတပ်ဖွဲ့များ အကြား မကြာမီတွင် တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဒေသခံများ ယူဆနေကြသည်။မဲကသာသို့ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရောက်ရှိလာသော DKBA အမှတ် ၉၀၇ တပ်ရင်းမှူး စောနော်တယာနှင့် အမှတ် ၉၀၁ မှ ဗိုလ်ကြီးစောအေဝမ်းတို့တပ်ဖွဲ့အင်အားမှာ ၇၀ ခန့်သာရှိသည်ဟု နယ်စပ်စစ်ရေး လေ့လာနေသူများ ခန့်မှန်း တွက်ချက်နေကြသည်။ထို့အတူ DKBA တပ်ဖွဲ့များ မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်များ အကူအညီဖြင့် KNU တပ်မဟာ ၅၊ တပ်မဟာ ၇ ဧရိယာများ တွင်လည်း ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေကြဆဲဖြစ်သည်။မြန်မာစစ်အစိုးရကမူ ကရင်လူမျိုးအချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှုများသာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရတပ်များ ပါဝင်ပတ်သက် မှုမရှိကြောင်း လွန်ခဲ့သည့်ဇွန်လထုတ် စစ်အစိုးရသတင်းစာများ၌ ထုတ်ပြန်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။မဲကသာဒေသသည် KNU တပ်မဟာ ၆ အဓိကခြေကုတ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ DKBA ကိုအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းမှာ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အပေးအယူများရှိကြသည်ဟု နယ်စပ်စစ်ရေးလေ့လာသူများ လက်ခံရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များအရ သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြသည်။သို့သော် KNU အရာရှိက ၄င်းအပေးအယူကိစ္စကို အတည်မပြုခဲ့သော်လည်း တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် စကားပြောစက် ဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုရှိကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ok မိုင်းများကိုပြင်ဆင်နေသော စောနော်တယာ၏ ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အဆိုပါ မဲကသာရွာ၌ ဒီကေဘီအေ စခန်းသစ်တည်ဆောက်မည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည်။ ဒေသခံရွာသား များအား ရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကိုလည်း DKBA မှ ပိတ်ပင်ထားသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။ ဆိုပါ မဲကသာရွာ၌ ဒီကေဘီအေ စခန်းသစ်တည်ဆောက်မည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည်။ ဒေသခံရွာသားများ ရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကိုလည်း DKBA မှ ပိတ်ပင်ထားသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။အဆိုပါ စောနော်တယာ ဒီကေဘီအေစစ်ကြောင်းမှာ ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် စခန်းချနေစဉ် ရိက္ခာပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး သစ်ကုန်သည်များအပေါ် သယ်ဆောင်ခွင့်အကောက် တိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့ရ သည်ဟု သတင်းများတွင် ဖေါ်ပြကြသည်။KNU တပ်မဟာ ၆ အနေဖြင့် ကရင်အမျိုးသားအချင်းချင်း ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကို မပြုလုပ်လိုဟု သတင်းများတွင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြား ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တို့ ယခုကဲ့သို့ ဝင်ရောက်လာမှုအပေါ် KNLA တပ်ရင်း ၁၆ ကလက်မခံနိုင်ကြောင်း KNU အရာရှိက ဆိုပါသည်။ KIO ဌာနချုပ်ရှိ ဒေသခံများတရုတ်ပြည်သို့ ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းမှု တရုတ်ကလက်မခံဇော်ကြီး။စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်ရုံးစိုက်ရာ လိုင်ဇာမြို့ရှိ ဒေသခံများမှ တ ရုတ်ပြည်ဖက်သို့ ပစ္စည်းများပြောင်းရွှေ့နေမှုကို တရုတ် အာဏာပိုင်များက လက်မခံဟု ဒေသခံများကပြောသည်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း လိုင်ဇာမြို့နှင့်အနီးတ၀ိုက်တွင် စစ်အစိုးရတပ်အင်အားများ ပိုမိုဖြည့်တင်းလာမှုကြောင့် တိုက် ပွဲများဖြစ်ပွားလာမည်ကို စိုးရိမ်ပြီး ယနေ့နံနက်က တရုတ်ပြည်ဖက်သို့ ပစ္စည်းသယ်ပို့သည့် ဒေသခံများအား တ ရုတ်အာဏာပိုင်များက လက်မခံဘဲ မောင်းထုတ် နေသည်ဟု လိုင်ဇာမြို့ခံတဦးကပြောသည်။တရုတ်ပြည်ဖက်ခြမ်းမှ လာရောက်စီးပွားရှာနေကြသည့် တရုတ်လူမျိုးများကိုသာ ပစ္စည်းသယ် ယူခွင့်ပေးပြီး မြန် မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်မောင်းထုတ်နေသည်ဟု ၎င်းကယခုလိုပြောသည်။“သူတို့နိုင်ငံကလူတွေသယ်တာတော့ ခွင့်ပြုတယ်။ ဒီဖက်ကမ်းကလူတွေဆိုရင်တော့ ပြန်မောင်း ထုတ်ခဲ့ တာ။ အခု ဂိတ်တဲ့တဲ့ကဆိုင်ထဲကနေ မြင်နေရတယ်။”ဒေသခံလူထုများသည် ယခင်နေ့များကတည်းက ပြောင်းရွှေ့နေကြသော်လည်း ယနေ့နံနက်မှ တရုတ်အာဏာပိုင် များက ပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်သည်။ယခုလိုဒေသခံများ တရုတ်ဖက်ခြမ်းသို့ရွှေ့ပြောင်းနေမှုအား ကေအိုင်အိုမှ တရားဝင်ပြောင်းရွှေ့ ခိုင်းခြင်းမဟုတ် သ လို ပိတ်ပင်တားဆီးမှုလည်းမရှိဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။“လူထုတွေ ပြောင်းတာရွှေ့တာကိုတော့ ဘာမှမပြောဘူး။ ပြောင်းပါလို့လည်းမညွှန်ကြားထားဘူး။ စိတ် မချဘူးဆိုလည်း သွားနေကြပေ့ါ။ ဘာမှမဖြစ်ဖူးလို့ပဲပြောတယ်။”ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်အနီး လဂျားယန်ရွာသို့ သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းက ရောက်ရှိလာသည့် စစ်အစိုးရတပ်များ ပြန် လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း မရှိသည့်အပြင် ထပ်မံတိုးလာခဲ့သည်။သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ညက လက်နက် ခဲယမ်းများ တင်ဆောင်ထားသည့် ကားသုံးစီး လဂျားယန်ရွာသို့ ထပ်မံ ရောက်ရှိလာပြီး စစ်အစိုးရတပ်အင်အားများပိုတိုးလာသည်ဟု ၎င်းက ယခုလိုဆက်ပြောသည်။“လဂျားယန်နဲ့ မန်ဆန်ယန်ကြားပေ့ါ။ နောက်ဒီ မြစ်ကြီးနားကားလမ်းတလျှောက်မှာ နေရာတကာ တွေ့ နေရတယ်လို့ပြောတယ်။ ကားစီးခဲ့တဲ့ ခရီးသည်တွေပြောတာကတော့ တလမ်းလုံးသူတို့ချည်းပဲ စိမ်းနေ တာပဲတဲ့။”ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကလည်း ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ၎င်းတို့၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများအား ပြန်လည်စုဆောင်း နေသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။လွန်ခဲ့သည့် သြဂုတ်လက ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့များအား စစ်အစိုးရမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ KIA လှုပ်ရှားနယ် မြေအတွင်း စစ်အစိုးရတပ်များ ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သည့် သြဂုတ်လအတွင်းက ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့များကို စစ်အစိုးရမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အပေါ်အခြေခံ၍ KIO အ ပေါ် စစ်ရေးအရ ဖိအားပေးလာပြီး တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာမည်ကို ဒေသခံများကစိုးရိမ်နေကြသည်။ မြန်မာ အလုပ်သမား ၂၄ ဦး အလုပ်ထုတ်ခံရမြတ်သဇင်။စက်တင်ဘာလ ၃ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း မဟာချိုင်ဒေသရှိ Lim Line co,ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ မြန်မာအလုပ်သမား ၂၄ ယောက် အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့က အလုပ်ထုတ်ခံရသည်ဟု မသီတာ က ယခုလို ပြောသည်။“၉လပိုင်း ၁ရက်နေ့က ကျမတို့ ၂၄ ယောက်ကို အလုပ်ထုတ်ပစ်တယ်၊ ကျမတို့ကို နေ့စား ပေးထား တာ။”အလုပ်ထုတ်ခံရသူအများစုမှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အထဲတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် အ မျိုးသား ၅ ဦးပါဝင်သည်။ယင်းစက်ရုံမှ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များသည် ယခင်ကလည်း လူဟောင်းများကို အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှာ၍ အလုပ်ထုတ်နေသည်ဟု အလုပ်ထုတ်ခံရသူ ကိုဆွမ်ချိုင်းက ပြောသည်။“လူဟောင်းတွေကို ပဲထုတ်တယ်၊ ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက လူသစ်တွေကို ခေါ်လို့ရှိရင် သူတို့အ တွက် ဆမတ်ခလို့ ခေါ်တဲ့ အလုပ်သွင်းခ ပိုက်ဆံရတယ်၊ လူတယောက်ဝင်လို့ ရှိရင်၊ ဗမာပြည်သား အ လုပ်ဝင်ခ ၄၀၀၀ ကနေ ၈၀၀၀ ထိရှိတယ်၊ အဲဒါကြောင့် လူဟောင်းတွေကို အပြစ်ရှာပြီးထုတ်တာ၊ အခု အလုပ်ထုတ်ခံရသူတွေ ကလည်း ၂ နှစ်ကနေ ၅နှစ် အထိရှိတာ၊ နောက်လည်း လူ၁၀၀ လောက်ထုတ် ဦးမယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်။”အလုပ်ထုတ်ခံရသူများသည် လုပ်အားခ မရရှိသဖြင့် အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့ နေရသည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြော သည်။“လုပ်အားခလည်းမရသေးဘူး၊ ပိုက်ဆံရဖို့လို့နော် ၁၃ရက်စာက တစ်ယောက် ၃၀၀၀ ကျော် ၄၀၀၀ လောက်ရမယ်။ အခုဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ဘယ်သွားလို့ ဘယ်လာရမှန်း မသိဘူး၊ ရှိတဲ့ပိုက်ဆံ လေးနဲ့ ၀ယ်စားနေရတယ်၊ ထိုင်းစာတွေနဲ့ရေးထားတဲ့ စာရွက်မှာ လက်မှတ်တွေ အတင်းထိုးခိုင်းနေ တယ်၊ ထိုးတဲ့လူက ထိုးပြီးပြီ၊ ခုထက်ထိ အဖြူအမဲက မသဲကွဲသေးဘူး။”အလုပ်ထုတ်ခံရသူများသည် အလုပ်ထုတ်ခံရသည့်အပြင် ခြိမ်းခြောက်မှု ခံနေရသည်ဟု ယင်း အလုပ်သမား က ပြောသည်။“ကျနော်တို့က အပြင်ဆောင်မှာ ငှားနေရတယ်၊ တိုင်တဲ့လူတွေကို ထိုင်းလမ်းသရဲတွေနဲ့ ရိုက်ခိုင်းမယ် လို့ ပြောနေကြတယ်၊ အခုကြောက်နေတယ်၊ အိပ်လို့တောင် ကောင်းကောင်း မရဲဘူး။”အဆိုပါစက်ရုံတွင် မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၈၀၀ ခန့်နှင့် ထိုင်း အလုပ်သမား ၂၀၀ ခန့် ရှိကာ မဟာချိုင် မြို့တွင် မြန်မာအလုပ်သမား သုံးသိန်းကျော်ရှိပြီး အထည်ချုပ်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အသားငါး လုပ်ငန်းတွင် အများ စု လုပ်ကိုင်နေကြသည်။လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ကစတင်ပြီး ကမ္ဘာနှင့် အ၀ှမ်း စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ကြုံတွေ့ရစဉ် ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် မြန်မာအလုပ်သမားအများအပြား အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။ စက္ကူလေယာဉ်ချန်ပီယံ မြန်မာကလေးငယ်ကို ထိုင်းက ပတ်စ်ပို့ ထုတ်ပေးပြီ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 04 ရက် 2009 ခုနှစ် 16 နာရီ 46 မိနစ်ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မကြာမီကျင်းပမည့် စက္ကူလေယာဉ်ပစ် ပြိုင်ပွဲအား သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံဖွား မြန်မာကလေးငယ်တဦးကို ထိုင်းအစိုးရက နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ချင်းမိုင်မြို့ ဟွေဆိုင်းအရပ်ရှိ အစိုးရကျောင်းတခုတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ၁၂ နှစ်အရွယ် မောင်ထောင်းဒီးကို ထိုင်း-ဂျပန် အသွားအပြန် ခရီးစဉ်တခုထဲအတွက် ရက် ၉၀ ခရီးသွားလက်မှတ် ပေးအပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ The Nation ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားချက်အရ သိရသည်။ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လုံခြုံရေးကောင်စီတို့ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူပြီးနောက် လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။မောင်ထောင်းဒီး၏ မိဘများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့တွင် အလုပ်လုပ်နေသော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဖြစ်၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက အစောပိုင်းတွင် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ဘန်ကောက်မြို့တွင် ယခင်နှစ်က ကျင်းပခဲ့သော စက္ကူလေယာဉ်ပစ် ပြိုင်ပွဲတွင် မောင်ထောင်းဒီးက လေထဲ၌ ၁၂ ဒဿမ ၅၀ စက္ကန့်ကြာ ပျံဝဲနိုင်ရန် ပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့ကာ ပထမဆုရခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအား ကိုယ်စားပြု၍ ယခုလ ၁၉-၂၀ တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပရန်ရှိသော Origami Airplane စက္ကူလေယာဉ်ပစ်ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရန် အရည်အချင်းရှိသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျပန်ပြည် ဝင်ခွင့်ဗီဇာရပါက ယခုလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာဖွယ်ရှိသည်။မောင်ထောင်းဒီးသည် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ခ်ျချာချီဝနှင့် ပါလီမန် အဆောက်အဦ၌ ယမန်နေ့က တွေ့ခွင့်ရခဲ့သေးသည်။ဝန်ကြီးချုပ်က မောင်ထောင်းဒီးကို ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းသည် ထိုင်းအစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့် နိုင်ငံမဲ့ကလေးများနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကို ပြသသည့် ဥပမာကောင်းတခုဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ခရိုင်များနှင့်ပတ်သက်သော အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဌာနအကြီးအကဲ ဗွန်းဆက် စဝါဒီပါနစ်ကမူ ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံအချင်းချင်းကြား နားလည်မှုနှင့် စာချုပ်စာတမ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။သို့သော် မောင်ထောင်းဒီးသည် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား မိဘများမှ ဖွားမြင်သူဖြစ်ပြီး လာမည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ပို့ခံရမည့်သူများထဲတွင် ပါဝင်လျက်ရှိနေသေးကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် အစပိုင်း၌ ငြင်းဆိုခဲ့သဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ချောင်ဝရတ် ချန်ဝီရကွန်း ကို အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တရားရုံးတခုတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဖြင့် စွပ်စွဲ၍ အမှုဖွင့်ခဲ့သေးသည်။ ပညာရှင်များ၊ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများကလည်း ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြသည်။တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများရှိသော ကြောင့်တိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်သူများ အခက်အခဲကြုံတွေ့ ၅ စက်တင်ဘာ ရန်ကုန် ၊ ၊ယူကွန်Plight of Burmese Traditional Medicines Makersယခုနှစ်မေလမှစ၍ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန က တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကို အများပြည်သူသုံးစွဲရန်မသင့်ကြေညာခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ တွင် ထပ်မံ၍ တိုင်းရင်းဆေးဝါး ၁၄ မျိုးကို ထပ်မံကြေညာမှု ကြောင့် တိုင်းရင်း ဆေးဝါး ထုတ် လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အခက်အခဲ တွေ့ နေကြရသည် ဟု သတင်းရရှိသည်။စက်တင်ဘာလ ၂ ရက် ထုတ် မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော တိုင်းရင်းဆေးဝါး ၁၄ မျိုးကို မှတ်ပုံတင် ထားခြင်းမရှိ မှု ကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန က ပိတ်ပင်လိုက်သည် ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။ပိတ်ပင်ခံထားရသည့် တိုင်းရင်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်သူ တစ်ဦးက “အဘတို့ က ဒီဆေးတွေ ကို ငွေကြေး ဓန အင်အားနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ဘယဆေးဝါး နဲ့ လိုအပ်တဲ့ သစ်ဥသစ်ဖု တွေ ကြိုမှ ထားရတယ် ။တချိူ့ ပါဝင် ပစ္စည်းတွေ ဆိုရင် ရှားတယ် ၊တောထဲတောင်ထဲမှာ မုဆိုးတွေ ကို ငွေကြိူပေးပြီးမှာ ရတယ်။အများကြီးရင်းမထားနိုင်ဘူး၊ရောင်းရတဲ့ ငွေပြန်ပေါ်မှ နောက်ဆေး ထုတ်ဖို့ ထပ်ရင်းနိုင် တာ အခု တားမြစ်ခံထားရတော့ အလျှင်မမှီဘူး ၊နောက်ထပ်ရင်းဖို့ ခက်တယ် ”ဟု သူထုတ်လုပ်နေသည့် တိုင်းရင်းဆေးလုပ်ငန်း သဘာဝ ကိုFreedom News Group သို့ ပြောသည်။မေလ အတွင်းက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက မှတ်ပုံမတင်ထားသောကြောင့် အများပြည်သူ သုံးစွဲရန် မသင့်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည့် တိုင်းရင်းဆေးဝါး ၁၇ မျိုးတွင် အချို့ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူများမှာ နယ်မြို့ များမှ ဖြစ်သောကြောင့် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသည် ဟု သိရသည်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန က ထို သို့ ဆေးဝါးများပိတ်ပင် တားမြစ်မှုများရှိသော် လည်း လက်လုပ်လက်စား ပြည်သူ အများစု မှာ ကုန်စုံဆိုင် နှင့် ကွမ်းယာဆိုင်များတွင်ရောင်းချနေဆဲရှိသော ထိုပိတ်ပင်ခံထားရသည့် တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကို ပင် အားကိုးနေဆဲဖြစ်သည်။မန္တလေး မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲ ထိုင်းအဆိုတော် တာတာယန်း လာရောက်ဖျော်ဖြေမည်September 4, 2009 · LeaveaComment၄ သြဂုတ် မန္တလေး ၊ ၊ညွန့် သက်ထားဦးTata Young Join MNL Kick Off in Manadalyမန္တလေးမြို့ ဗထူးကွင်းတွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲ (၂ဝဝ၉)ခုနှစ် အတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အမေရိကန်နွယ်ဖွား ထိုင်းနာမည်ကြီး အဆိုတော် ဖြစ်သူ တာတာယန်း လာရောက်သီဆို ဖျော်ဖြေမည် ဟု သတင်းရရှိသည်။MNL ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် တာတာယန်း လာရောက်သီဆိုရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်နှင့် Air Bagan တို့ မှ စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာနေရှင် နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲများကို အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ကဲ့သို့ နှစ်ကျော့ခွဲ ကစားမည် ဖြစ်သည်။ ပထမ အကျော့ ကို စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်မှ အောက်တိုဘာလ နှောင်း ပိုင်းထိ ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးတွင် ကစားမည် ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အကျော့ကိုပွဲစဉ်များကို အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ မှ ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ ထိယှဉ်ပြိုင်ကစားမည် ဖြစ်သည်။ပြိုင်ပွဲတွင် အမှတ်အများဆုံး အသင်းကို မြန်မာ အမျိုးသားလိဂ် MNL အမှတ်ပေး ချန်ပီယံအဖြစ် သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပြီး အမှတ်ဇယားအလိုက် (၂ဝ၁ဝ)ပြည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် MNL ပြိုင်ပွဲအတွက် အဆင့်(၁)မှ(၈)အထိ သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ (၂ဝဝ၉)ခုနှစ် MNL အမှတ်ပေးချန်ပီယံသည် (၂ဝ၁ဝ)ပြည့်နှစ် အတွင်း ကျင်းပမည့် AFC, AFF ကလပ်အသင်းများ ပြိုင်ပွဲသို့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကလပ်အသင်း အဖြစ် ပါဝင် ကိုယ်စားပြုမည် ဖြစ်သည်။ ပထမအကျော့နှင့် ဒုတိယအကျော့ ပွဲစဉ်ကြား (၁၉၊၁ဝ၊၂ဝဝ၉)ရက်မှ (၃ဝ၊၁ဝ၊၂ဝဝ၉)ရက် အထိကို မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်း၏ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ ခြေစမ်းပွဲများ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနိုင်ရန် နားရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။တာတာယန်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ကထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သော ဆီးဂိမ်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် Rhythm of the Winner သီချင်းကို သီဆိုခဲ့သည်။( ပြီးခဲ့သည့် အာရှဖလား ပွဲတွင် လည်း အဖွင့်သီချင်းသီဆိုခဲ့)ထိုင်းနိုင်ငံသူ မိခင် နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံသားဖခင် တို့ မှ မွေးဖွားခဲ့သည်တာတာယန်းသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ် သူမ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်မှ စ၍ အနုပညာ လောကထဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။သူမ၏ Amita Tata Young အမည်ရှိ ပွဲဦးထွက် အယ်(လ)ဘမ်ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။၂၀၀၆ ခုနှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့သော သူမ၏ Dhoom Machale သီချင်းမှာမြန်မာ နိုင်ငံတွင်လူကြိုက်များသည်။မေလက ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာလိဂ် ကွင်းဖွင့်ပွဲကို သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ အဆိုတော် လေးဖြူ နှင့် အိုင်းရင်းခရောစ်အဖွဲ့ မှာ သီဆိုဖျော်ဖြေရန် စီစဉ်ထားသော်လည်းအာဏာပိုင်များက ပရိသတ် ထိမ်းမရ မည်ဆိုးသောကြောင့် ဟု အကြောင်းပြကာ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှလက်နက်များဖြင့် ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေွးွ့ကများအားပံ့ပိုး2009-09-04တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်က လာတဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို အီရန်ပွဲစားတွေက ဈေးပေါပေါနဲ့ ဝယ်ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းက အစ္စရေးလ်ဆန့်ကျင်ရေး ပါလက်စတိုင်း စစ်သွေွးွ့ကအဖွဲ့တွေ ဖြစ်တဲ့ ဟားမားနဲ့ ဟစ္စဘိုလာ သူပုန်တွေကို ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့ စက်တင်ဘာ ၃ရက် မနေ့က ထုတ်တဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် Wayne Madsen Report အင်တာနက်သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလို လက်နက် ပံ့ပိုးတာတွေကို အစ္စရေးလ်က မလိုလားတဲ့အတွက် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက ကိုးကန့်ဒေသ လက်နက်စက်ရုံကို ရှာဖွေရာကနေ ကိုးကန့် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ တရုတ်နိုင်ငံထဲက ထောက်လှမ်းရေး သတင်းတွေကို ကိုးကားပြီး သတင်းစာဆရာ Mr. Wayne Madsen က ရေးသားလိုက်ပါတယ်။Mr. Madsen နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။စစ်အစိုးရနှင့် KIO ကချင်အဖွဲ့ ဆွေးနွေးရန် စီစဉ်2009-09-04နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စကို ထပ်မံဆွေးနွေးဖို့ KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ စစ်အစိုးရ စစ်ဖက်ရေးရာ အရာရှိချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်နဲ့ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပေမဲ့ အစီအစဉ် ပျက်သွားခဲ့ရပြီး ရှေ့လာမဲ့ အပတ်အတွင်းမှာမှ တွေ့ဆုံနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း KIO ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဆိုင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။ဒီအတောအတွင်း KIO ထ်ိန်းချုပ်ရာဒေသအတွင်း စစ်အစိုးရတပ်တွေရဲ့ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ဒေသခံတွေ စိတ်မအေးဖြစ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး KIO ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဆိုင်းကို RFA အဖွဲ့သား ဦးဥာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။KIO ကချင်အဖွဲ့နှင့် စစ်အစိုးရတို့ နောက်တပတ်မှာ ဆွေးနွေးမည်2009-09-04မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ကေအိုင်အိုတို့ လာမဲ့သီတင်းပတ်ထဲမှာ တွေ့ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို စစ်အစိုးရတပ်တွေက အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ မကြာခင်က ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ကေအိုင်အိုနယ်မြေအတွင်း တပ်စွဲထားတဲ့ ကေအိုင်အေတပ်ကိုလည်း ဆက်ပြီး တိုက်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီး ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြချိန်မှာ ဒီသတင်းထွက်လာတာပါ။ဒီလိုတွေ့ဆုံဖို့ကိစ္စကို အစတုံးက ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့မှာ စီစဉ်ထားပေမဲ့ ပျက်သွားလို့ နောက်တပတ်ကို ရွှေ့လိုက်တာလို့ သိရပါတယ်။ အခုလာမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖွယ် ရှိတဲ့အကြောင်း ကေအိုင်အိုအဖွဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဆိုင်းက RFA ကို ခုလို ပြောပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဆိုင်း။ ။ 'အခုလိုနေတဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကိစ္စပဲ ဖြစ်မှာပါ၊ ကျနော်တို့က ခန့်မှန်းလို့တော့ မရသေးဘူးလေ။ နေပြည်တော်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်လည်း ရောက်လာမယ်လို့တော့ သတင်းရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မသေချာသေးဘူးခင်ဗျ။'လွန်ခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ကလည်း မြန်မာစစ်အစိုးရ စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးကြီးတယောက် ဦးဆောင်ပြီးတော့ လိုင်ဇာမြို့က ကေအိုင်အို ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်၊ အဲဒီတုံးက ကိုးကန့်ဒေသရဲ့ အခြေအနေ တွေကို လာရှင်းပြတာလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဆိုင်းက ပြောပါတယ်၊ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဆိုင်း။ ။ 'ကိုးကန့်က အခြေအနေ နောက်အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို အဖြစ်အပျက် ဖြစ်တယ် ဒါကို အမြန်ဆုံးသူတို့က ပြေလည်အောင်လုပ်မယ် ဒီလောက်ပါပဲ သူတို့ပြောတာ။'ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ကေအိုင်အိုဟာ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ် စောစောပိုင်းမှာ အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေအားလုံးကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းဖို့ စစ်အစိုးရက တောင်းဆိုတာကို ငြင်းဆန်တဲ့အထဲမှာ ကေအိုင်အိုလည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကေအိုင်အိုဟာ စစ်အစိုးရတပ်တွေ မကြာခင်က တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်အဖွဲ့နဲ့လည်း စစ်ရေးမဟာမိတ် လုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယသံဃာများညီညွတ်ဖို့ စာသင်သား ရဟန်းများ တိုက်တွန်းလှုပ်ရှား2009-09-04မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း မကွေးတိုင်းအတွင်း သံဃာတော်တချို့ကို ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့အပြီး သောသုသနသမဂ္ဂ ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေ ပခုက္ကူမြို့ စာသင်တိုက်ကြီးတွေအတွင်းမှာ သံဃာတော်တွေကို ညီညွတ်ဖို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်တဲ့ စာရွက်တွေ ကပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုစပြီး လုပ်နေတယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ပခုက္ကူက စာသင်တိုက်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ မဟာဝိဇယာရာမ ပါဠိတက္ကသိုလ် အရှေ့တိုက်၊ မဟာသုဇိတာရာမ အလယ်တိုက် ၊ မဟာဝိပုလာရာမ အနောက်တိုက် စတဲ့ စာသင်တိုက်ကြီးတွေမှာ စာသင်သား သံဃာတော်များအဖွဲ့လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ သောသုသနသမဂ္ဂအဖွဲ့ က စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ကစပြီး လုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သောသုသနသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် စာသင်သား သံဃာတပါးက အခုလို မိန့်ပါတယ်။စာသင်သား သံဃာ။ ။ 'စာလုံးပွိုင့်ကြီးကြီးနဲ့ အရေးကြီးပြီး သွေးစည်းကြစို့ ညီနောင်တို့ သောသုသန သမဂ္ဂ ဆိုပြီးတော့ စာရွက်စာတမ်း ကပ်တာတွေတော့ ရှိတယ်လေ။'ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ကစလို့ မကွေးတိုင်း ရေနံချောင်း၊ ချောက်နဲ့ ပခုက္ကူမြို့တွေမှာ သံဃာတော်တွေ အဖမ်းအဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ဒီလိုလုပ်ရပ်အပေါ် ပခုက္ကူ သံဃာတော်တွေအနေနဲ့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေပြီး သောသုသနသမဂ္ဂအဖွဲ့ အနေနဲ့ ဖမ်းဆီခံ သံဃာတော်တွေ ပြန်လွတ်အောင် ကြိုပမ်းလုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိကြောင်း စောစောက သံဃာတော်ကပဲ အခုလို ဆက်မိန့်ပါတယ်။စာသင်သား သံဃာ။ ။ 'ခဏတွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုပြီ မလိမ့်တပတ်နဲ့ ခေါ်သွားတာဆိုတော့ ဒေါသတွေ ထွက်နေကြတယ်လေ။ ရဲထောက်လှမ်းရေးကနေတဆင့်ပေါ့နော်။ ဦးဇင်းကိုလည်း အရင်က ဝင်ထွက်ပြီးတော့ ဆရာဒကာဆိုပြီး လုပ်ထားတာပဲလေ၊ ဒီနေ့ဆရာဒကာ အလုပ်ခံထားရတဲ့ ဦးဇင်းတွေကိုက စိုးရိမ်နေကြတယ်၊ သံဃာတွေကတော့ ဒီလို မတရားဖမ်းဆီးထားတာ ဘယ်သူကမှ မကျေနပ်ကြဘူး။ ဒီဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတာကို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ လွတ်မြောက်အောင် တက်နိုင်သမျှ တက်စွမ်းသမျှ နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။'စာရွက်စာတမ်းတွေကပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ စခဲ့တဲ့နေ့ ညနေပိုင်းမှာ အရှေ့တိုက်က သံဃာတော်တွေကို တိုက်အုပ်ဆရာတော်လည်းဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော် သြဝါဒစရိယ ဆရာတော် ဦးနိမ္မိန္ဓက တပည့်စာသင်သား သံဃာတော်တွေကို ဝိပဿနာ အလုပ်နဲ့ စာသင်စာချအလုပ်ကို လုပ်ဖို့နဲ့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ လောကီအလုပ်တွေကို မလုပ်ဖို့၊ တခုခု ပြဿနာတက်လာရင် ဆရာတော်ကြီးအနေနဲ့ တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။မုန်းလားဒေသခံများ တရုတ်ပိုင်နက်ထဲ ပြေးဝင်နေကြ2009-09-04ကိုးကန့်ဒေသမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် တရုတ်ပိုင်နက်ထဲ ပြေးလာတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီနိုင်ရေးအတွက် ဒုက္ခသည်တွေရှိရာကို သွားခွင့်ပြုဖို့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက တရုတ်အစိုးရကို ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်မှာ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ပူးတွဲ ကူညီသွားနိုင်ရေးအတွက် တရုတ်အစိုးရက အပြုသဘောဆောင် စဉ်းစားပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း၊ တရုတ် မြန်မာနယ်စပ် ဝဒေသမှာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး စစ်ပြေးဒုက္ခသည် နောက်ထပ်တိုးလာမဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိနေစဉ်မှာ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အရေးကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရဖို့ မိမိတို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း UNHCR ဌာနေကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါတယ်၊ဒီအတောအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်က အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် ဖီးနစ်ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ ကောလာဟလ ထုတ်လွှင့်မှုတွေကြောင့် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် မုန်းလားဒေသခံတွေ ဈေးဆိုင်ကို ရရာဈေးနဲ့ ရောင်းပြီး တရုတ်ပိုင်နက်ထဲ ပြေးဝင်နေကြတယ်လို့ နယ်စပ် စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောက ပြောပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်ဇော။ ။ 'ပြဿနာက မုန်းလားမှာ၊ ဟို မုန်းလားဆိုတာ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာ၊ နယ်စပ်ဒေသမှာ ရှိတဲ့ ဒေသခံ တရုတ်တွေကတော့ ဆိုင်တွေကို လျှော့ဈေးတွေ အကုန်လျှော့ရောင်း၊ ဆိုင်လုံးက္ဆွတ်ရောင်းတာတောင် ရှိတယ်။ ရောင်းပြီးတော့ တရုတ်ပြည်ဖက်ကမ်း ပြေးကြတယ် ပြောတယ်။ ၃ ရက်နေ့က နေ့ခင်းဖက် ဟောင်ကောင်က ဖီးနစ်စ် တီဗီကနေပြီးတော့ ထုတ်တဲ့ သတင်းကလည်း ဦးစိုင်းလင်းဒေသနဲ့ ဝနဲ့ ကြားမှာ ဗမာစစ်တပ်က တင့်ကား အစီး ၂ဝ ဝင်လာတယ်လို့ သတင်းက ထွက်တာကိုး။ အဲဒီမှာ လန့်ဖျပ်ပြီးတော့ ပြေးကြတယ်။ အဲလို ဖြစ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒီသတင်းက အမှန်လည်း မဟုတ်ဖူးလေ၊ အမှားကြီးကို။ ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း လိုင်ဇာဖက်မှာ အဲလို ပြေးမှုလွှားမှု တချို့ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ မုန်းလားဆိုလို့ရှိရင် မြို့က ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ် ဖြစ်နေတယ်။ ပန်ဆန်းမှာလည်း အဲလိုပဲ။'မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေမှာတော့ ကိုးကန့် ပြည်သူ သုံးသောင်းခုနစ်ထောင်လောက် တရုတ်ဖက် ထွက်ပြေးသွားတဲ့အနက် ကိုးထောင်ကျော် မြန်မာပြည်ထဲကို ပြန်လာနေပြီလို့ ရေးသားပါတယ်။ဒါ့အပြင် စစ်အစိုးရသတင်းစာမှာ ကိုးကန့်ဒေသတွင်း W.Y တံဆိပ် မူးယစ်ဆေးပြား တသိန်းခြောက်သောင်းနီးပါးကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသူ ဦးဇော်ညွန့်ကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီရင်2009-09-04အင်းစိန်ထောင်တရားရုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးတဲ့ မေလ ၂၈ ရက်နေ့က သူ့ကို လွှတ်ပေးဖို့ စာတမ်းကိုင်ဆောင်ပြီး အင်းစိန်ဈေးရှေ့ တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက် အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ဦးဇော်ညွန့်ကို ဒီနေ့ အင်းစိန်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် အပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီနေ့ ရုံးချိန်းကို ရှေ့နေ ဦးမောင်မောင်လတ်နဲ့အတူ ဦးဇော်ညွန့်ရဲ့ တူဖြစ်သူနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးတင်တဲ့နေ့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး စာတမ်းကိုင်ဆောင် ဆန္ဒပြလို့ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ကိုထွေးသိန်း ရဲ့ ဇနီး ဖြစ်သူတို့လည်း သွားရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် အပြစ်ပေးခံရတဲ့ ဦးဇော်ညွန့်က မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အင်အားစုတွေကို လူထုတရပ်လုံက ထောက်ခံ ပူးပေါင်းကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါကြောင်း ၊ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်လို အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အားလုံး ဝိုင်းဝန်း စောင့်ရှောက်ကြစေချင်ကြောင်း ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မမေ့မလျော့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်ကြစေလိုကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် သူလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်လို့ အခုလို အပြစ်ပေးခံရတာကို သူ့အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူပါကြောင်း တူဖြစ်သူကို ပြောခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု အယူခံ ကြားနာဖို့ တရားရုံး သဘောတူ2009-09-04နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ ချမှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးမှာ စက်တင်ဘာ ၃ ရက် မနေ့က တင်သွင်းလိုက်တဲ့ အယူခံလျှောက်ထားမှုကို လက်ခံကြားနာဖို့ တရားရုံးက ဒီကနေ့ သဘောတူလိုက်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။ဦးကြည်ဝင်း။ ။ 'ဒီနေ့ က္ဆွန်တော်တို့ တင်တဲ့ အယူခံလွှာ၊ တိုင်းရုံးကလေ၊ ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးက လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပါပဲ၊ လက်ခံသင့် မသင့်ပေါ့ဗျာ၊ ကြားနာတယ်ဆိုပြီးတော့ တရားသူကြီးက ကြားနာတယ်။ အဲ က္ဆွန်တော်တို့ လျှောက်ကြတယ်။ လျှောက်လဲတော့ကာ လျှောက်လဲချက်တွေ အားလုံး ပြီးသွားတဲ့အခါကျ တရားသူကြီးက အမိန့် တခါတည်း တန်းချတယ်ဗျ၊ လက်ခံတယ်တဲ့။'အယူခံမှုကို လာမဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ နှစ်ဖက်ရှေ့နေတွေ အပြန်အလှန်လျှောက်လဲဖို့ တရားရုံးက ချိန်းဆိုလိုက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့ သားအမိ အယူခံတင်တဲ့ ကိစ္စအတွက်ပါ ကြားနာဖို့ တရားရုံးက လက်ခံလိုက်တယ်လို့ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။အယူခံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ အပြစ်မရှိကြောင်း အချက် ၁၁ ချက်ကို အခိုင်အလုံ ဖော်ပြထားပြီး၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ချုပ်ငြိမ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ၁၉၇၄ ခုနှစ်အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းထားမှုကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ အဓိကအချက်အနေနဲ့ တောင်းဆိုမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။၁၉၇၄ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ချုပ်ငြိမ်းကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ ၄ ကြိမ်ခန့် ပြောကြားခဲ့တာတွေကို တရားရုံးက လက်ခံအတည်ပြုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လုံးဝလွှတ်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ဦးကြည်ဝင်း။ ။ 'ကွင်းလုံးက္ဆွတ်ကို လွှတ်ကို လွှတ်ပေးရမယ်၊ လွှတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်အတိုင်းအတာထိအောင် ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ သူ့ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်က ၅ နှစ်ကျော် ဟုတ်လား ၆ နှစ်နီးပါး ဟုတ်လား ၉၅ ကျမှ ပြန်လွှတ်တာကိုးဗျ။ အဲတော့ အဲဒီအကျယ်ချုပ်က နံပါတ်တစ်၊ နောက်တခါ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်မှာ မီးရထားဘူတာက ဖြစ်တဲ့ တနှစ်နဲ့ ခုနစ်လ အကျယ်ချုပ် လုပ်လိုက်တာက နံပါတ်နှစ်။ နောက် အခု ၂ဝဝ၃ ဒီပဲယင်းပြီးတော့ အခုထိအောင် လုပ်လိုက်တဲ့ အကျယ်ချုပ်က အဲဒါ နံပါတ်သုံး။ အဲဒါတွေက အားလုံးက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ unlawful illegal detention တွေ ဖြစ်သွားမယ်။'အယူခံမှုကြာနာမဲ့ ၁၈ ရက်နေ့ မတိုင်ခင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ အာဏာပိုင်တွေထံ တင်ပြမယ်လို့လည်း ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ Summary only...
ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာ ဘာသာကြီးလေးခု (ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူ) အကြောင်းအား ထည့်သင်မယ်ဆိုတာ - Download Zawgyi Font
( Password alphazawgyi )
To write in burmese dl here